pair တစုံနှောင်ကြိုး၏ neurobiology: လူမှုရေး monogamous ကြွက်မှထိုးထွင်းသိမြင်မှု (၂၀၁၁) - Your Brain On Porn
pair တစုံဘွန်း၏ neurobiology: တစ်လူမှုရေးအရ monogamous ကြွက် (2011) မှထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို
တပ်ဦး Neuroendocrinol ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC ဇန်နဝါရီ 1, 2012 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
တပ်ဦး Neuroendocrinol ။ ဇန်နဝါရီ 2011; 32 (1): 53-69 ။
သြဂုတ် 3, 2010 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.yfrne.2010.07.006
Kimberly အေလူငယ်, Kyle အယ်လ် Gobrogge, yan လျူနှင့် Zuoxin ဝမ်*
ထုတ်ဝေသူ၏နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ထားသောဤဆောင်းပါးတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် တပ်ဦး Neuroendocrinol
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအိမ်ထောင်ဖက် (ဆိုလိုသည်မှာ pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်) အကြား၌အမြဲတည်သောဆက်ဆံရေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းလူ့လူမှုရေးအပြုအမူ၏အရေးပါသောလက္ခဏာပင်ဖြစ်သည်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ဦးစလုံးကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။ သို့သော်ကြောင့်ထိုအနှောငျကွိုး၏မွေးရာပါရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်အခြားနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နှင့်အတူဆွေမျိုးရှားပါးဖို့ကျနော်တို့ဟာသူတို့ရဲ့နောက်ခံ neurobiology အကြောင်းကိုအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်နည်းနည်းကိုငါသိ၏။ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole (ကျော်Microtus ochrogaster) pair တစုံဘွန်း၏တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဒီလူမှုရေးအရ monogamous ကြွက်များတွင်သုတေသန pair တစုံဘွန်းအပြုအမူတွေကိုထိန်းညှိသော neurobiological ယန္တရားများသို့တန်ဖိုးရှိသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ကဤလေ့လာမှုများပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့် Bond တွဲဖို့မွေးရာပါသုံးအပြုအမူတွေများ၏အာရုံကြောစည်းမျဉ်းဆွေးနွေးရန်: ဖက်ဦးစားပေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်း, ကျွမ်းတဝင်မရှိသော conspecifics ဆီသို့ရွေးချယ်ကျူးကျော်များ၏နောက်ဆက်တွဲဖွံ့ဖြိုးရေး, နှင့်လူငယ်၏ bi-မိဘစောင့်ရှောက်မှု။ ကျနော်တို့ကဤအပြုအမူ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် vasopressin, oxytocin နှင့် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအာရုံစိုက်, ဒါပေမယ့်လည်းအခြားအ neuropeptides, neurotransmitters နှင့်ဟော်မုန်းများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုဆွေးနွေးပါ။ ဒီလေ့လာမှုတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မျိုးစိတ်အတွက် pair တစုံဘွန်း၏နားလည်မှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေခြင်းငှါမသာ, ဒါပေမယ့်လည်းအများအပြားစိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းအတွက်မှတ်ချက်ပြုလူမှုရေးလိုငွေပြမှု၏အခြေခံအကြောင်းတရားများသို့ထိုးထွင်းသိမြင်ပူဇော်စေနိုင်သည်။
keywords: လူမှုပူးတွဲမှု, ကျူးကျော်, အဖေဘက်ကအမူအကျင့်, vasopressin, oxytocin, dopamine, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole, မယား
မကြာခဏရင်ခုန်စရာသို့မဟုတ်အသည်းအသန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအဖြစ်ရည်ညွှန်းအိမ်ထောင်ဖက်အကြားပြင်းထန်သောဆွဲဆောင်မှု, လူ့လူမှုရေးအပြုအမူကားမောင်းအာဏာအရှိဆုံးအင်အားစုတွေတဦးဖြစ်ပြီး, မကြာခဏလိင်ဆက်ဆံဖက်အကြားမွဲ, ရွေးချယ် attachment များကို (ဆိုလိုသည်မှာ pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်) ၏ဖွဲ့စည်းခြင်း precedes ။ ထိုကဲ့သို့သော sociosexual ပူးတွဲ monogamous လူမှုရေးအဖှဲ့အစညျးနှငျ့စက်မှုယဉ်ကျေးမှုအတွက်အများဆုံးဖြစ်ကြောင်းသော်လည်း, သူတို့သည်မသက်ဆိုင်ဝမ်းစာ mode ကို (ဥပမာ pastoralist, စိုက်ပျိုးရေး, etc) သို့မဟုတ်မိတ်လိုက်မဟာဗျူဟာ (ဥပမာ, မယားအမြားယူနှင့်မယား) ၏အတွက်အားလုံးနီးပါးလူ့လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပေါ်ခြင်း, ထို့ကြောင့်လူ့လူမှုရေးအပြုအမူတစ်ခုအခ်ါအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တစ်စုံနှောင်ကြိုး၏အဓိပ္ပါယ်စာပေလျှောက်လုံးကွဲပြားနေစဉ်တွင်, က (ပုံမှန်အားဖြင့်နှစ်ခုလိင်ရင့်ကျက်လူကြီးများအကြားဖွဲ့စည်းခဲ့ကာမွဲဦးစားပေးအသင်းအဖွဲ့အဖြစ်မျိုးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီး, ဖော်ပြထားသည်, ရွေးချယ်အဆက်အသွယ်, ဆက်နွယ်မှုနှင့်လူစိမ်းကျော်မိတ်ဖက်နှင့်အတူသုတ်ရည်ထိဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည် မိတ်ဖက် preference ကို)  ။ တစ်ဖက်တစ် preference ကိုအပြင်အခြားအပြုအမူတွေကိုအမျိုးမျိုးပင်ကိုစရိုက်ကဤရှုပ်ထွေးလူမှုရေးနှောင်ကြိုးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်လူသားများအတွက်အဖြစ်ကိုအခြားနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ်အတွက်တစ်စုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်, မှန်မှန် [အိမ်ထောင်ဖက်-စောငျ့ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြိုင်ဘက်ဆီသို့ဦးတည်ဥပမာအလွန်အမင်းရန်လိုသည့်အပြုအမူ) နှင့်ငယ်ရွယ်ရဲ့ bi-မိဘစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်32, 86, 136] ။ အကြံပြုထားတဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သီအိုရီ၏မှန်ဘီလူးမှတဆင့်ကြည့်ရှုအားပေးသည့်အခါတစ်စုံ-ကပ်လျက်တည်ရှိတစ်ဦးချင်းစီတွင်ဤအပြုအမူ၏ Co-ဖြစ်ပျက်မှုသဘာဝကျပါတယ်, စိတျအပိုငျးရှိကြောင်း pair တစုံဘွန်းနောက်ထပ်မိဘရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုငယ်ရွယ်များ၏အောင်မြင်သောမွေးမြူသေချာစေရန်လိုအပ်ခဲ့သည့်အတွက်အခြေအနေများအောက်တွင်သပ္ပါယ်ဖြစ်လာခဲ့သည် [45, 85, 89, 105, 208] ။ အမှန်မှာသားစဉ်မြေးဆက်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအဘို့မိဘနှစ်ပါးစလုံး၏ရှေ့မှောက်တွင် necessitated သောတူညီရွေးချယ်ရေးဖိအားဖွယ်ရှိ [အိမ်ထောင်ဖက်အကြားမိတ်ဖက်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းလွယ်ကူချောမွေ့မယ်လို့86] နှင့်ဤမိတ်ဖက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ရာမှတဆင့်ယန္တရားများ (ဥပမာ, မိတ်-Guard) ။
လူသားတွေအတွက် pair တစုံဘွန်း၏အလုပ်လုပ်တဲ့အရေးပါမှု Cross-ယဉ်ကျေးမှုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တွဲတစ်ဦးချင်းစီ, တည်ငြိမ်အိမ်ထောင်ရေးဆက်ဆံရေးအတွက်အထူးသဖြင့်သူများ, ၎င်းတို့၏ unpaired များထက်အသက်ပိုရှည်တဲ့တွေ့ရှိချက်လူဦးရေဆိုင်ရာအုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးမှတ်ချက်ချ [116, 144] ။ [ထို့အပြင်အားလုံးအကြားနွေးထွေးမှု၏မြင့်မားပြောင်းပြန်ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ဓာတ်ခံစားချက်အဖြစ်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များ, ဆက်နွယ်နေကြောင်းသိရသည်နှင့်အပြုသဘောကိုယ်ခံစွမ်းအား function ကိုနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဆက်နွယ်နေကြောင်း131, 212] ။ လူသားတွေအတွက် pair တစုံဘွန်း၏နောက်ထပ်ကျယ်ပြန့်အသိအမှတ်ပြုအကျိုးအတွက်အခြားမျိုးစိတ်၌ရှိသကဲ့သို့, သားသမီးများ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာကြောင့်ငယ်ရွယ်များ၏ bi-မိဘစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူ pair တစုံဘွန်း၏ Co-ဖြစ်ပျက်မှုဖွယ်ရှိတစ်ခုသက်ရောက်သည်။ အမှန်စင်စစ်ကလေးထိန်းအတွက်အဖေဘက်ကပါဝင်ပတ်သက်မှုပိုမိုအောင်မြင်သောကလေးဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်မိခင်လွှမ်းမိုးမှုအဖြစ်အညီအမျှအရေးကြီးသောအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုဖြစ်လာသည်။ preindustrial လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအတွက်, အစားအသောက်နှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအလွယ်တကူရရှိနိုင်မဟုတျပါရှိရာဥပမာ, အဘို့, monogamously အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးကလေးများ [လက်ထပ်တစ်ခုသို့မဟုတ် polygynous ပြည်ထောင်စုထဲမှာသူမဟုတ်သူကိုအမျိုးသမီးတွေကလေးတွေထက်နိမ့်သေဆုံးမှုနှုန်းများ206] ။ ပညာရေးဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောညွှန်းကိန်းအပေါ်ကလေးကအောင်မြင်မှုအဆင့်မြင့်တို့ကညွှန်ပြအဖြစ်စက်မှုလူ့အဖွဲ့အစည်းများတွင်ဂရုစိုက်တတ်တဲ့ဘိုးဘေးများ၏ရှေ့မှောက်တွင် [, သားသမီးများ၏စိတ်ခံစားမှုနှင့်သိမြင်မှုကနျြးမာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်41, 71, 83, 88, 181, 191] နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုပြဿနာများ၏ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်ကုသမှု  အာရုံစိုက်မှု-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါ (ADHD)  ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုနှင့်ရာဇဝတ်မှုအပြုအမူ .
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအိမ်ထောင်ဖက်အကြားအမြဲတည်သောခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏သားသမီးများ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထို့အပြင်လူ့အဖွဲ့အစည်းတည်ငြိမ်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ပေမဲ့ကျနော်တို့ pair တစုံဘွန်း၏ neurobiology အကြောင်းကိုအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်နည်းနည်းကိုငါသိ၏။ ဤသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအမူအကျင့် neuroendocrinology ၏လေ့လာမှုတွင်အသုံးပြုရိုးရာဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်စုံနှောင်ကြိုးများ၏အမူအကျင့်လက္ခဏာများမပြကြဘူး, အရှင် pair တစုံဘွန်း၏လေ့လာမှုများအတွက်မော်ဒယ်စနစ်များအဖြစ်အသုံးပြုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်သည်။ nontraditional တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအမျိုးမျိုး marmoset နှင့် titi မျောက်အပါအဝင်, ဒီရှားပါးအပြုအမူလေ့လာဖို့ပေါ်ထွက်လာပါပြီနေချိန်မှာ [15, 197] နှင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားကြွက် [24-26, 59, 189] ကျွန်တော် ပို. ပို. လူကြိုက်များဖြစ်လာတော်မူကြောင်းကိုတဦးတည်းကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်; မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole (Microtus ochrogaster) ။ ကျနော်တို့မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole pair တစုံဘွန်းအပြုအမူမှတ်တမ်းတင်ကြောင်းလယ်ပြင်နှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုများဖော်ပြခြင်းဖြင့်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါမှသာမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ Bond အပြုအမူများ၏အာရုံကြောဆက်စပ်ဖော်ပြထားကြောင်းဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာအစောပိုင်းအလုပ်ဆှေးနှေးပါမညျ။ Next ကိုကျနော်တို့ pair တစုံဘွန်းနဲ့ဆက်စပ်သုံးသီးခြားအပြုအမူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့် neurobiological ယန္တရားများဆွေးနွေးရန်တော်မူမည် မိတ်ဖက်ဦးစားပေး, ကျွမ်းတဝင်မရှိသော conspecifics ဆီသို့ရွေးချယ်ကျူးကျော်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ငယ်ရွယ်-အာရုံမိခင်စောင့်ရှောက်မှုအားလုံးနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ်မှဘုံသည်နှင့်ကျယ်ပြန့် [တခြားနေရာပြန်လည်သုံးသပ်လျက်ရှိသည်အဖြစ်ဖေဘက်ကစောင့်ရှောက်မှုအပေါ်အဓိကအား၏ bi-မိဘစောင့်ရှောက်မှု၏ဖွဲ့စည်းခြင်း31, 170, 171, 199] ။ ကျနော်တို့ကဤအပြုအမူအတွက် vasopressin (AVP) မိုင်နိုအက်စစ်ဟာ neuropeptides ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့် oxytocin (OT) နှင့် neurotransmitter dopamine (DA) ကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်လည်း pair တစုံဘွန်း်ပတ်သက်နေခဲ့သောအခြား neurochemicals ပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီ neurochemicals pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုထိန်းညှိရန်အတူတကွအလုပ်လုပ်ပုံကိုစူးစမ်းလေ့လာပါလိမ့်မယ်။
2 ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole မော်ဒယ်
2.1 ။ အပြုအမူ၏ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုများ
မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole [ဗဟိုအမရေိကနျပွညျထောငျစု၏မြက်ခင်းပြင်ထဲမှာအဓိကအားဖြင့်အသက်ရှင်တော်မူသည်တဲ့လူမှုရေးအရ monogamous ကြွက်မျိုးစိတ်ဖြစ်ပါတယ်106] ။ ဒါဟာ [န့်အသတ်အစားအစာအရင်းအမြစ်များနှင့်ရှားပါးရေရိက္ခာများနှင့်အတူ, ဒီကြမ်းတမ်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုက်လျောညီထွေအကြံပြုထားသည်27, 92, 159], [ဒီမျိုးစိတ်အတွက်လူမှုရေးအရ monogamous ဘဝမဟာဗျူဟာ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်မှလှူဒါန်းခဲ့ကြပေမည်38, 218].1 voles prairie ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုကမ်းလှမ်းမျိုးစုံ-ဖမ်းထောင်ချောက်ကိုအသုံးပြုပြီးအစောပိုင်းလယ်ပြင်လေ့လာမှုတွေရေရှည်ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းရန်နှင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုအားလုံးအကြိမ်ကြိမ်အတူတူဖမ်းခံခဲ့ရသကဲ့သို့, ရိုင်းအတွက်အတူတကွသွားလာ  ။ ထို့ပြင် radiotelemetry ၏အသုံးပြုမှုကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးမွေးမြူခြင်းနှင့် nonbreeding ရာသီကာလအတွင်းအသိုက်နှင့်ရှယ်ယာအိမ်မှာပ္ပံသိမ်းပိုက် co- ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုအားလုံးအဆိုပါလေ့လာရေးအဘို့အခွင့်ပြုခဲ့ထပ်-ထောင်ချောက်တွေနဲ့ပေါင်းစပ် [69, 94, 95] ။ အပိုဆောင်းလေ့လာမှုများတဦးတည်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကွယ်လွန်သည်အထိထိုကဲ့သို့မွေးမြူရေးအားလုံးပုံမှန်အားအတူတကွဆက်လက်တည်ရှိနှင့်များစွာသောကိစ္စရပ်များတွင်, အကျန်ရစ်သူမိတ်ဖက် [အသစ်တစ်ခုအိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူတွဲမထားဘူးကြောင်းသရုပ်ပြ38, 96, 97] ။ ထို့ပြင်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အသိုက်နှင့်နေအိမ်အကွာအဝေး၏အနီးတစ်ဝိုက်ကနေကျွမ်းတဝင်မရှိသောယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းဖယ်ထုတ်ပြီးအသုံးပြုပုံအသိုက် Guard အထောက်အကူပြုနှင့်လည်းအသိုက်အဆောက်အဦအထောက်အကူပြု [97, 205] ။ အထီးမိဘအပြုအမူတွေကြောင့်အထက်ဖော်ပြထားတဲ့တွေ့ရှိချက်များနှင့်အခြား monogamous မျိုးစိတ်တှငျတှေ့အဖေဘက်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏မြင့်ဒီဂရီမှ, သဘာဝအခြေအနေများအတွက်စောငျ့ရှောကျဖို့ခက်ခဲခဲ့ကြပေမဲ့လည်းကအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အလွန်အမင်းအဖေဘက်ကဖြစ်ကြောင်းခန့်မှန်းခဲ့သည် [205, 230], ဤခန့်မှန်းချက်ဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေများအောက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအမူအကျင့်လေ့လာမှုများအတွက်အတည်ပြုခဲ့သည်ခဲ့သည်။
2.2 ။ အပြုအမူ၏ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုများ
မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole pair တစုံဘွန်းအပြုအမူတွေကိုကျယ်ပြန့်ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာသွင်ပြင်လက္ခဏာပါပြီ။ လိင်ရင်တော့မှားမယ်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles [အလွန်အမင်းလူမှုရေးဖြစ်ကြပြီး conspecifics ဆီသို့ nonselective Affiliate အပြုအမူဖော်ပြရန်194] ။ တိုးချဲ့တွဲပြီးနှင့် / သို့မဟုတ်မိတ်လိုက်ပြီးနောက်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles [သူတို့အကျွမ်းတဝင်မိတ်ဖက်များအတွက်လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး68, 69, 102, 229] ။ ဒါကရွေးချယ်ဆက်နွယ်မှု (သင်္ဘောသဖန်း 1A) [ကျွမ်းတဝင်မရှိသော conspecifics ဆီသို့ရွေးချယ်ကျူးကျော်ဖြင့်လိုက်ပါသွားဖြစ်ပါတယ်8, 99, 100, 124, 223, 224, 231] ။ ထို့အပြင်အဆိုပါ mated pair တစုံအစုရှယ်ယာတစ်အသိုက် [ကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်းအတူတကွဖြစ်နေဆဲနှင့်နို့တစ်လျှောက်လုံး bi-မိဘစောင့်ရှောက်မှုပြသ158, 174] ။ အောက်တွင်ကျနော်တို့အသေးစိတ်တွင်ဤအပြုအမူတို့ကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုသောအမူအကျင့် Paradigm ကိုဖော်ပြရန်။
pair တစုံဘွန်းနှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေ၏ဓာတ်ခွဲခန်းစရိုက်လက္ခဏာတွေ။ (က) ဓာတ်ပုံ side-by-side အဆက်အသွယ်ပြသနေတဲ့ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ဖော်ပြသည်။ (ခ) သုံးအခန်းထဲကယန္တရားဖက်ဦးစားပေးဘို့စမ်းသပ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ သုံးတူညီအိတ်များချိတ်ဆက်ထား ...
မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း [pair တစုံဘွန်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောအညွှန်းကိန်းဖြစ်ပြီး, ရွေးချယ်အဆက်အသွယ်, ဆက်နွယ်မှုနှင့်လူစိမ်းကျော်မိတ်ဖက်နှင့်အတူသုတ်ရည်ထိဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည်105] ။ ထိန်းချုပ်ထားသောပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ဒီအပြုအမူပထမဦးဆုံးဒေါက်တာ Sue Carter က၏ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်ဖွံ့ဖြိုးပြီးသုံးအခန်းထဲကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်သုံးပြီးလေ့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်  နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်တခြားဓါတ်ခွဲခန်းများကမွေးစားခဲ့သည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်ယန္တရားနှစ်ခုမှာတူညီလှောင်အိမ်မှဆွန်းပြွန်ခြင်းဖြင့်ချိတ်ဆက်သောဗဟိုလှောင်အိမ်တစ်ခုအကျွမ်းတဝင်တိရိစ္ဆာန် (မိတ်ဖက်) ပါဝင်တဲ့တဦးတည်းနှင့်အခြားတစ်ဦးကျွမ်းတဝင်မရှိသောတိရိစ္ဆာန် (လူစိမ်း) (ပါဝင်ပါသည်သင်္ဘောသဖန်း 1B) ။ အဲဒီနှစျခုလှုံ့ဆော်မှုတိရိစ္ဆာန်များဟာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအိတ်များထဲသို့ထိထိရောက်ရောက်မ tethering ဖြစ်ကြပြီးအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ခွင့်ပြုမထားပေ။ တစ်ဦး 3-နာရီမိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်ကာလအတွင်းဘာသာရပ်ဗဟိုခနျးထဲသို့ချထားနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းယန္တရားလျှောက်လုံးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွှေ့ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အချို့သောဓါတ်ခွဲခန်းများတွင်တစ်စိတ်ကြိုက်ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်-အတွက်ချိတ်ဆက်သောဆွန်းပြွန်တစ်လျှောက်ရှိနေရာချ photobeam အလင်းအာရုံခံကိရိယာများနှင့် တွဲဖက်. ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းစီကိုလှောင်အိမ်များနှင့်လှောင်အိမ် entries တွေကိုများ၏အကြိမ်ရေအတွက်သုံးစွဲထိုကာလ၏ပမာဏစောင့်ကြည့်ဖို့အသုံးပြုအိတ်များ-ဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်လိုက်နဲ့ side-by-side အဆက်အသွယ်အပါအဝင်လူမှုအပြုအမူ, ဤစမ်းသပ်မှုစဉ်အတွင်းဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်နောက်ပိုင်းတွင် quantified နေကြသည်။ ဘာသာရပ်သူစိမ်းတွေနဲ့ထက်မိတ်ဖက်နှင့်အတူ side-by-side အဆက်အသွယ်သိသိသာသာပိုပြီးအချိန်သုံးစွဲတဲ့အခါမှာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းပေါ်မူတည်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်လိုက်၏မရှိခြင်းအတွက်လူမှုရေးတွဲပြီး၏ 24 နာရီကဒီအပြုအမူသွေးဆောင်ပါဘူးသော်လည်းယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles နှစ်ဦးစလုံးအတွက်, မိတ်လိုက်နှင့်အတူတွဲပြီး၏6နာရီယုံကြည်စိတ်ချရသော [မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း induces124, 125, 229] (သင်္ဘောသဖန်း 1C) ။ ဒီအမူအကျင့်ပါရာဒိုင်းကိုအောင်မြင်စွာ [မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏ neurobiology ဆနျးစစျဖို့, neuroanatomical neurochemical နှင့် pharmacological လေ့လာမှုများအတွက်အသုံးပြုထားပြီး216, 237, 245].
မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်အဖော်ရှာပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာကြောင်းနောက်ထပ်အပြုအမူ conspecific သူစိမ်းဆီသို့ကျူးကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကျူးကျော်ကျွမ်းတဝင်မရှိသောယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမှီခိုလညွှန်ကြားထားပေမယ့်မရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မိတ်ဖက်များနှင့်ထို့ကြောင့် '' ရွေးချယ်ကျူးကျော် '' ချေါထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ရွေးချယ်ကျူးကျော်ကြွက်များတွင်အသုံးပြုကြောင်းဆင်တူနေထိုင်သူတစ်ဦး-ကျူးကျော်ပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်အကဲဖြတ်နေသည် [162, 231] ။ ဒီပါရာဒိုင်းများတွင်တစ်ခုကျွမ်းတဝင်မရှိသော conspecific တိရိစ္ဆာန် (ကျူးကျော်) တွင်ဘာသာရပ် (နေထိုင်သူ) ၏အိမ်တွင်လှောင်အိမ်သို့ထားရှိခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါနေထိုင်သူနှင့်ကျူးကျော်များအကြားအပြုအမူ interaction ကတစ် 6-10 မိနစ်စမ်းသပ်ကာလအတွင်းဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ထားကြသဖြင့်, ရန်လိုအပြုအမူတွေအမျိုးမျိုး၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ကြာချိန်နောက်ပိုင်းတွင် quantified နေကြသည်။ ဒီပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးလေ့လာရေး [လိင်ရင်တော့မှားမယ်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ကျူးကျော်သူတွေကဆီသို့ကျူးကျော်များ၏အလွန်နိမ့်အဆင့်ဆင့်ကိုပြသကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီ124, 224, 231] ။ သို့သော်မိတ်လိုက်နှင့်အတူတွဲပြီး၏ 24 နာရီပြီးနောက်ကျူးကျော်သူတွေကဆီသို့ပြင်းထန်တဲ့အပြုအမူတွေကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်နေကြသည် [124, 224, 231] ။ ဒီကျူးကျော်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းနှစ်ဦးစလုံးမှာညွှန်ကြားထားသည်ပြင်းထန်သောထိုးစစ်တိုက်ခိုက်မှုအပြုအမူတွေကိုသာလူစိမ်းယောက်ျားမျက်နှာသို့မှတ်ချက်ပြုကြသည်နေစဉ်, မဟုတ်သူစိမ်းအမျိုးသမီး, ဒီအချိန်မှာ  ။ ရွေးချယ်ကျူးကျော်ကိုလည်းအမြဲတည်သောလျက်ရှိ၏ က [မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းပြီးနောက်မှာအနည်းဆုံးနှစ်ပတ်ကြာ8, 99, 100] ။ ထိုသို့သောအားဖြင့်အလားအလာရှိသောအသစ်သောအိမ်ထောင်ဖက်ငြင်းပယ်နောက်ထပ်အချိန်၏ဤတိုးချဲ့ကာလအဘို့တွဲအထီး (ဆိုလိုသည်မှာ pair တစုံ-ကပ်လျက်တည်ရှိအထီး), သာ 24 နာရီတွဲသူတို့အားမတူဘဲ, လူစိမ်းအမျိုးသမီးဆီသို့ပြပွဲပြင်းထန်သောတိုက်ခိုက်မှုအပြုအမူတွေ, လိင်လက်ခံဖြစ်ကြောင်းကိုပင်သူများ, (သင်္ဘောသဖန်း 1D) [8, 99, 100] ။ ထို့ကြောင့် [ရွေးချယ်ကျူးကျော်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်နယ်မြေစောင့်ရှောက်ဖို့အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမသာကြောင်းအကြံပြုထားသည်37, 38] ဒါပေမယ့်လည်း [တည်ဆဲ pair တစုံနှောင်ကြိုးထိန်းသိမ်းထားဖို့တော့လုပ်ငန်းလည်ပတ်စေခြင်းငှါ8, 10] နှင့်အပို-pair တစုံသုတ်ရည်ထိကန့်သတ်။ ရွေးချယ်ကျူးကျော်သာစနစ်တကျအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်စမ်းသပ်ပြီးထားပြီးဖြစ်သော်လည်း, သက်သေအထောက်အထား [အမျိုးသမီးကိုလည်းဒီအမူအကျင့်ပုံစံကိုပြသအံ့သောငှါအကြံပြုတည်ရှိ94] ။ ဂရုတစိုက်ထိန်းချုပ်ဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေများအတွက်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အားဖြင့်မိတ်ဖက် preference ကိုနှင့်ရွေးချယ်ကျူးကျော်နှစ်ဦးစလုံး၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောစကားရပ်အပြုအမူ neuroendocrine လေ့လာမှုများတွင်ဤသူ၌အဟိတ်တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ၏ utility ကိုမီးမောင်းထိုးပြ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအိမ်ထောင်ဖက်အကြားတစ်စုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းကြောင်းအများဆုံးမျိုးစိတ်ဆင်တူမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles  ငယ်ရွယ်၏ bi-မိဘစောင့်ရှောက်မှု (ဆိုလိုသည်မှာ, နောက်ဘက်အမျိုးအနွယ်မှမိခင်နှင့်ဖခင်အကူအညီနဲ့နှစ်ဦးစလုံး) (ဖော်ပြရန်သင်္ဘောသဖန်း 1E) ။ မိခင်စောင့်ရှောက်မှုနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ်တလွှားနေရာအနှံ့ဖြစ်သကဲ့သို့, ငါတို့အဘ (ဆိုလိုသည်မှာအဖေဘက်ကစောင့်ရှောက်မှု) ၏အခန်းကဏ္ဍအပေါ် bi-မိဘစောင့်ရှောက်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုကိုအာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ဖခင်၏အပြုအမူ Semi-သဘာဝပူးတွဲသုံးပြီးဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာလေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ် [104, 158, 174] ။ အမှိုက်သရိုက်များမွေးဖွားပြီးနောက်, ဘိုးဘေးတို့ [nursing မှလွဲ. အမျိုးသမီးများကပြမိဘအပြုအမူတွေအပေါငျးတို့သပုံစံများကိုပြသ174, 205] ။ ဤရွေ့ကား [ဤကဲ့သို့သော (ဆိုလိုသည်မှာဝပျ) ကျော် huddling, မြောကျမတို့ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်ခွေးများကိုပြန်လည်ရရှိရန်အဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောအသိုက်အဆောက်အဦများနှင့်စားနပ်ရိက္ခာသိုလှောင်အဖြစ်သွယ်ဝိုက်အပြုအမူတွေအဖြစ်တိုက်ရိုက်မိဘအပြုအမူတွေ, ပါဝင်သည်104, 174, 205, 230] ။ ဘိုးဘေးတို့ပင် [နောက်ဆက်တွဲအမှိုက်သရိုက်များ၏ဘွားမြင်သောနောက်သူတို့ရဲ့လူငယ်အမျိုးအနွယ်ဆီသို့အဖေဘက်ကစောင့်ရှောက်မှုဖော်ပြရန်ဆက်လက်218, 220] ။ သို့သော် Juvenile ၏ရှေ့တော်၌, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole သည်ဘိုးဘေးတို့ [ဖခင်၏အပြုအမူနှင့်အချိန်ပိုမို foraging ပြသသည့် Natal အသိုက်ထဲမှာဒီထက်အချိန်ဖြုန်း93, 218] ။ မကြာခဏနို့တဘက် Natal အသိုက်ထဲမှာကျန်ကြွင်းသော Juvenile နောက်ဆက်တွဲအမှိုက်သရိုက်များတဲ့ '' alloparenting '' ဟုခေါ်တွင်အပြုအမူများပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုအဖြစ် Juvenile ၏ရှေ့မှောက်တွင်ယင်းဖခင်အားဖြင့်တိုက်ရိုက်အဖေဘက်ကစောင့်ရှောက်မှုရှိဘို့လိုအပ်ကြောင်းကိုလျော့ကျစေနိုင်တယ် [104, 198, 218, 220, 222] ။ လူငယ်အတွက် Alloparental အပြုအမူနှင့်လိင်ရင်တော့မှားမယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles သှေး [ဘိုးဘေးအဖေဘက်ကစောင့်ရှောက်မှုဆင်တူ198, 218, 220] ဤဖခင်၏အပြုအမူတစ်ခု nonrelated အမျိုးသမီးနှင့်အတူလူမှုရေး / လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအားဖြင့်တိုးမြှင့်နေကြသည်  ။ အရေးကြီးတာက, ထိုဖခင်နှင့်အဖေဘက်ကအမူအကျင့်များခင်းကျင်းပြသ၏ရှေ့မှောက်တွင် [အမျိုးအနွယ်၏ရုပ်ပိုင်းနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ပြသပြီ4, 218, 220] ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကလေးများအပေါ်အဖေဘက်ကစောင့်ရှောက်မှု၏ဖျောပွအကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုဆင်တူတဲ့တွေ့ရှိချက်။ ထို့ကြောင့်အဖေဘက်ကအပြုအမူတွေကိုထိန်းညှိသည့်ယန္တယားကိုနားလည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပါအဝင် pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းကြောင်းနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ်အတွက်အကောင်းဆုံးမိဘစောင့်ရှောက်မှု, အကြောင်းကိုအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များသည်နိုင်ဘူး။
3 ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole pair တစုံဘွန်း၏အာရုံကြောဆက်စပ်
pair တစုံဘွန်း၏အာရုံကြောဆက်စပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးအစောပိုင်းလေ့လာမှုများလူထုကိုဘဝမဟာဗျူဟာများပြသကြောင်း vole မျိုးစိတ်အကြား neuropeptide နှင့် neurotransmitter စနစ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ အသုံးပြုတဲ့လေးမျိုးစိတ်ထင်းရှူး (ကိုင်းတောကွင်းခဲ့ကြအမ် pinetorum), မြက်ခင်း (အမ် pennsylvanicus) နှင့် montane (အမ် montanus) voles ။ Monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာနှင့်ထင်းရှူး voles [အရွယ်ရောက်ပြီးသူအိမ်ထောင်ဖက်အကြားတစ်စုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းရန်နှင့်ကရာမြက်ခင်းများနှင့် montane voles pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းရန်နှင့်သာမိခင်စောင့်ရှောက်မှုမပြကြဘူးနေစဉ်အမျိုးအနွယ်၏ bi-မိဘစောင့်ရှောက်မှုကိုပြသ37, 82, 91, 95, 104, 124, 126, 127, 154, 155, 158, 174, 230] ။ ဘဝမဟာဗျူဟာမှာသူတို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေနဲ့ဒွန်တွဲသောဤမျိုးစိတ်အားဖြင့်မျှဝေနီးကပ်စွာ taxonomic ကြားဆက်ဆံရေး [ကြည့်မြင်ပြန်လည်သုံးသပ် (လူမှုရေးအပြုအမူစုံစမ်းစစ်ဆေးနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများအတွက်ဤကြွက်စံပြအောင်237]) ။
AVP နှင့် OT လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပါအဝင်မျိုးစိတ်-တိကျတဲ့လူမှုအပြုအမူ, ထိန်းညှိဖို့လူသိများခဲ့ကြသည်အဖြစ် (ပြန်လည်သုံးသပ်တွေ့ ), ကျူးကျော်  နှင့်မိခင်စောင့်ရှောက်မှု [129, 176, 177] က [ဤအ neuropeptide စနစ်များ monogamous နှင့်ကရာမျိုးစိတ်အကြားကွာခြားလိမ့်မယ်လို့ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်17, 122] ။ ဒီယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့, AVP နှင့် OT ဆဲလ်တွေ, အမျှင်များနှင့် receptors ၏ဖြန့်ဖြူးပုံစံများဟာ vole ဦးနှောက်ထဲမှာတစ်ခုသို့ဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်။ ဆန်းစစ်အားလုံး vole မျိုးစိတ်မှာတော့မသက်ဆိုင်ဘဝမဟာဗျူဟာ၏, AVP-immunoreactive (AVP-ir) အာရုံခံအဆိုပါ paraventricular (PVN) နှင့် supraoptic (သား) ကို hypothalamus ၏အရေးပါခြင်း, stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယအပါအဝင်အများအပြားဟာဦးနှောက်ဒေသများတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည် (BNST), medial amygdala (MEA), anterior hypothalamus (AH), နှင့် preoptic ဧရိယာ (POA) [17, 221, 223] ။ AVP-ir အမျှင် [အတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum (LS), နှစ်ဦးနှစ်ဖက် habenular နျူကလိယ (LHN), ထောင့်ဖြတ်တီးဝိုင်း (DB), BNST, medial preoptic ဧရိယာ (MPOA), နှင့် MEA အတွက်တွေ့ရှိခဲ့သည်17, 223] ။ OT-immunoreactive (OT-ir) ဆဲလ်များနှင့်အမျှင် [သည့် PVN, သား, MPOA နှင့် BNST အပါအဝင်တစ်ခုချင်းစီမျိုးစိတ်အတွက်အများအပြားဟာဦးနှောက်ဧရိယာတွင်တည်ရှိခဲ့သည်223] နှင့် OT-ir အမျှင်ကိုလည်းနျူကလိယ accumbens (NACC) တွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်  ။ သိမ်မွေ့မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုတွေ့ရှိခဲ့သည်ပေမယ့်, ယေဘုယျအားဖြင့် AVP-ir နှင့် OT-ir အာရုံခံခြင်းနှင့်အမျှင်များဖြန့်ဖြူးပုံစံများမြင့်မား [monogamous နှင့်ကရာ vole မျိုးစိတ်အကြားထိန်းသိမ်းထားကြသည်187, 221, 223].
ထူးခြားတဲ့မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုအတွက်ဖြန့်ဖြူးမှုပုံစံများနှင့် AVP နှင့် OT receptors (OTRs) ၏ဒေသဆိုင်ရာသိပ်သည်းဆသို့သော်မှတ်ချက်ချကြသည်။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ဥပမာ, အကြား, အ BNST အတွက် AVP-V1a receptors (V1aRs) ၏မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆ ventral pallidum (VP), (CeA) အလယ်ပိုင်းနှင့် amygdala ၏ basolateral (BLA) အရေးပါနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း olfactory မီးသီး (AOB) ရှိ montane voles ထက်အခြားဒေသများ, V1aRs မြင့်မားထုအဆိုပါ LS အတွက်မှတ်ချက်ပြုခြင်းနှင့်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ထက် montane voles ၏ prefrontal cortex (mPFC) medial နေကြသည်သော်လည်း [123, 145, 196, 225, 241] (သင်္ဘောသဖန်း 2A) ။ မျိုးစုံ vole မျိုးစိတ်နှိုင်းယှဉ်သောအခါစိတ်ဝင်စားစရာ [monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာနှင့်ထင်းရှူး voles binding V1aR ၏အလားတူပုံစံပြသ, ဤပုံစံကရာမြက်ခင်းများနှင့် montane voles ၏ထံမှကွဲပြား123, 145] voles အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအသက်တာကိုနည်းဗျူဟာများနှင့်ဆက်စပ်သိမြင်မှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ဒေသ-တိကျတဲ့ V1aRs တစ်အလားအလာပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုညွှန်း [123, 145, 196, 241] ။ အလားတူပဲ, ဖြန့်ဖြူးမှုပုံစံများနှင့် OTRs ၏ဒေသဆိုင်ရာထုကိုလည်း monogamous နှင့်ကရာ vole မျိုးစိတ်အကြားကွဲပြားခြားနား။ Monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာနှင့်ထင်းရှူး voles, ဥပမာ, (ကရာမြက်ခင်းများနှင့် montane voles ထက် BNST, mPFC နှင့် NACC အတွက်မြင့်မားတဲ့ OTR ကိုထုတိုသင်္ဘောသဖန်း 2D), ဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံ LS, အ ventromedial hypothalamus (VMH) တွင် binding နဲ့ OTR ၏အဆင့်ဆင့်မှာတွေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်သော်လည်း, နှင့် cortical amygdala (AcA) anterior [122, 196, 239] ။ V1aR နဲ့ OTR ဖြန့်ဖြူးအတွက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှု [သည့်သက်တမ်းတစ်လျှောက်တည်ငြိမ်များမှာ215, 225] နှင့်မျှမတို့ကဲ့သို့သောကွဲပြားမှု benzodiazepine သို့မဟုတ် opiate အဲဒီ receptor စနစ်များအတွက်တည်ရှိအဖြစ်, အဲဒီ receptor-သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိပါတယ်  ။ ထို့ကြောင့်, လူမှုရေးအပြုအမူတွေအတွက် AVP နှင့်ညီလေး၏အခန်းကဏ္ဍကိုပေး V1aRs နှင့် OTRs အတွက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှု [voles အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအသက်တာကိုနည်းဗျူဟာများနှင့်ဆက်စပ်သည့်လူမှုရေးအပြုအမူတွေအတွက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုမှအထူးဆက်စပ်ဖြစ်ထင်နေကြတယ်107].
မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏ Vasopressin (AVP) နှင့် oxytocin (OT) စည်းမျဉ်း။ (က) မျိုးစိတ် vasopressin အဲဒီ receptor အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု (V1aR) မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာနှင့် montane voles ၏ ventral pallidum (VP) တွင် binding ။ receptors မြင့်မားထုကိုပိုမိုအားဖြင့်ညွှန်ပြနေကြသည် ...
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ neuropeptide အဲဒီ receptor ဖြန့်ဖြူးအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကြောင့် V1aR နဲ့ OTR ၏ကမကထဒေသများတွင်မှတ်ချက်ချမသိမသာမျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုမှဖြစ်နိုင်သည်အဆိုပါအကြီးအကျယ်မျိုးစိတ် [239, 240, 242, 243] ။ အဆိုပါ V1aR နဲ့ OTR coding တိုင်းဒေသကြီးများ၏မျိုးဗီဇတည်ဆောက်ပုံ [vole မျိုးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီးသိသိသာသာဆင်တူပေမယ့်239, 240, 242, 243, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာနှင့်ထင်းရှူး voles မြက်ခင်းသို့မဟုတ် montane voles ၌တွေ့ကြသည်မဟုတ်သော V1aR ဗီဇ၏ကမကထဒေသတွင်အများအပြားထပ်တလဲလဲ microsatellite DNA ကိုပာသယ်, ဤ sequence ကိုအပြောင်းအလဲများကိုအဲဒီ receptor စကားရပ်အတွက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုအခြေခံစခွေငျးငှါ107, 108, 242, 243] ။ ဒီအယူအဆ၏ထောက်ခံမှုမှာတော့မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole V1aR များအတွက် Transgene နိုင်တဲ့ coding တင်ဆောင်လာသောကြွက် [voles prairie ဆင်တူအလယ်ပိုင်း V1aR ပုံစံများပြ243] ။ AVP နှင့်အတူထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာစိတ်ဝင်စားစရာဤ Transgene ကြွက် [အဲဒီ receptor ဖြန့်ဖြူးပုံစံများ endogenous neuropeptides မှဦးနှောက်တုန့်ပြန်သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ပြီး, ဒီလမ်းအတွက်, လူမှုရေးအပြုအမူတွေ modulate စေခြင်းငှါညွှန်း, တိုးမြှင့်လူမှုရေးဆက်နွယ်မှုပြသ243].
DA, AVP နှင့်ညီလေးလိုပဲသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်အပါအဝင် pair တစုံဘွန်းနှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အပြုအမူအတွက်လူသိများတဲ့အခန်းကဏ္ဍဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိုများသောမကြာသေးမီက, နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများ [vole မျိုးစိတ်အတွက်ဗဟို DA စနစ်များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြ1, 23, 141, 234] olfaction , လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ [22, 117], မိဘအပြုအမူ [170, 171] ။ ဒီလေ့လာမှုတွေကလူမှုရေးအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါ monogamous နှင့်ကရာ voles အကြား DA ဆဲလ်များနှင့်အဲဒီ receptor ဖြန့်ဖြူးပုံစံများနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုအဖြစ်၎င်းတို့၏ဒေသဆိုင်ရာသိပ်သည်းဆကွဲပြားမှု, မှတ်ချက်ပြုကြသည်။
သည်အခြားကြွက်မျိုးစိတ်အတွက်တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီ [44, 114, 167, 210] DA ဆဲလ်-သူတို့အား tyrosine hydroxylase (TH; catecholamines ပေါင်းစပ်အတွက်နှုန်းကန့်သတ်အင်ဇိုင်း) အတွက်တံဆိပ်ကပ်ကြောင်း DA beta ကို hydroxylase (norepinephrine မှ DA ပြောင်းပေးသောအင်ဇိုင်း) ၏မရှိခြင်းအတွက် monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက်မျိုးစုံဒေသများတွင်တွေ့ရှိ -have ထို BNST (pBNST) ၏ကျောင်းအုပ်ကြီးနျူကလိယ, posterodorsal MEA (MeApd), နှင့် ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) အပါအဝင်ဦးနှောက် [99, 168] ။ ထို့အပြင် DA terminal ကို innervation ၏မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆဟာ NACC နှင့် caudate putamen (က CP) မှာလက်ရှိဖြစ်ပါတယ်  နှင့်ယောက်ျားပေါင်းအတွက်စမ်းသပ်ချက် tracing မကြာသေးမီကျေးရွာအုပ်စု [ဤအဆိပ်ကမ်းဟာ VTA အတွက်အနာဂတ်အာရုံခံကနေပျေါပေါကျကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီ101] အခြားမျိုးစိတ်အတွက်သရုပ်ပြခဲ့ပြီးအဖြစ် [34, 128, 193] ။ ရှိလျှင်သို့သော်ကရာမြက်ခင်း voles [သည်, pBNST နှင့် MeApd အတွက် DAergic ဆဲလ်တွေအလွန်နည်းပါးဆံ့168] နောက်ထပ် monogamous နှင့်ကရာ vole မျိုးစိတ်အကြား neuroanatomical ကွဲပြားခြားနားမှုဆန္ဒပြနေသော။
အဆိုပါ vole ဦးနှောက်ထဲမှာ Dopamine အဲဒီ receptor (Dar) ဖြန့်ဝေလည်းသွင်ပြင်လက္ခဏာပါပြီ။ DARs ၎င်းတို့၏မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံ, pharmacological ဆှဖှေဲ့နှင့် intracellular အချက်ပြလမ်းကြောင်းအပေါ်သက်ရောက်မှုအားဖြင့်မတူညီဖြစ်ကြောင်းနှစ်ခုကိုအဓိကမိသားစုများ, D1 ကဲ့သို့ (D1R) နှင့် D2 ကဲ့သို့ (D2R) receptors သို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည် [163, 166] ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ခုနှစ်, D1Rs [သည့် NACC, က CP နှင့် mPFC အဖြစ်ကအခြားဦးနှောက်ဒေသများတွင်တွေ့ရှိ8, 196] (BJ Aragona, Y. လျူနှင့် ZX ဝမ်, အတည်မပြုရသေးသောဒေတာ) ။ D2Rs ဤတူညီသောဒေသများတွင်လက်ရှိအနေဖြင့်လည်းသူတို့ [VTA နှင့် substantia nigra (SN) တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်8, 196] (BJ Aragona, Y. လျူနှင့် ZX ဝမ်, အတည်မပြုရသေးသောဒေတာ) ။ ဤအ receptor ဖြန့်ဝေသည်အခြားကြွက်မျိုးစိတ်၌တွေ့သောသူတို့အားဆင်တူပေမယ့်, သူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးထု [မျိုးစိတ်-တိကျတဲ့ဖြစ်ကြပြီးလူမှုရေးအပြုအမူအတွက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုနှင့်အတူပတျသကျစေခြင်းငှါ8, 196] ။ ဥပမာအားဖြင့်, monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles [ကရာမြက်ခင်း voles ထက် D2Rs နှင့် mPFC အတွက် D1Rs ၏အောက်ခြေအဆင့်မြင့်မားထုတို196] ။ ထို့ပြင်မြက်ခင်း voles [လူမှုရေးဆက်နွယ်မှု၏အတော်လေးနိမ့်ဒီဂရီနှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့စဉ်းစားနေတဲ့တွေ့ရှိချက်မြက်ခင်း voles အတွက်မှတ်ချက်ချ, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ထက် NACC အတွက် D1Rs တစ်သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့သိပ်သည်းဆများ8] ။ အမှန်မှာထို NACC အတွက် D1Rs ၏ pharmacological ပိတ်ဆို့ [မြက်ခင်း voles အတွက် Affiliate အပြုအမူတွေကိုတိုးမြှင့်8].
အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤလေ့လာမှုများကွဲပြားဘဝမဟာဗျူဟာများနှင့်အတူ vole မျိုးစိတ်အကြား AVP, ညီလေးနှင့် DA စနစ်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုသရုပ်ပြပါပြီ။ ရလဒ်အဖြစ်သုတေသီများမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း, ရွေးချယ်ကျူးကျော်များနှင့်အဖေဘက်ကအမူအကျင့်များအပါအဝင်စနစ်တကျပင်ကိုစရိုက်က pair တစုံဘွန်းနှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေ၏ neurobiology ဆနျးစစျဖို့မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ဦးနှောက်တွင်ဤစနစ်များကိုအာရုံစိုက်ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့အလှည့်အတွက်အောက်ပါကဏ္ဍများတွင်ဤအပြုအမူ၏တစ်ဦးချင်းစီ၏ neurobiological စည်းမျဉ်း, ဆွေးနွေးပါလိမ့်မယ်။
4 ။ မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏ Neurobiology
မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ် 4.1 ဦးနှောက်ကို Activation
ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူများအကြားအပြန်အလှန်၏လေ့လာမှုမှာတဦးတည်းလေ့အသုံးပြုချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုအမူအကျင့်စမ်းသပ်မှုအောက်ပါဦးနှောက်ထဲမှာချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇစကားရပ် map ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Fos ချက်ချင်းအစောပိုင်းမျိုးဗီဇ၏ပရိုတိန်းထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါသည်, fos, ထိုလျှင်မြန်စွာ activation အောက်ပါအာရုံခံအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်နှင့်အလွယ်တကူ immunocytochemistry အားဖြင့်မြင်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်, Fos immunoreactive (Fos-ir) အစွန်းအထင်းသတ်သတ်မှတ်မှတ်အပြုအမူများ၏ Display ကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဦးနှောက်အတွက်ဒေသဆိုင်ရာအာရုံခံ activation ကိုသိရှိနိုင်ဖို့အမူအကျင့် neuroendocrine စမ်းသပ်ချက်တွင်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။
မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles, လိင်ကွဲတွဲဖက်မှု, တွဲပြီးနှင့် / သို့မဟုတ်မိတ်လိုက်ခုနှစ်တွင်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းနှစ်ဦးစလုံးအတွက် MEA, BNST နှင့် MPOA အပါအဝင်အများအပြားဟာဦးနှောက်ဧရိယာများတွင် Fos-ir အစွန်းအထင်းသွေးဆောင် [56, 169] ။ မိတ်လိုက်, အထူးသဖြင့် [မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းကိုအထောက်အကူပြုစေမည်အကြောင်းတစ်မိတ်လိုက် circuitry ၏အလုပ်လုပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်ကဤဦးနှောက်ဒေသများ implicating, အ MEA, BNST, MPOA, နှင့် medulla oblongata ၏ gracile နျူကလိယတိုးမြှင် Fos-ir အဆင့်ဆင့်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ခံခဲ့ရ50, 51, 169] ။ အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် MEA ၏ axon-ကြဲတွေ့ရှိရပါသည်တစ်ဦးအကျွမ်းတဝင်အမျိုးသမီးဆီသို့မိမိတို့၏ Affiliate အပြုအမူလျော့နည်းသွားပေမယ့်ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးအပြုအမူ, ရွေ့လျားခြင်းသို့မဟုတ် olfactory မသက်ရောက်ခဲ့အဖြစ်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole မိတ်ဖက် preference ကိုအတွက် MEA တစ်အခန်းကဏ္ဍနောက်ထပ်, တွေ့ရှိရပါသည်လေ့လာမှုများအားဖြင့်ဆိုလိုထားပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု .
4.2 ။ မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏ Neuropeptide စည်းမျဉ်း
AVP နှင့် OT ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှစခွေငျးငှါကိုညွှန်းပထမဦးဆုံးသက်သေအထောက်အထားသဘာဝကျကျသွေးဆောင်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း-ပေါ်ဤအကြောင်း neuropeptide စနစ်များကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ဦးနှောက်ထဲမှာအဘို့လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ-လိုအပ်ချက်များ၏သက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးလေ့လာမှုများကနေရောက်လာတယ်။ အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ခုနှစ်, မိတ်လိုက်နှင့်အတူတွဲပြီး [သည့် BNST အတွက် AVP mRNA-label တပ်ထားသောဆဲလ်များ၏အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်214] နှင့် LS အတွက် AVP-ir အမျှင်များ၏သိပ်သည်းဆလျော့နည်းသွား  ။ BNST-AVP အာရုံခံစီမံကိန်းကိုအဖြစ် LS မှ  ဤဒေတာ [မိတ်လိုက်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏ LS အတွက် BNST နှင့် AVP လွှတ်ပေးရန်အတွက် AVP ပေါင်းစပ်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ကြောင်းအကြံပြု216] ။ မိတ်လိုက်အထီးအတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်မရှိမဖြစ်ပါပဲကတည်းက  ဤဒေတာကိုမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် AVP များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏ဆက်စပ်မှုအထောက်အထားကိုဆက်ကပ်။ အမျိုးသမီးမှာတော့အစား, အထီး chemosensory တွေကိုထိတွေ့သည့် AOB အတွက် OTR ကိုသိပ်သည်းဆပြောင်းလဲ, ညီလေးအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်အခန်းကဏ္ဍစေခြင်းငှါညွှန်ပြ .
မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် AVP နှင့်ညီလေးများအတွက်အခန်းကဏ္ဍ၏တိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားတွေကဤစနစ်များ pharmacological ခြယ်လှယ်နေဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သညျ။ အလယ်ပိုင်း AVP အုပ်ချုပ်ရေးအဖော်ရှာ၏မရှိခြင်းအတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးသွေးဆောင်နေစဉ် V1aR ရန်၏ Intracerebroventricular (icv) အုပ်ချုပ်မှု [ယောက်ျားမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းပိတ်ဆို့43, 231] ။ အလားတူပင်ရုံ 1 အထီးနှင့်အတူတွဲပြီး၏နာရီ, ဤအကျိုးသက်ရောက်ပြီးနောက်အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် AVP သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေး၏ icv အုပ်ချုပ်မှု [AVP နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်းအတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုညွှန်းတဲ့ V1aR ရန်၏တစ်ပြိုင်တည်းအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်43] ။ OT ကုသမှုလည်းနှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်းအတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ အထူးယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းနှင့်ဤသက်ရောက်မှုနှစ်ဦးစလုံးအတွက် icv OT အုပ်ချုပ်ရေးသွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေးအနေနဲ့ OTR ကိုရန်နှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားခဲ့ကြသည်  ။ ဤအဒေတာ AVP နှင့်အချိန်ပိုနှစ်ဦးစလုံးနှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်းအတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းထိန်းညှိကြောင်းညွှန်ပြနေချိန်တွင်သူက [neuropeptides ၏ထိရောက်သောဆေးများယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအကြားကွဲပြားခြားနားကြောင်းသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်43].
ဆိုက်ကို-တိကျတဲ့ထိန်းသိမ်းရေးမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏ AVP နှင့် OT စည်းမျဉ်းများအတွက်အရေးကြီးသောအများအပြားဟာဦးနှောက်ဒေသများသရုပ်ပြကတည်းကရှိသည်။ တိုက်ရိုက် LS သို့ AVP ၏အုပ်ချုပ်မှုမိတ်လိုက်၏မရှိခြင်းအတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးသွေးဆောင်သော်လည်းယောက်ျားအတွက်, တိုက်ရိုက် LS သို့မဟုတ် VP မဟုတ်ဘဲအခြားဦးနှောက်ဒေသများသို့ V1aR ရန်၏အုပ်ချုပ်ရေး, (, မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်း inhibitedသင်္ဘောသဖန်း 2B) [146, 149] ။ ထို့ပြင်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏ LS သို့တစ်ဦးနဲ့ OTR ရန်၏အုပ်ချုပ်မှုမှာလည်း [မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းတားဆီး149] ။ အမျိုးသမီးမှာတော့အစား, အ prelimbic cortex (PLC ၏ mPFC ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု) နှင့် NACC [မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏ neuropeptidergic စည်းမျဉ်းများတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ150, 244] ။ ညီလေးအဆင့်ဆင့်အထီးနှင့်အတူ sociosexual အတွေ့အကြုံကိုစဉ်အတွင်း NACC အတွက်တိုးမြှင့်  ။ ထို့အပြင် OT ဆေးထိုးတိုက်ရိုက်မိတ်လိုက်၏မရှိခြင်းအတွက် NACC သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေးသို့, ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ OTRs ဒါမှမဟုတ် PLC ၏ပိတ်ဆို့မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေး (၏ဖွဲ့စည်းခြင်းတားဆီးစဉ်သင်္ဘောသဖန်း 2E) [150, 244].
သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဦးနှောက်ဒေသများစိတ်ဝင်စားမျိုးဗီဇ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကယ်နှုတ်တော်မူခြင်းနှင့်ထိန်းညှိဖို့ဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကို-mediated ဗီဇလွှဲပြောင်းအသုံးချဖို့အများအပြားလေ့လာမှုများအသီးသီး, အ NACC အတွက် VP နဲ့ညီလေး neurotransmission အတွက် AVP neurotransmission ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးထိနျးညှိသောတွေ့ရှိချက်များကိုထောက်ခံခဲ့ကြ ။ ယောက်ျားအတွက်, ဥပမာတစ်ခု adeno-ဆက်စပ်ဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကို [သည့် VP သို့ V1aR ဗီဇကယ်လွှတ်ခြင်းငှါအသုံးပြုခဲ့သည်183] ။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း, ဒီကိုင်တွယ်ဤဒေသတွင် V1aRs တစ်ခုတိုးလာသိပ်သည်းဆခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာမိတ်လိုက်၏မရှိခြင်းအတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးဖွဲ့စည်းခဲ့သည်ဤယောက်ျားသည် VP အတွက် AVP neurotransmission တိုးမြှင့်ကြောင်းတွေ့ရှိချက်များကိုထောက်ပံ့ [အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းလွယ်ကူချောမွေ့စေနိုင်သည်183] (သင်္ဘောသဖန်း 2C) ။ အထီးမြက်ခင်း voles ၏ VP, ဒီလူမှုရေးအရကရာမျိုးစိတ်အတွက်သွေးဆောင်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း [အတွက်ထို့ပြင် V1aR overexpression145] ။ ထိန်းချုပ်မှုမှနှိုင်းယှဉ်ပါကအလားတူပင်လိင်ရင်တော့မှားမယ်အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏ NACC အတွက် OTR ကို overexpression (မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအရှိန်သင်္ဘောသဖန်း 2F), ဒါပေမဲ့ဒီကုသမှု [အမျိုးသမီးမြက်ခင်း voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းပြောင်းလဲပစ်ဘူး188] ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤလေ့လာမှုများယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ် AVP နှင့်ညီလေး၏အရေးပါမှုနှင့် site-specific ကိုသက်ရောက်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ။
4.3 ။ မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏ DA စည်းမျဉ်း
မကြာသေးမှီကအလုပ်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းကိုလည်းအထူးသဖြင့် mesolimbic DA system ကို-တစ် NACC, mPFC နှင့်အခြား forebrain ဒေသများဖို့ VTA နှင့်စီမံကိန်းအတွက်အစပြုဆဲလ်တွေထုတ်လုပ် DA ၏အုပ်စုအလယ်ပိုင်း DA ဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဒါဟာအာရုံကြော circuit ကိုသပ္ပါယ်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူတွေ၏မျိုးဆက်အတွက်ရရှိလာတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုဖို့စိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုးမြား၏တာဝနျမှာ Integrated ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ထင်နေသည် [120, 232] ။ ဥပမာအားဖြင့်, mesolimbic DA ရှည်လျား [ဖြင့်အသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ဖြစ်ကြောင်းထိုကဲ့သို့သောနို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်မျိုးပွားအဖြစ်အပြုအမူတွေကိုဖြန်ဖြေ, ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာနှင့်လက်ခံအိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ်မက်လုံးပေးဖို့ salience တာဝန်ပေးဖို့အတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီး120, 232] ။ အလားတူပင် mesolimbic DA [နှစ်သက်သော conspecifics အာရုံစိုက်ခံရဖို့မိတ်လိုက်အားထုတ်မှုအားဖွင့်, အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်မှုလွယ်ကူချောမွေ့ရန်အဆိုပြုပြီးပါပြီ80] အောက်ကဖော်ပြထားတဲ့ဒေတာများကထောက်ခံနေတဲ့အယူအဆ။ အိမ်ထောင်ဖက်အကြားမိတ်ဖက်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းလိုအပ်ကြောင်းရွေးချယ်ရေးဖိအားဖွယ်ရှိတဦးတည်းရဲ့မိတ်ဖက်ဖို့တာဝန်တစ်ခုတိုးလာစိတ်ခွန်အားနိုးတန်ဖိုးနှင့်တစ်ဦး၏ဝိသေသသောရှေးခယျြရဆက်နွယ်မှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မယ်အဖြစ်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၌ဤစနစ်၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုတစ်ဦးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အခြေအနေတွင်သဘာဝကျပါတယ် pair တစုံနှောင်ကြိုး။
မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် DA များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြံပြုခြင်းအစောပိုင်းစမ်းသပ်သက်သေအထောက်အထားများအရံ pharmacological ထိန်းသိမ်းရေးထံမှလာ၏။ မိတ်လိုက်နှင့်အတူတွဲပြီး၏ 24 နာရီယုံကြည်စိတ်ချရသောယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေး induces ကွောငျးသတိရပါ။ မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းကြိုတင်တွဲဖက်မှုမှဆားဆေးထိုးခြင်းဖြင့်ထိခိုက်မခံခဲ့ရသော်လည်း, nonselective Dar ရန်, haloperidol နှင့်အတူကုသမှု [နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်းအတွက်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေးပိတ်ဆို့7, 217] ။ ထို့ပြင် apomorphine ၏အနိမ့်ဆေးများနှင့်အတူကုသမှုတစ်ခု nonselective Dar agonist [မိတ်လိုက်၏မရှိခြင်းအတွက်တွဲပြီးသာ6နာရီအကြာတွင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဦးစားပေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်း facilitated7, 217] ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤတွေ့ရှိချက် Dar activation မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် mesolimbic DA ဆက်စပ်. အဖို့ပထမဦးဆုံးအလုပ်လုပ်တဲ့သက်သေအထောက်အထား [မိတ်လိုက်သည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles နှစ်ဦးစလုံး၏ NACC အတွက် DA လှုပ်ရှားမှုတိုးပွါးကြောင်းတွေ့ရှိချက်ခဲ့သည်7, 98] ။ အမျိုးသမီးမှာတော့ဥပမာ, extracellular DA အဆင့်ဆင့်အဖော်ရှာကာလအတွင်းအခြေခံအထက်တွင်နီးပါး 51% တိုးတက်  ။ အလားတူပင် [အထီး Non-mated ယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဤဒေသတွင် 33% ပိုမို DA လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်ခဲ့ mated7] ။ မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် NACC DA ၏အခန်းကဏ္ဍကိုများအတွက်တိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားတွေ DA neurotransmission ၏ site ကို-တိကျတဲ့ pharmacological ထိန်းသိမ်းရေးထံမှလာ၏။ ဤဒေသသို့ apomorphine ၏ microinjection အဖော်ရှာ၏မရှိခြင်းအတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း facilitated နေစဉ် NACC သို့ haloperidol ၏ Microinjection [, မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းတားဆီး7] ။ ယင်းက CP အတွက် Dar ကိုင်တွယ်ကိုလည်း midbrain ဒေသများထံမှ DAergic innervation အားလက်ခံတွေ့ဆုံသော NACC ကပ်လျက်တစ်ဒေသ, မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းပြောင်းလဲမပြုခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီသက်ရောက်မှု [site ကို-တိကျတဲ့ခဲ့ကြသည်7].
အဆိုပါ NACC အတွက် D1Rs နှင့် D2Rs differential မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းထိန်းညှိကွောငျးတငျပွဖို့အဲဒီ receptor တိကျတဲ့ agonists / ရန်အသုံးပြုသောအပိုဆောင်းစမ်းသပ်ချက် (သင်္ဘောသဖန်း 3A & B) ။ အထူးသ NACC D2R activation facilitated နှင့်တားဆီး D2R ပိတ်ဆို့ထားခြင်း, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles နှစ်ဦးစလုံးအတွက်လက်တွဲဖော် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း, NACC D2R activation မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်လိုအပ်သောနှင့်လုံလောက်သောနှစ်ဦးစလုံးကြောင်းကိုညွှန်ပြ [8, 98] ။ ဆနျ့ကငျြ, NACC D1R activation [ဤအပြုအမူအပေါ် NACC D2Rs တစ်ခု inhibitory အခန်းကဏ္ဍညွှန်း, အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် mating- နှင့် D1R agonist-သွေးဆောင်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းတားဆီး8] ။ အရေးကြီးတာကအဲဒီထိန်းသိမ်းရေး [သည့် NACC အတွင်းဖက်ဦးစားပေးတစ်ဦးငျဒသေစည်းမျဉ်းကိုညွှန်းသည်အဓိကမဟုတ် NACC shell ကိုသို့အပ်ရသောအခါမှသာထိရောက်ခဲ့ကြပေမယ့်8].
နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် Dopamine (DA) (NACC) မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းထိန်းညှိ။ (က) ကာတွန်းအဆိုပါ mesolimbic DA circuit ကိုဖော်ပြသည်။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌ DA-ergic ဆဲလ် NACC နှင့် prefrontal cortex မှ (VTA) စီမံကိန်းကို (PFC), ...
အဆိုပါ NACC အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏ Dar-တိကျတဲ့စည်းမျဉ်းမကြာသေးမီကတစ်ခု intracellular အဆင့်တွင်လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ D2Rs နှင့် D1Rs [အဘယ်သူ၏ intracellular သက်ရောက်မှု heterotrimeric GTP-binding ပရိုတိန်း (G-ပရိုတိန်း) ကကမကထပြုခဲ့ကြသည် (ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအဘို့အတွေ့နှစ်ဦးစလုံး 7-transmembrane receptors များမှာ163, 166]) ။ D2Rs နှင့် D1Rs အချို့အချက်ပြလမ်းကြောင်းအပေါ်အလားတူသက်ရောက်မှုရှိနေစဉ်, သူတို့ differential အဆိုပါ intracellular သိသိ adenosine3'' ထိန်းညှိ, 5'-monophosphate (Camp) သူတို့အပြန်အလှန်အရာတွေနဲ့ G-ပရိုတိန်း [၏ alpha subunit မှတဆင့်အဆငျ့ဆငျ့အချက်ပြ163, 166](သင်္ဘောသဖန်း 3C) ။ D2Rs Gα (inhibitory, G-ပရိုတိန်းမှခညျြနှောငျi နှင့်Gαo) ။ Gα၏ D2Rs activated နေကြသည်သောအခါ, alpha subunitI / O [စခန်းထုတ်လုပ်မှု၏တားစီးနှင့်ပရိုတိန်း kinase တစ်ဦးက (PKA) ၏လှုပ်ရှားမှုတစ်ဦးကျဆင်းခြင်းမှဦးဆောင် adenylate cyclase (AC) လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်163, 166] ။ D1Rs အစား, stimulatory, G-ပရိုတိန်း (Gαမှခညျြနှောငျs နှင့်Gαolf) ။ D1R activation [အနေနဲ့ AC အလှုပ်ရှားမှုအတွင်းတိုးစခန်းထုတ်လုပ်မှုနှင့် PKA activation မှဦးဆောင်163, 166] ။ D1R နှင့် D2R activation differential စခန်းအချက်ပြကိုထိခိုက်ကြောင့် [ဤအချက်ပြလမ်းကြောင်းမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏ Dar-တိကျတဲ့စည်းမျဉ်းအခြေခံစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်9] ။ ဒီအယူအဆ၏ထောက်ခံမှုမှာ NACC shell ကိုအတွင်း PKA လှုပ်ရှားမှုလျှော့ချရေး, ဒါပေမယ့်မရ core ကို, အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် D2R activation ၏သက်ရောက်မှုနှင့်အတူတသမတ်တည်းရလဒ်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း facilitated [8, 9] (သင်္ဘောသဖန်း 3D) ။ နောက်ထပ်နှစ်ဦးသီးခြားစမ်းသပ်မှုသည် NACC အတွက် stimulatory, G-ပရိုတိန်းနှင့် PKA ၏ activation ၏ activation အတွက်တစ်ဦးချင်းစီ Shell D1R activation ၏သက်ရောက်မှုနှင့်အတူတသမတ်တည်းမိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းတားဆီး [8, 9] (သင်္ဘောသဖန်း 3D) ။ အရေးကြီးတာကအဲဒီထိန်းသိမ်းရေးကိုတိုက်ရိုက်ပြတိုးမြှင့်စခန်းဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနှောင့်ယှက်ကြောင်းအကြံပြု, တွဲဖက်မှု၏ 24 နာရီအတွင်းမိတ်လိုက်သို့မဟုတ်အဆက်အသွယ်များ၏ကြာချိန်ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပါဘူး။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤစမ်းသပ်ချက်ဟာ NACC shell ကိုအတွက်စခန်း intracellular အချက်ပြမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းထိန်းညှိ, ဤအပြုအမူအပေါ် Dar-တိကျတဲ့သက်ရောက်မှုအခြေခံမည်။ သရုပ်ပြ
5 ။ ရွေးချယ်ကျူးကျော်များ၏ Neurobiology
ယခင်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမိတ်လိုက်နှင့်မိတ်ဖက်ဦးစားပေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်း၏ 24 နာရီပြီးနောက်, အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အထူးသဖြင့်အထီးသူစိမ်း, conspecific သူစိမ်းဆီသို့ကျူးကျော်များ၏မြင့်မားဖော်ပြရန်မဟုတ်ဘဲသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်ဆီသို့ [124, 224, 231] ။ ထို့အပြင်၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်တွေနဲ့တိုးချဲ့တွဲပြီးနှင့်မိတ်လိုက်ထဲကတစ်ခုနှစ်ခုမှရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်, pair တစုံ-ကပ်လျက်တည်ရှိအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles [ဖြင့်အလားအလာရှိသောအသစ်သောအိမ်ထောင်ဖက်ငြင်းပယ်, လိင်လက်ခံအမျိုးသမီးအပါအဝင်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကျူးကျော်သူတွေကနှစ်ဦးစလုံးဆီသို့ပြင်းထန်သောကျူးကျော်, ဖော်ပြရန်8, 99, 100, 231] ။ ဒါကရွေးချယ်ကျူးကျော် [အိမ်ထောင်ဖက် Guard, အသိုက်ကာကွယ်ရေးနှင့်ယောက်ျားနှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအကြားလက်ရှိနှောင်ကြိုးများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်မရှိမဖြစ်ဖြစ်ထင်နေသည်8, 37, 38, 99, 100, 231] ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းလေ့လာမှုများမျိုးစုံဦးနှောက်ဒေသများညွှန်ပြ, ဤအပြုအမူအတွက် AVP နှင့် DA နှစ်ဦးစလုံး၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိသည်။
5.1 ။ ရွေးချယ်ကျူးကျော်သူနဲ့ဆက်စပ်ဦးနှောက်ကို Activation
ဦးနှောက်ဒေသတစ်ဦးကအမျိုးမျိုးရွေးချယ်ကျူးကျော််ပတ်သက်နေပါပြီ။ ဥပမာ, ဒီအပြုအမူ၏ display ကိုကို (MEA, BNST, MPOA, LS နှင့် AH အတွက်မြင့်မားသော Fos-ir နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်သင်္ဘောသဖန်း 4A) [99, 224] ။ ဤအဒေသများတဦးတည်းမှာ AH, differential ကို activation [အကျွမ်းတဝင်မိတ်ဖက်များနှင့်တစ်ဦးကျွမ်းတဝင်မရှိသောလူစိမ်းမှထိတွေ့မှုများအကြားမှတ်သားခဲ့သည်99] ။ အထူးသနှစ်ပတ်အတွင်းများအတွက်အမျိုးသမီးနှင့်အတူတွဲခဲ့မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (ဆိုလိုသည်မှာ pair တစုံ-ကပ်လျက်တည်ရှိ) အထီး, ပြီးတော့တစ်ဦး conspecific အထီးသို့မဟုတ်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလူစိမ်းထိတွေ့ခဲ့သည် pair တစုံ-ကပ်လျက်တည်ရှိအထီးထက် AH အတွက် Fos-ir ဆဲလ်တစ်သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့သိပ်သည်းဆခဲ့ သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်ဖို့ re-ထိတွေ့။ စိတ်ဝင်စားစရာအထီးသို့မဟုတ်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဖြစ်စေကျူးကျော်သူတွေကထိတွေ့ယောက်ျားကိုလည်း AH AVP ရွေးချယ်ကျူးကျော်ထိန်းညှိခြင်းအလိုငှါအကြံပြုခြင်း, ကို double-တံဆိပ်ကပ် AVP-ir နှင့် Fos-ir အဘို့ဤဦးနှောက်ဒေသတွင်၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှ re-ထိတွေ့အထီးထက်ဆဲလ်တစ်သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့သိပ်သည်းဆခဲ့  (သင်္ဘောသဖန်း 4B).
အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ရွေးချယ်ကျူးကျော်အတွက် Vasopressin (AVP) နှင့် dopamine (DA) ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ (က) Photomicrograph (မှောင်မိုက်နျူကလီးယား staining AVP-immunoreactive (AVP-ir) ဆဲလ်အသေကောင်များနှင့်အမျှင် (အညိုရောင် cytoplasmic အစွန်းအထင်း), Fos-immunoreactive (Fos-ir) ကိုပြသ ...
5.2 ။ ရွေးချယ်ကျူးကျော်များ၏ Neuropeptide စည်းမျဉ်း
ကြောင့်နယ်မြေ display တွေအတွက် AVP ၏လူသိများအခန်းကဏ္ဍမှ  နှင့် monogamous နှင့်ဇနီးတစ်ယောက်ထက် ပို. voles အကြား forebrain ဒေသများတွင် AVP အဲဒီ receptor ဖြန့်ဖြူးအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု [123, 225] AVP ရွေးချယ်ကျူးကျော်များ၏စည်းမျဉ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့တွေးဆခဲ့သည်။ ဒီယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှုများတွင် Winslow et al ။ (1993) မိတ်လိုက်၏ 1 နာရီအတွင်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက် ventricle သို့ cerebrospinal fluid (CSF) တစ်ဦး V24aR ရန်၏ဆေးထိုးတွေ့သော်လည်းမအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ရွေးချယ်ကျူးကျော်များ၏နောက်ဆက်တွဲ display ကိုတားဆီး။ ထို့အပြင်လိင်ရင်တော့မှားမယ်, Non-အမျိုးသမီးထိတွေ့ယောက်ျားတစ်ဦးကျူးကျော်ဆီသို့ကျူးကျော်သွေးဆောင်ဟာနှစ်ဦးနှစ်ဖက် ventricles သို့ AVP ၏ပြုတ်ရည်။ အဆိုပါ OT စနစ်၏ဆင်တူထိန်းသိမ်းရေး [neurotransmission အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ရွေးချယ်ကျူးကျော်ထိန်းညှိ, ညီလေးကြောင်းဗဟို AVP ညွှန်း, ရန်လိုအပြုအမူတွေကိုပြောင်းလဲပေမယ့်မပေးခဲ့ပါဘူး231].
အဆိုပါ AH အတွက်ဆိုက်ကို-တိကျတဲ့ထိန်းသိမ်းရေးဒီအယူအဆထပ်မံထောက်ခံခဲ့ကြ  ။ တိုက်ရိုက် AH သို့ AVP ပြုတ်ရည်ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းလိင်ရင်တော့မှားမယ်အထီးကို (AH အတွက် AVP neurotransmission မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ကျူးကျော်သွေးဆောင်နိုင်သည်ကိုညွှန်ပြ, ယာဉ်နှင့်အတူသို့မဟုတ် AVP နှင့် V1aR ရန်နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူကုသအထီးထက်ဝတ္ထုအမျိုးသမီးဆီသို့ကျူးကျော်များ၏သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့အဆင့်ဆင့်ပြသသင်္ဘောသဖန်း 4E) ။ ထို့ပြင် pair တစုံ-ကပ်လျက်တည်ရှိအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ထဲမှာ, AH အတွက် AVP လွှတ်ပေးရေး (၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ထိတွေ့သောသူတို့အားထက်သူစိမ်းတိရိစ္ဆာန်ထိတွေ့ဘာသာရပ်များအတွက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခဲ့သင်္ဘောသဖန်း 4C) ။ စိတ်ဝင်စားစရာဤတိရိစ္ဆာန်များအတွက် AVP လွှတ်ရာပြင်းအားကျူးကျော်သူတို့၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်အဆိုးရဆက်နွယ်မှု၏ကြာချိန်နှင့်အတူအပြုသဘောဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အဆိုပါ AH အတွက် V1aRs ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း, ဒါပေမယ့်မရကအခြားဦးနှောက်ဒေသများ, (တိုက်ရိုက်ဒီအပြုအမူအတွက် AH AVP implicating, pair တစုံ-ကပ်လျက်တည်ရှိယောက်ျားအတွက်ရွေးချယ်ကျူးကျော်များ၏ Display ကိုတားဆီးသင်္ဘောသဖန်း 4E) ။ တူညီသောလေ့လာမှုမှာ, pair တစုံ-ကပ်လျက်တည်ရှိအထီး (လိင်ရင်တော့မှားမယ်အထီးထက် AH အတွက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မား V1aRs ၏သိပ်သည်းဆသော်လည်းမ OTRs ခဲ့ရှာတွေ့ခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်း 4D), ကြောင်း pair တစုံဘွန်းအတွေ့အကြုံကိုအကြံပြုခြင်း [ရွေးချယ်ကျူးကျော်ပေါ်ပေါက်ရေးအခြေခံသော AH AVP စနစ် neuroplastic ပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေ100] ။ ဒါဟာအယူအဆ (လိင်ရင်တော့မှားမယ်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ဝတ္ထုအမျိုးသမီးဆီသို့ကျူးကျော်တိုးမြှင့်, ဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကို-mediated ဗီဇလွှဲပြောင်းခြင်းအားဖြင့် V1aR များ၏ရှာဖွေတာကြောင့်အတု overexpression ကထောက်ခံခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်း 4F) ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤအချက်အလက်များကို AH အတွက် AVP အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ရွေးချယ်ကျူးကျော်များ၏စည်းမျဉ်းများတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကဖော်ပြသည်။
5.3 ။ ရွေးချယ်ကျူးကျော်များ၏ DA စည်းမျဉ်း
Mesolimbic DA လည်း [အထူးသဖြင့်, ရွေးချယ်ကျူးကျော်အတွက်သူစိမ်းအမျိုးသမီးဆီသို့ pair တစုံ-ကပ်လျက်တည်ရှိအထီးများကပြသသည့်ကျူးကျော်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီး8] ။ နှစ်ခုသီးခြားစမ်းသပ်မှုတွေမှာတော့လိင်ရင်တော့မှားမယ်ခဲ့အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏ဦးနှောက်အတွက် Dar ထု [24 နာရီသို့မဟုတ်နှစ်ပတ်အတွင်း (ဆိုလိုသည်မှာ pair တစုံ-ကပ်လျက်တည်ရှိ) အတွက်အမျိုးသမီးနှင့်အတူတွဲယောက်ျား၏ထိုဖြစ်စေနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်8] ။ Dar သိပ်သည်းဆအဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှုလိင်ရင်တော့မှားမယ်အထီးနှင့်အ 24 နာရီအမျိုးသမီးနှင့်အတူ mated ဖူးသောသူတို့အကြားမှတ်ချက်ပြုခဲ့သော်လည်းတစ်စုံ-ကပ်လျက်တည်ရှိအထီး NACC အတွက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မား D1Rs ၏အဆင့်ဆင့်, ဒါပေမယ့်မရ D2Rs ခဲ့ပေမယ့်မပေးက CP, သူတို့ရဲ့လိင်ထက် ရင်တော့မှားမယ် counterparts တွေကို (သင်္ဘောသဖန်း 4G နှင့် H) ။ တွဲပြီးနှင့်မိတ်လိုက်မ 24 နာရီ, NACC D1Rs တိုးမြှင့်နှစ်ပတ်အတွင်းအဖြစ်, ဒါပေမယ့်အဲဒီရလဒ်များစည်းမျဉ်း, ဒီ neuroplastic ပြောင်းလဲမှုဖက်ဦးစားပေး-တစ် D2R နှင့်ကိုက်ညီကြောင်းရလဒ်မဟုတ်ဘဲ D1R ၏ကနဦးဖွဲ့စည်းဘို့မလိုအပ်ကြောင်းညွှန်ပြ မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း aforementioned-ပေမယ့်မိတ်ဖက် (တစ်စုံနှောင်ကြိုး၏ဆိုလိုသည်မှာအပြည့်အဝတည်ထောင်ခြင်း) နဲ့တိုးချဲ့ sociosexual အတွေ့အကြုံအစားညွှန်ပြဖြစ်ပါသည်  ။ စိတ်ဝင်စားစရာ pair တစုံ-ကပ်လျက်တည်ရှိယောက်ျားအတွက် D1R အဆင့်ဆင့်၌ဤတိုး [နှစ်ပတ်အတွင်းများအတွက်အမျိုးသမီးနှင့်အတူတွဲဖြစ်ကြောင်းအထီးလူစိမ်းအမျိုးသမီးဆီသို့ကြံ့ခိုင်ထိုးစစ်ကျူးကျော်ဖော်ပြရန် (ကလူစိမ်းအမျိုးသမီးဆီသို့ထိုးစစ်ကျူးကျော်များ၏အမူအကျင့်ပေါ်ပေါက်ရေးနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်8, 99, 100] 24 နာရီလိင်ရင်တော့မှားမယ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးနှင့်အတူမိတ်ခွင့်ပြုခဲ့ဖြစ်ကြောင်းအထီး [မကျင့်သော်လည်း224]) ။ ဒါကြောင့်တစ်စုံ-ကပ်လျက်တည်ရှိယောက်ျား၏ NACC အတွက် D1R အဆင့်ဆင့်လူစိမ်းအမျိုးသမီးဆီသို့ရွေးချယ်ကျူးကျော်ထိန်းညှိခြင်းငှါတိုးပွားလာကြောင်းတွေးဆခဲ့သည်။ NACC D1Rs ၏ဆိုက်ကို-တိကျတဲ့ pharmacological ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကိုဤယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ CSF နဲ့ကုသ pair တစုံ-ကပ်လျက်တည်ရှိယောက်ျားအမျိုးသမီးကျူးကျော်ဆီသို့ကြံ့ခိုင်ထိုးစစ်ကျူးကျော်ပြသနေစဉ်, တစ်ဦး D1R ရန်၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် NACC ဆေးထိုး (ဒီကျူးကျော်ဖျက်သိမ်းသင်္ဘောသဖန်း 4I) ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားအဲဒီဒေတာ NACC D1R upregulation ထိုးစစ်လူစိမ်းအမျိုးသမီးဆီသို့ကျူးကျော်ခြင်းနှင့်များ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှဦးဆောင်သူတို့ကအပြည့်အဝတွဲ-ကပ်လျက်တည်ရှိဖြစ်ခြင်းမှလိင်ရင်တော့မှားမယ်ဖြစ်ခြင်း၏ပြည်နယ်ကနေတိုးအဖြစ်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ဖြစ်ပေါ်သောအရေးကြီးသောအမူအကျင့်ကူးပြောင်းခြင်းစေခြင်းငှါအကြံပြု ယင်းထူထောင် pair တစုံနှောင်ကြိုး  ။ [အလွဲသုံးစားမှုတစ်ဘုံမူးယစ်ဆေးထိတွေ့ထပ်ခါတလဲလဲဒီတွေ့ရှိချက်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့အပြိုင်အတွက်, စိတ်ကြွဆေး, conspecifics ဆီသို့တိုးမြှင့်ကျူးကျော်များနှင့်မိတ်ဖက်ဦးစားပေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းတားဆီး100, 151] ။ အရေးကြီးတာကအဲဒီအပြုအမူအပြောင်းအလဲများ [အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ပြောင်းလဲကြောင်း neuroplasticity ၏သဘာဝအပုံစံများ hijack နိုင်သည်ကိုညွှန်ပြခြင်း, AH အတွက် NACC နှင့် V1aRs အတွက် D1Rs တစ်ခု upregulation နှင့်အတူတိုက်ဆိုင်100, 151].
6 ။ အဖေဘက်ကအမူအကျင့်များ Neurobiology
အဖေဘက်ကအမူအကျင့် [tamarins အပါအဝင်အများအပြား nonhuman monogamous နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ်အစီရင်ခံထားသည်246] marmosets တွေကို  titis [160, 161], ကြွက်  တက်လာတယ်,  ကြွက်  နှင့် voles [174, 205] ။ nonhuman မျောက်ဝံများလေ့လာစရာများဖေဘက်ကအပြုအမူတွေနှင့်လူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်၏ထိန်းသိမ်းရေးသည်ဤအပြုအမူများခင်းကျင်းပြသရှိသည်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏စရိုက်လက္ခဏာတွေပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြနှင့်လူ့ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးသော Translational သတင်းအချက်အလက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်။ ကြွက်များတွင်လေ့လာမှုများ, အစား, အဖေဘက်ကအမူအကျင့်များဗဟိုစည်းမျဉ်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြပြီးအဖေဘက်ကအမူအကျင့်အခြေခံသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာယန္တရားများကိုရည်မှတ်တန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယား mouse ကိုဒီရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးဝင်သောကြွက်မော်ဒယ်သက်သေပြခဲ့ပေမဲ့ [24-26, 59], အ vole မော်ဒယ်ဖြစ်ကောင်းဖေဘက်ကအမူအကျင့်များ neurobiology ၏လေ့လာမှုများအတွက်အများဆုံးကျယ်ကျယ်အသုံးပြုခဲ့ပြီး, ဤလေ့လာမှုများအနေဖြင့်ဒေတာများကိုအောက်တွင်အကျဉ်းချုံးထားပါသည်။
6.1 ။ အဖေဘက်ကအမူအကျင့်နှင့်ဆက်နွယ်ဦးနှောက်ကို Activation
အဆိုပါမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏လေ့လာမှုနဲ့ရွေးချယ်ကျူးကျော်၌ရှိသကဲ့သို့, vole အဖေဘက်ကအမူအကျင့်ကိုဆန်းစစ်အစောပိုင်းလေ့လာမှုများ pup ထိတွေ့မှုနှင့်အဖေဘက်ကအမူအကျင့်များခင်းကျင်းပြသဖွငျ့ activated ဖြစ်ကြောင်းဦးနှောက်ဒေသများ map မှ Fos-ir ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦး conspecific pup ထိတွေ့ပြီးနောက်, အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles pup-ဆက်စပ်တွေကို processing အတွက်နှင့် / သို့မဟုတ်တွင်ဤဒေသများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု implicating, အ AOB, MEA, BNST, MPOA နှင့် LS အပါအဝင်အချို့သော forebrain ဒေသများရှိ Fos-ir အစွန်းအထင်းတိုးမြှင့်ပြသ အဖေဘက်ကအမူအကျင့်များစည်းမျဉ်း [134, 222] ။ အဖေဘက်ကအမူအကျင့်ထဲမှာ olfactory စနစ်နှင့် MEA ၏အခန်းကဏ္ဍကိုနောက်ထပ်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်လေ့လာမှုများကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ နှစ်နိုင်ငံ bulbectomy လက်ခံရရှိကြောင်းယောက်ျားတစ်ဦးအတုအယောင်-စစ်ဆင်ရေး [လက်ခံရရှိကြောင်းအထီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အခြားလူမှုရေးအပြုအမူနှင့်အတူအဖေဘက်ကအမူအကျင့်တစ်ခုသိသိသာသာကျဆင်းခြင်းပြသ135] ။ ထို့ပြင်အဆိုပါ MEA ၏ axon-ကြဲတွေ့ရှိရပါသည် [ထိုကဲ့သို့သောတူးဖော်ရေး, ရွေ့လျားနှင့် olfactory စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကဲ့သို့သောအခြားအပြုအမူတွေကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ဖခင်၏အပြုအမူလျော့နည်းသွား133] ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles, pup ထိတွေ့မှုနှင့်မတူဘဲသိသိသာသာ [နောက်ထပ်အထီးမိဘစောင့်ရှောက်မှု၏စည်းမျဉ်းတွင်ဤဦးနှောက်ဒေသများ၏အရေးပါမှုကိုအကြံပြုသည် MEA, BNST, MPOA, ဒါမှမဟုတ်အထီးမြက်ခင်း voles ၏ LS အတွက် Fos-ir တံဆိပ်ကပ်ခြီးမွှောဘူး222].
6.2 ။ အဖေဘက်ကအမူအကျင့်များ Neuropeptide စည်းမျဉ်း
ယခင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့သူတို့အားအပြုအမူတွေအပြင်, ဗဟို AVP နှင့် OT ကိုလည်းအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးအတွက်မိဘ၏အပြုအမူအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ။ အမျိုးသမီးကြွက်များ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ventricle သို့ AVP ၏ထိုး [မြဲမိဘအပြုအမူ induces177] ။ ထို့ပြင် Long-အီဗန်ကြွက် [သူတို့ရဲ့အနီးကပ် related AVP-လစ်လပ် Mutant မျိုးကွဲ, Brattleboro ကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သာလွန်မိဘအပြုအမူဖော်ပြရန်227] ။ ညီလေး, အစွန်အဖျားနှင့်ဦးနှောက်အတွက်နှစ်ဦးစလုံးလည်း parturition မှာသားအိမ်ကျုံ့အပါအဝင်မိခင်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ, ကစား, နို့စဉ်အတွင်းနို့ထွတ် [87, 211] နှင့်အမျိုးသမီးများတွင်မိခင်အပြုအမူ၏စည်းမျဉ်း [142, 177] ။ ညီလေးနှင့် AVP ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးအတွက်မိဘ၏အပြုအမူအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရနှင့်အမျိုးသမီးနှင့်ယောက်ျားပေါင်းနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အခြားလူမှုရေးအပြုအမူတွေခဲ့ကြသည့်အတိုင်း, သုတေသီများသည်ဤ neuropeptides အထီးမိဘအပြုအမူ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက်ကစားသောအခန်းကဏ္ဍအကဲဖြတ်စတင်ခဲ့သည်။
အဖေဘက်ကအမူအကျင့်တွင်ဤ neuropeptides များအတွက်အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုဖို့ပထမဦးဆုံးသက်သေအထောက်အထားအဖေဘက်ကအတွေ့အကြုံနှင့် AVP-ir ဖိုင်ဘာသိပ်သည်းဆသို့မဟုတ်ဦးနှောက်ထဲမှာ AVP / ညီလေး mRNA စကားရပ်များအကြားဆက်ဆံရေးအားစုံစမ်းစစ်ဆေးလေ့လာမှုများအားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သညျ။ နှစ်ပတ်အတွင်းများအတွက်အမျိုးသမီးနှင့်အတူတွဲခဲ့သို့မဟုတ်ပထမဦးဆုံးအချိန်သည်ဘိုးဘေးတို့ဟာသူတို့ရဲ့လိင်ရင်တော့မှားမယ် counterparts တွေကိုထက်, MPOA သိသိသာသာပိုပြီးအဖေဘက်ကအပြုအမူတွေကိုသရုပ်ပြနှင့် LS အတွက် AVP-ir အမျှင်၏အောက်ပိုင်းထုခဲ့ပေမယ့်မပေးခဲ့မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles [17, 18] ။ စိတ်ဝင်စားစရာ LS AVP-ir ဖိုင်ဘာသိပ်သည်းဆ၌ဤအပြောင်းအလဲတချို့ [မြက်ခင်း vole သည်ဘိုးဘေးတို့-ကြောင်းသဘာဝကျကျ LS AVP ပြောင်းလဲမှုများအမှန်ပင်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အဖေဘက်ကအမူအကျင့်တစ်ခုအခန်းကဏ္ဍစေခြင်းငှါခွေးများ-အကြံပြုခြင်းဆီသို့အဘယ်သူမျှမဖခင်၏အပြုအမူအနည်းငယ်သာပြသများတွင်မတွေ့ရှိခဲ့သည်17] ။ ဤဒေသတွင် AVP mRNA တံဆိပ်ကပ်မကြာသေးမီကဘိုးဘေးတို့ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း, ဒါပေမယ့်သဘာဝအတိုင်း Non-ဖေဘက်ကအထီး montane vole သည်ဘိုးဘေးတို့အတွက်မပြောင်းခဲ့ဘူးကြောင်းအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles တိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်အဖြစ် PVN အတွက် AVP လည်း [, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ဖေဘက်ကအပြုအမူတွေအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီး226] ။ နည်းနည်းကိုင်းတောကွင်း voles အတွက်ဖခင်၏အပြုအမူအတွက်ညီလေး၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကြောင်းကိုလူသိများသည်ဖြစ်သော်လည်း, ဒီ neuropeptide ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါအချို့သက်သေအထောက်အထားများရှိနေပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, မိခင်များသာနေဖြင့်မွေးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ခွေးများလျော့နည်းလျက် / ဖြီးလိမ်းပုံကိုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့်နှစ်ဦးစလုံးမိဘများကမွေးခွေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုနှေးကွေးစွာရင့်ကျက်။ လူကြီးများတွင်ယခင်အဆုံးစွန်ထက်လျော့နည်း pup-ညွှန်ကြားမိဘအပြုအမူနှင့် hypothalamus အတွက်တိုးမြှင့်ညီလေး mRNA စကားရပ်ပြသပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများအဓိကအား [အမျိုးသမီးအတွက်မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်4] ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားအဲဒီဒေတာ AVP နှင့် OT အမျိုးမျိုးသောဦးနှောက်ဒေသများတွင်အဖေဘက်ကအမူအကျင့်ကိုထိန်းညှိခြင်းအလိုငှါဖော်ပြသည်။
အနည်းငယ်လေ့လာမှုများကိုတိုက်ရိုက်အဖေဘက်ကအမူအကျင့်အတွက်ဗဟို AVP နှင့်ညီလေးရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အရေးပါမှုကိုအကဲဖြတ်ကြပါပြီ။ ဒီလေ့လာမှုတွေထဲကတစ်ခုမှာတော့သိမ်မွေ့သောအပြောင်းအလဲ AVP သို့မဟုတ်ညီလေး၏ icv အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်လိင်ရင်တော့မှားမယ်ယောက်ျား၏အဖေဘက်ကအပြုအမူတွေအတွက်မှတ်ချက်ပြုတစ်ဦးနဲ့ OTR ၏ပေါင်းစပ် icv ကုသမှုသော်လည်းနှင့် V1aR ရန် [ထိုး-မှီခိုထုံးစံ၌အဖေဘက်ကအပြုအမူတွေကိုထိခိုက်ခဲ့သည်13] ။ မြင့်မားသောဆေးများမှာ (1ng တစ်ခုချင်းစီ) အဖေဘက်ကအမူအကျင့်ကိုသိသိသာသာလျှော့ချခဲ့ pup တိုက်ခိုက်မှုများ၏ဖြစ်ပျက်မှုသိသိသာသာတိုးမြှင့်နေစဉ်အနိမ့်ဆေးများ (1ng တစ်ခုချင်းစီ) မှာ OTR ကို / V10aR ရန် [pup ချဉ်းကပ်မှုနှင့် Huddle များအတွက်အောင်းနေချိန်တိုးမြှင့်ဖို့တော်မှာ13] ။ ဒီလေ့လာမှုအလယ်ပိုင်း AVP နှင့် OT အမှန်ပင်အဖေဘက်ကအမူအကျင့်အပေါ် functional ဖြစ်စေသက်ရောက်မှုရှိသည်ပြနေစဉ်, နောက်ထပ်လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်နောက်ထပ်ဦးနှောက်အတွင်းတိကျသောအဖေဘက်ကအမူအကျင့်များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်ဟာသူတို့ရဲ့က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်အသီးအသီး neuropeptide ၏အခန်းကဏ္ဍကိုနားလည်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ယနေ့အထိအဲဒီလိုလုပ်ဖို့တစ်ခုတည်းသောလေ့လာမှုမှာတော့ဝမ် et al (1994) ခွေးများဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရယူခြင်း, ကျော် huddling / ဝပျ, ကျွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ / ဖြီးလိမ်းပုံအပါအဝင်အသုံးအများဆုံးအဖေဘက်ကအမူအကျင့်, လေးခုအပေါ် LS အတွက် AVP ခြယ်လှယ်များ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ တိုက်ရိုက် LS သို့ AVP နှင့်အတူထိုးသွင်းလိင်ရင်တော့မှားမယ်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အထူးသဆားနှင့်အတူထိုးသွင်း voles ထက်ခွေးများကျော်ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်ဝပျ, အဖေဘက်ကလှုပ်ရှားမှုတွေပြသသိသိသာသာပိုပြီးအချိန်ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုကြောင့် [AVP အဖေဘက်ကအမူအကျင့်များစည်းမျဉ်းများတွင်လိုအပ်သောနှင့်လုံလောက်သောနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ် LS အကြံပြုသည် LS အတွက် V1aR ရန်၏ Pre-ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်ပိတ်ဆို့ခဲ့သည်213].
အဖေဘက်ကအမူအကျင့်အပေါ်ညီလေး၏ site ကို-တိကျတဲ့သက်ရောက်မှုကိုစမ်းသပ်ခဲ့ဖူးဘူးသော်လည်း, NACC OT ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါအကြံပြုဖို့သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ ဒါကသက်သေအထောက်အထား [ဖခင်၏အပြုအမူအတွက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုနှင့်အတူပတျသကျကြောင်း NACC OTR ကိုသိပ်သည်းဆမျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုသရုပ်ပြနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများကနေအဓိကအားထား122] ယောက်ျားအတွက် pair တစုံဘွန်းနှင့်ဆက်စပ်သည်အခြားအပြုအမူတွေအတွက် OTR ကို activation ၏အရေးပါမှု (ဥပမာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း) [150, 244] နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမိဘအပြုအမူအတွက် NACC OTRs တစ်အခန်းကဏ္ဍမှတ်တမ်းတင်အမျိုးမျိုးသောလေ့လာမှုများ။ ဥပမာအားဖြင့်, NACC OTR ကိုထုလိင်ရင်တော့မှားမယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်အလိုအလျောက်မိခင်အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောပါပြီ။ အထူးသမိခင်အပြုအမူပြသကြောင်းအမျိုးသမီး [မိခင်အပြုအမူတွေသို့မဟုတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခွေးများမပြခဲ့ဘူးကြောင်းအမျိုးသမီးထက် NACC အတွက် OTRs မြင့်မားထုခဲ့173] ။ အလားတူအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆက်စပ်မှုလူငယ်အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် NACC OTR ကိုသိပ်သည်းဆနှင့် alloparental စောင့်ရှောက်မှုအကြားမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်  ။ ထို့ပြင်အဆိုပါ NACC အတွက် OTR ကိုသိပ်သည်းဆအပြုသဘော [မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအပါအဝင်အခြား Affiliate အပြုအမူတွေ, နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်188] ။ တိုက်ရိုက်ယောက်ျားအတွက်စမ်းသပ်ပြီးဘယ်တော့မှပေမယ့်အဲဒီဒေတာ NACC ညီလေးများအတွက်အလားအလာအဖေဘက်ကအမူအကျင့်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့ဖော်ပြသည်။
6.3 ။ အဖေဘက်ကအမူအကျင့်များ DA စည်းမျဉ်း
သုတေသနမှာများစွာသောသဘောတူညီချက်မိခင်အပြုအမူတွေအတွက်ဗဟို DA ၏အရေးပါမှုကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်နေစဉ် ([တွေ့မြင်171]) ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, နည်းပါးလာလေ့လာမှုများအဖေဘက်ကအမူအကျင့်အတွက်ဗဟို DA များအတွက်အခန်းကဏ္ဍစုံစမ်းစစ်ဆေးပါပြီ။ အရေအတွက်ကန့်သတ်ထားပေမယ့်အဲဒီလေ့လာမှုများ DA လည်းအထီးမိဘစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းဆွဲဆောင်မှုပဏာမသက်သေအထောက်အထားပေးပါပြီ။
မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ဖခင်၏အပြုအမူများ၏ DAergic စည်းမျဉ်းဆနျးစစျဖို့သာ pharmacological စမ်းသပ်မှုများတွင် Lonstein (2002) Dar ပိတ်ဆို့အဖေဘက်ကအမူအကျင့်များကွဲပြားရှုထောင့်အပေါ် differential ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ (ဥပမာ, ဆက်သွယ်ခြင်းကျွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့နှင့်ခွေးများကျော် huddling) ရှိကြောင်းရုပ်ပြ။ အထူးသဖြင့် nonselective Dar ရန်နှင့်အတူ DARs ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း, haloperidol အချို့ဖေဘက်ကအပြုအမူတွေ-အပါအဝင်ထိုကဲ့သို့သောခွေးများကျော် huddling အဖြစ်ခွေးများ-သေးမြှင့်တင်ရန်အခြားသူများဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်ကျွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့အာရုံချို့ယွင်း။ haloperidol အချို့သောဆေးများမှာယေဘုယျအားမော်တာလှုပ်ရှားမှု disrupts ပေမယ့် , အခြို့အဖေဘက်ကအမူအကျင့်အပေါ် haloperidol များ၏သက်ရောက်မှုများ, အထူးသ pup ကိုလျက်, Dar activation အဖေဘက်ကအမူအကျင့်အပေါ်မူလတန်းသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းညွှန်ပြ, စုစုပေါင်းလှုပ်ရှားမှုရမှတ်များပြောင်းလဲမဆေးများမှာမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဤဒေတာကိုအဖေဘက်ကအမူအကျင့်ထဲမှာ DA များအတွက်အခန်းကဏ္ဍသရုပ်ပြဒါပေမယ့်လည်းအဖေဘက်ကအမူအကျင့်များ DAergic စည်းမျဉ်းအပြုအမူ-တိကျတဲ့ [ကြောင်းသရုပျဖျောမသာ153] ။ အဘယ်သူမျှမ site ကို-တိကျတဲ့ထိန်းသိမ်းရေးသေးဖေဘက်ကအမူအကျင့်များ DAergic စည်းမျဉ်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဦးနှောက်ဒေသများထုတ်ဖေါ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ခွေးများတုံ့ပြန်အာရုံခံ activation ပုံဖော်ထားတဲ့စမ်းသပ်မှုဤအမှုသို့အချို့သောထိုးထွင်းသိမြင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ဦးနှောက် dimorphic-အထီး [အမျိုးသမီးထက်ဤဒေသများမှာပို DAergic ဆဲလ်များလိင်ကြောင်း pBNST နှင့် MeApd အတွက် DAergic ဆဲလ်တစ်အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောသတိရပါ168] ကတညျးကဤဆဲလ်တွေအန်ဒရိုဂျင်နှင့်အီစထိုဂျင်ဖို့အလားအလာအထိခိုက်မခံများမှာ  ။ စိတ်ဝင်စားစရာအဲဒီဆဲလ်လူဦးရေ [conspecific ခွေးများနှင့်အတူအပြန်အလှန်ပြီးနောက်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ဦးနှောက်အတွက် (ကို double-တံဆိပ်ကပ် Fos / TH အားဖြင့်ညွှန်ပြ) activated နေကြတယ်168] ထို့ကြောင့်အဖေဘက်ကအမူအကျင့်ထဲမှာပါဝင်နိုင်ပါသည်။
အဘယ်သူမျှမလေ့လာမှုများမရှိသေးပါကဒီအဆုံးမှကောက်ယူခဲ့ကြပေမဲ့လည်းက NACC DA လည်းအဖေဘက်ကအမူအကျင့်တစ်ခုအခန်းကဏ္ဍစေခြင်းငှါအကြံပြုသည်။ ယခင်ကဖော်ပြထားသလို, vole NACC သိပ်သည်း DA ဆိပ်ကမ်းနှင့် receptors ပါရှိသည်နှင့်အ NACC DA [အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ရွေးချယ်ကျူးကျော်အပါအဝင် pair တစုံဘွန်းနှင့်ဆက်စပ်အခြားလူမှုရေးအပြုအမူတွေ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ7, 8] ။ ထို့အပြင် NACC DA သည်အခြားကြွက်မျိုးစိတ်အတွက်မိခင်အပြုအမူအတွက်လူသိများတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ကြွက်များတွင်ဥပမာ, DA [pup လှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်အတွက် NACC အတွက်ဖြန့်ချိတာဖြစ်ပါတယ်109] နှငျ့ကိုရွှေ့ဆိုင်ကာလကိုဖြတ်ပြီး NACC DA လှုပ်ရှားမှုမြားတှငျပွောငျးလဲ pup ပြန်လည်ရယူခြင်းထံမှအထိမိဘအပြုအမူတွေအမျိုးမျိုးအတွက်အပြောင်းအလဲသူနာပြု, ကျွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ / ဖြီးလိမ်းပုံနှင့်မိခင်မှတ်ဉာဏ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းကြသည်  ။ အထီးမိဘအပြုအမူ၏အနာဂတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ NACC DA အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍသောဖြစ်နိုင်ခြေဆန်းစစ်ရန်အဘို့အထို့ကြောင့်ကျိုးနပ်ပေမည်။
7 ။ pair တစုံဘွန်းအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်အခြား neurochemicals / ဟော်မုန်း
AVP, ညီလေးနှင့် DA အပြင်, အခြား neurotransmitters နှင့်ဟော်မုန်းမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် pair တစုံဘွန်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်လူမှုရေးအပြုအမူတွေအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ။ တဦးတည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ဥပမာ hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) ဝင်ရိုး, စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု mediates သောစနစ်ဖြင့်ဆက်စပ် neurochemicals ပါဝငျသညျ။ အတိုချုပ်တစ်ဦးဖိအားစဉ်အတွင်းယင်း hypothalamus ကနေဖြန့်ချိ corticotrophin-releasing အချက် (CRF) adrenocorticotrophic ဟော်မုန်း (ACTH) ၏ပေါင်းစပ်ဖို့ဦးဆောင်သည့် anterior pituitary အတွက် CRF receptors မှချည်နှောင်  ။ ACTH ထို့နောက်ထို့နောက်အလေးပေးဖို့တုံ့ပြန်မှုပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ဦးနှောက်ထဲမှာ glucocorticoid receptors (ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း) အပေါ်ပြုမူနိုင်သည့်ထိုကဲ့သို့သော corticosterone (CORT) အဖြစ် glucocorticoids, ထုတ်လုပ်ပေးဖို့ adrenal cortex ပေါ်မှသွေးကြောများနှင့်လုပ်ရပ်များသို့ဖြန့်ချိတာဖြစ်ပါတယ်  ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles သူတို့အကြောင်းကို 5- 10-ခေါက် သာ. ကြီးမြတ် Basal ပလာစမာ CORT နှင့် ACTH ၏ 3-ခေါက် သာ. ကြီးမြတ် Basal အဆင့်ဆင့်ရန်ရှိသည်အတိုင်း, glucocorticoid ခံနိုင်ရည်ကြွက်ဖြစ်စဉ်းစား 10-ခေါက်အောက်ပိုင်းဆှဖှေဲ့ GRs, အထူးသဖြင့်အမျိုးအစား-ငါထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းအတူကြောင်းနေကြပါတယ် [ကြွက်နှင့်ကရာ voles နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါဦးနှောက်ထဲမှာအနိမ့်သိပ်သည်းဆထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်110, 204].
အမူအကျင့်စမ်းသပ်ချက်ကနေဒေတာများကို pair တစုံဘွန်းအပေါ် CORT ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုလိင် dimorphic ကြောင်းဖော်ပြသည်။ အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ခုနှစ်တွင်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းမှဦးဆောင်သောအထီးနှင့်အတူတွဲပြီး, သိသိသာသာသွေးရည်ကြည် CORT အဆင့်ဆင့်ယုတ်လျော့  ။ ထို့ပြင်ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းလှုပ်ရှားမှုအတွင်းလျှော့ချရေး, ဖြစ်စေ adrenalectomy မှတဆင့် CORT ပျံ့နှံ့နေတဲ့လျော့ကျလာခြင်းဖြင့်  တစ်ခုသို့မဟုတ်ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းရန်နှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များကုသနေဖြင့်  မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း facilitated ။ ဆနျ့ကငျြ, CORT ထိုးသို့မဟုတ် CORT ပျံ့နှံ့နေတဲ့တိုးပွားလာသောစိတ်ဖိစီးမှုရေကူးစမ်းသပ်  မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကာကွယ်  ။ အတူတူအဲဒီဒေတာ HPA ဝင်ရိုးလှုပ်ရှားမှုအတွင်းလျော့နည်းသွားအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ [ယောက်ျားအတွက်, အခြားတစ်ဖက်တွင်, adrenalectomy မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း inhibited နှင့်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှု CORT အစားထိုးခြင်းဖြင့်ပြောင်းပြန်ခဲ့သည်64] CORT ယောက်ျားအတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်လိုအပ်သောကြောင်းညွှန်ပြ။ ထို့အပြင်တစ်ဦးထက်ပိုမကြာသေးမီလေ့လာမှုတစ်ခုကပ်လျက်တည်ရှိ partner ၏အရှုံးသိသိသာသာ HPA ဝင်ရိုးလှုပ်ရှားမှုမိတ်ဖက်ခြားနားခြင်းဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှုဖျန်ဖြေခြင်းနှင့်အရှင်, ထိန်းသိမ်းတစ်ကဏ္ဍမှပါစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း, အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ CORT အဆင့်ဆင့်နှင့် adrenal gland အလေးချိန်တိုးလာနှင့် ရှိပြီးသား pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု  ။ အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုးလည်းအဖေဘက်ကအမူအကျင့်ထဲမှာပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။ တစ်ဦးရေကူးစိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့အထီး [ခွေးများနှင့် unstressed ထိန်းချုပ်မှုထက်ခွေးများကျွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့နှင့်မြောကျမတို့ကိုပိုပြီးအချိန်ဆီသို့တစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်ကျော် huddling သိသိသာသာပိုပြီးအချိန်ကုန်14] ။ ဤရွေ့ကားအမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ [မိဘအပြုအမူကဲ့သို့မိတ်ဖက် preference ကိုအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏သက်ရောက်မှုလိင် dimorphic ဖြစ်ဖွဲ့စည်းရေး-စေခြင်းငှါညွှန်း, အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်14].
CRF လည်း pair တစုံဘွန်းအပြုအမူတွေအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။ CRF ထိုးခံသောသားယောက်ျားကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles [မိတ်လိုက်၏မရှိခြင်းအတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးပြသ, ဤသွေးဆောင်အပြုအမူတစ်ခု CRF အဲဒီ receptor ရန်ပူးတွဲအုပ်ချုပ်ရေးပိတ်ဆို့ခဲ့သည်67] ။ မိတ်ဖက်ဦးစားပေး၏ CRF ဖျန်ဖြေခြင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဦးနှောက်ဧရိယာများကိုလည်းဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ CRF အဲဒီ receptor ရန် inhibited သော်လည်းအဆိုပါ NACC သို့ဒေသခံ CRF ထိုး [, အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း facilitated148] ။ ထို့ပြင်အမျိုးသမီးနှင့်အတူတွဲဖက်မှု [အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏ BNST အတွက် CRF mRNA တစ်ခုတိုးရူးနှမ်း29] ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ [urocortin-II ကို, အ CRF peptide မိသားစုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏ icv အုပ်ချုပ်ရေးယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles နှစ်ဦးစလုံးအတွက် passive မိဘအပြုအမူတိုးလာပေမယ့်ဒီကုသမှုစိုးရိမ်စိတ်သို့မဟုတ် locomotor အပြုအမူတွေအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်မှုရှိခဲ့190].
အခြား neurochemicals လည်းမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်လူမှုရေးစဘွန်းတွင်ပါဝင်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles, NBQX ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA အုပ်ချုပ်ရေး, မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းသွေးဆောင်တစ်ခု AMPA အဲဒီ receptor ရန်, သို့မဟုတ် bicuculline တစ်ဂါဘမြို့သားအဲဒီ receptor ရန်, အတွက်ရွေးချယ်ရဆက်နွယ်မှုတွင်ဤအမိုင်နိုအက်ဆစ် implicating  ။ အဆိုပါရွေးချယ် serotonin reuptake inhibitor ၏အုပ်ချုပ်ရေး, fluoxetine [ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles နှစ်ဦးစလုံးအတွက်မိဘ၏အပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အောင်းနေချိန်တိုးမြှင့်ယောက်ျားအတွက်ကျူးကျော်လျော့နည်းသွားနှင့် nonsocial အပြုအမူတွေအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်မှုရှိခဲ့209] serotonin လည်း pair တစုံဘွန်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်လူမှုရေးအပြုအမူတွေကိုဖျန်ဖြေခြင်းအလိုငှါညွှန်ပြ။ Gonadal steroids လည်းဤစာရင်းတွင်ထည့်သွင်းထားနိုင်ပါတယ်။ အသက်တာ၏ပထမဦးဆုံးသို့မဟုတ်ဒုတိယပတ်အတွင်း testosterone ဟော်မုန်းသို့မဟုတ်အီစရိုဂျင်၏ခြယ်လှယ်သိသိသာသာ [လူငယ်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်နောက်ဆက်တွဲ Affiliate နှင့် / သို့မဟုတ် alloparental အပြုအမူတွေကိုပြောင်းလဲ138, 184] ။ estrogen receptor alpha (ERα) မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ Bond အပြုအမူတွေအပေါ် gonadal steroids ၏သက်ရောက်မှုအချို့ဖျန်ဖြေလိမ့်မည်။ လေ့လာမှုများ, အမျိုးသမီးတို့သည် MEA, BNST, MPOA နှင့် VMH အထီးထက်, နှင့် BNST အတွက်ERα-ir အစွန်းအထင်းတစ်ဦးကျဆင်းခြင်းအပါအဝင်အများအပြားဟာဦးနှောက်ဒေသများတွင်ပိုမိုERα-ir ဆဲလ်ရှိသည် MPOA သရုပ်ပြပွီ, အမျိုးသမီး၏ VMH သော induction နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Reception ၏  ။ အထီး, အ MEA အတွက်ပိုကောင်းERαစကားရပ်များတွင်တစ်ခု adenoassociated ဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကို၏ transfection အသုံးပြုပုံ [alloparental အပြုအမူနှင့်ချို့ယွင်းမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏ display ကိုနှောင့်အယှက်58] ။ အလားတူပဲ, BNST အတွက်ပိုကောင်းERαစကားရပ်နှင့်အတူယောက်ျား [လူမှုရေးဆက်နွယ်မှုလျော့နည်းသွားပြသ140] ။ ဤရွေ့ကားဒေတာမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ဒေသဆိုင်ရာERαစကားရပ်နှင့်လူမှုရေးအပြုအမူများအကြားတစ်ဦးပြောင်းပြန်ကြားဆက်ဆံရေးဖော်ပြသည်။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားသည်လေ့လာမှုများမီးမောင်းထိုးပြအထက်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles နှစ်ဦးစလုံးအတွက်တစ်စုံ Bond အပြုအမူတွေ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက်မျိုးစုံ neurochemicals နှင့်ဟော်မုန်းများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုဖော်ပြခဲ့သည်။
8 ။ Neurochemical / ဟော်မုန်း interaction က
အထက်ပြန်လည်သုံးသပ်အဖြစ်, neurochemical, neurotransmitter နှင့်ဟော်မုန်းစနစ်များအမျိုးမျိုး pair တစုံဘွန်း်ပတ်သက်နေပါပြီ။ သို့သော်ဤစနစ်များသည်ဤရှုပ်ထွေးလူမှုရေးအပြုအမူထိန်းညှိရန်လွတ်လပ်စွာပြုမူကြောင်းမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါအပိုင်းမှာတော့ကျနော်တို့ pair တစုံ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထဲမှာ CRF, ညီလေး, AVP, DA, အချိုမှု (GLU), gamma-aminobutyric အက်ဆစ် (ဂါဘမြို့သား), နှင့် gonadal Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းအပါအဝင်, ဤစနစ်များအချို့အကြားလူသိများ interaction က, မှတ်တမ်းတင်လေ့လာမှုများပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မယ် Bond အပြုအမူတွေ, အဓိကအားဖြင့်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း။
ပထမဦးဆုံး neurochemicals နှစျယောကျမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထဲမှာတယောက်ကိုတယောက်နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖို့အကြံပြု CORT နှင့် OT ခဲ့ကြသည်။ [, လိင်-ရင်တော့မှားမယ်အမျိုးသမီးတစ်ကျွမ်းတဝင်မရှိသောအထီးသိသိသာသာတိုးမြှင့်အလယ်ပိုင်းညီလေးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ထိတွေ့ကွောငျးသတိရပါ187] နှင့်သွေးရည်ကြည် CORT အဆင့်ဆင့်ယုတ်လျော့  သက်ရောက်မှုမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းလွယ်ကူချောမွေ့ရန်စဉ်းစားမိတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာညီလေး၏ icv ထိုး [OT ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းကိုထိန်းညှိဖို့ HPA ဝင်ရိုးနှင့်အတူအပြန်အလှန်စေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း, သွေးရည်ကြည် CORT အဆင့်ဆင့်အတွက်နှိုင်းယှဉ်ကျဆင်းခြင်းထုတ်လုပ်65] - အခြားလူမှုရေးအပြုအမူတွေအတွက်အချိန်ပိုနှင့် CORT အကြားအကြံပြုအပြန်အလှန်ပေးထားအနာဂတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုခိုင်လုံစေခြင်းငှါစိတ်ကူးတစ်ခု [6, 39, 42, 132].
OT ကိုလည်းအဲဒီနှစျခု neuropeptides နီးကပ်စွာအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ကြောင်းပေးထား, မိတ်ဖက်ဦးစားပေး၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် AVP နှင့်အတူအပြန်အလှန်ရန်အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့တွေ့ရှိချက်ပြသနှင့်အလားတူဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ-မတူညီသောနှစ်ခုသာအမိုင်နိုအားဖြင့်ဝေမျှအက်ဆစ်-ပေမယ့်တတ်နိုင်သမျှမသာခဲ့သ ထို့အပြင် [ရဲ့တစ်ဦးချင်းစီကတခြား receptors နှင့်အတူအပြန်အလှန်19] ။ ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့, AVP သို့မဟုတ်ညီလေး၏ icv ဆေးထိုးယောက်ျားနှင့်တစ်ခုဆန့်ကျင်ဘက်လိင် conspecific တိရစ္ဆာန်နှင့်တွဲပြီး၏ 1 နာရီသကဲ့သို့နည်းနည်းပြီးနောက်အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles နှစ်ဦးစလုံးအတွက်လက်တွဲဖော်ဦးစားပေးသွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ [မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ် AVP ၏သက်ရောက်မှုတစ်ခု OTR ကိုရန်၏ရှေ့မှောက်တွင်အတွက်ဖျက်သိမ်းနေကြပြီး, ညီလေး၏သက်ရောက်မှု AVP နှင့် OT ဖက်ဦးစားပေးပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အပြန်အလှန်နိုင်သည်ကိုညွှန်ပြတစ်ဦး V1aR ရန်ပေါ်ရှေ့တော်၌ဖျက်သိမ်းနေကြ43] ။ နောက်ထပ်အဲဒီရလဒ်တွေကို [မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏ပံ့ပိုး V1aR နှင့် OTRs နှစ်ဦးစလုံး၏တစ်ပြိုင်နက် activation လိုအပ်စေခြင်းငှါညွှန်ပြ43] ။ အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏ LS အတွက်ဆိုက်ကို-သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကိုင်တွယ်ကတည်းကဒီအယူအဆထောက်ခံခဲ့သည်။ အဆိုပါ LS သို့ AVP microinjection အားဖြင့်သွေးဆောင်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း [အနေနဲ့ညီလေးအဲဒီ receptor ရန်၏တစ်ပြိုင်နက်အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်149] ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤလေ့လာမှုများအလယ်ပိုင်း OT နှင့် AVP စနစ်များကိုမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်နှင့်အတူဖျော်ဖြေပွဲအတွက်အလုပ်မလုပ်စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ညီလေးနှင့် AVP လည်းဖက်ဦးစားပေးပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်, ထိုကဲ့သို့သော DA ကဲ့သို့သောအခြား neurotransmitter စနစ်များနှင့်အတူအပြန်အလှန်အားပြပြီ။ အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ခုနှစ်တွင်ဥပမာ, NACC D2R activation အားဖြင့်သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေး [တစ်ခု OTR ကိုရန်၏တစ်ပြိုင်တည်းအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်တားဆီးခဲ့သည်150] ။ ပြောင်းပြန်အလယ်ပိုင်း OT အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေး [သည့် NACC အတွက် D2R ရန်၏တစ်ပြိုင်တည်းအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားခဲ့ကြသည်150] ။ ဤရွေ့ကားရလဒ်များ NACC အတွက်နှစ်ဦးစလုံး D2Rs နှင့် OTRs ၏တစ်ပြိုင်နက် activation အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေး၏ပံ့ပိုးကူညီဘို့လိုအပ်သည်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ AVP-DA interaction ကလည်းမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ။ ဤဒေသနှင့်ဖွဲ့စည်းရေးအတွက် V1aR ၏ upregulation အတွက်ရရှိလာတဲ့အတွက် VP သို့မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole V1aR ဗီဇတစ်ခုအိမ်ထောင်ဖက်-လက်ခံရရှိဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကို-mediated လွှဲပြောင်းနှင့်အတူမယ်လို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ပုံစံဖက်ဦးစားပေးမယ့်မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများတွင်သဘာဝကရာအထီးမြက်ခင်း-ကြောင်း voles, အဖော်ရှာ၏ 24 နာရီအကြာတွင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဦးစားပေး၏  ။ တစ်စက္ကန့်စမ်းသပ်မှုများတွင်ဤဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကို-သွေးဆောင်ဦးစားပေး AVP နှင့် DA [pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အပြန်အလှန်စေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း, ကြိုတင်မိတ်လိုက်ရန် D2R ရန်၏အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားခဲ့ကြသည်145] ။ D2R အဆိုပါ VP မှတိုက်ရိုက် NACC စီမံကိန်းတွင်အလတ်စား spiny အာရုံခံဖော်ပြအတိုင်းဤအယူအဆ [ဤနှစ်ခုဒေသများအကြားလူသိများ neuroanatomical ကွန်နက်ရှင်ကထောက်ခံနေသည်90].
GLU, ဂါဘမြို့သားများနှင့် CRF လည်း [ဖက်ဦးစားပေး၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် DA နှင့်အတူအပြန်အလှန်ရန်အကြံပြုခဲ့ကြ52, 53] ။ မိတ်လိုက်၏မရှိခြင်းအတွက် VTA သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေးသို့အသီးသီး NBQX ၏ဆေးထိုးသို့မဟုတ် bicuculline မှတဆင့် AMPA GLU သို့မဟုတ်ဂါဘမြို့သား receptors ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း, ။ အဆိုပါ VTA အဆိုပါ NACC အပါအဝင် mesolimbic ဦးနှောက်ဒေသများမှ DAergic afferents ၏အဓိကအရင်းအမြစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်အတိုင်းပြုလုပ် [မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ်ကဤရန်များ၏သက်ရောက်မှု NACC DAergic neurotransmission အပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုကကမကထပြုခဲ့ပြီစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်53] ။ သီးခြားလေ့လာမှု, ru-486 တစ်ဦးထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းရန်၏အရံအုပ်ချုပ်ရေး, အဖော်ရှာ၏မရှိခြင်းအတွက်အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေး [အတွက်52] ။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှု [မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ်ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း၏သက်ရောက်မှုအလယ်ပိုင်း DA စနစ်များနှင့်အတူတစ်ဦးအပြန်အလှန်မှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့စေခြင်းငှါအကြံပြုသည်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ventricle သို့ D1R သို့မဟုတ် D2R ရန်ဖြစ်စေ၏ coadministration ပိတ်ဆို့ခဲ့သည်52] ။ နောက်ထပ်လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် GLU, ဂါဘမြို့သား, CRF နှင့် DA အကြားအပြန်အလှန်၏သဘောသဘာဝအသေးစိတ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ gonadal steroids pair တစုံဘွန်းအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍနှင့်ဤအပြုအမူအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ neuropeptide နှင့် neurochemical စနစ်များအမျိုးမျိုးနှင့်အတူအပြန်အလှန်ယူဆနေကြသည်။ အထီး (သို့မဟုတ်အထီး chemosensory အချက်ပြမှုများ) ကိုဥပမာအားဖြင့်, တိုးချဲ့ထိတွေ့ [အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် estradiol အဆင့်ဆင့်ပျံ့နှံ့နေတဲ့နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်, အမူအကျင့် estrus, ဒါမှမဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Reception တိုးပွါး35, 36, 47, 203] ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Reception ကိုလည်းတစ်ဦးတည်းအီစထိုဂျင်အုပ်ချုပ်ရေးမှတစ်ဆင့် ovariectomized အမျိုးသမီးအတွက်သွေးဆောင်ခံရနိုငျ  ။ စိတ်ဝင်စားစရာအထီး chemosensory အချက်ပြမှုများမှထိတွေ့မှုအားဖြင့်သို့မဟုတ် exogenous အီစထိုဂျင်အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်တိုးမြှင့်သွေးရည်ကြည်အီစရိုဂျင်အဆင့်ဆင့်, သိသိသာသာ [မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ဦးနှောက်အတွက် binding OTR ကိုတိုးမြှင့်233] အီစရိုဂျင်နှင့် OT မိတ်လိုက်-ပေးသောအမျိုးသမီးအတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ထိန်းညှိဖို့အပြန်အလှန်စေခြင်းငှါညွှန်ပြ  ။ ယောက်ျားများတွင် testosterone ဟော်မုန်းမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ် AVP များ၏သက်ရောက်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးရန်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ပြန်လည်သိမ်းဆည်း, AVP ၏ icv အုပ်ချုပ်မှု [တွဲပြီးသာ 1 နာရီအောက်ပါအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်43] ။ စိတ်ဝင်စားစရာ AVP အုပ်ချုပ်မှု [testosterone ဟော်မုန်းများ၏စည်းရုံးရေးသက်ရောက်မှုမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ် AVP ၏သက်ရောက်မှုများအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ကြောင်းအကြံပြု, သူတို့ရဲ့မွေးနေ့၌ castrated ခဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးသွေးဆောင်ပါဘူး57] ။ လူကြီးအတွက် castrated ခဲ့အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အဆိုပါ LS အတွက် AVP-ir အမျှင်တစ်ဦးလျှော့သိပ်သည်းဆခဲ့ရပြီးနဂိုအတိုင်း gonads နှင့်အတူထိန်းချုပ်မှုထက်လျော့နည်းဖေဘက်ကအမူအကျင့်ကိုပြအဖြစ် Testosterone နဲ့ AVP [အပြင်ဖခင်၏အပြုအမူ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက်အပြန်အလှန်ဖြစ်နိုင်သည်219] ( cf. [152, 153]) ။
9 ။ အကျဉ်းချုပ်နှင့်နောက်ထပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစား
မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် Pair ကို Bond ရွေးချယ်ရဆက်နွယ်မှု, ရွေးချယ်ကျူးကျော်, မိဘစောင့်ရှောက်မှုအပါအဝင်အများအပြားကွဲပြားအပြုအမူတွေ၏ညှိနှိုင်းပါဝငျကွောငျးရှုပ်ထွေးပြီးလူမှုရေးအပြုအမူဖြစ်ပါတယ်။ ဤအအပြုအမူတွေ၏သင့်လျော်သောစကားရပ်အာရုံခံအပြောင်းအလဲနဲ့, မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအသိအမှတ်ပြုမှုအဖြစ်မော်တာ output ကိုအပါအဝင်သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာအမျိုးမျိုး, လိုအပ်သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့, ဤလုပ်ငန်းစဉ်များပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်လူသိများထိုကဲ့သို့သော MEA, BNST, LS, NACC, PFC နှင့် AH အဖြစ်အကွိမျမြားစှာဦးနှောက်ဒေသများ,, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ Bond အပြုအမူတွေအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ။ ထို့ပြင် AVP, ညီလေး, DA, CRF နှင့် GLU အပါအဝင် pair တစုံဘွန်းအပြုအမူတွေအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီသော neurochemicals, များစွာသော pair တစုံဘွန်းများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်များပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်, ဤဦးနှောက်ဒေသများတွင်ဆောင်ရွက်ရန်လူသိများကြသည်။ အဆိုပါ LS အတွက်ဥပမာအားဖြင့်, AVP  နှင့် MEA အတွက်အချိန်ပို  အခြားမျိုးစိတ်အတွက်လူမှုရေးအသိအမှတ်ပြုမှု, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် display ကိုမှမွေးရာပါတစ်ဦးဖြစ်စဉ်ကိုဖျန်ဖြေ။ နောက်ဥပမာအတိုင်း, NACC အတွက် DA သင်ယူခြင်း conditional ဆုလာဘ်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ [23, 119] ဖွယ်ရှိမိတ်လိုက်နှင့်အိမ်ထောင်ဖက်၏တိကျသော olfactory လက်မှတ်၏အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများအကြားသင်ယူအသင်းအဖွဲ့ဖြန်ဖြေခြင်းဖြင့်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းကိုအထောက်အကူပြုရန်တစ်ဦးဖြစ်စဉ်ကို [8, 10, 245].
သတိထားလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက် pair တစုံဘွန်းအပြုအမူတွေအတွက်ဤသီးခြားဦးနှောက်ဒေသများနှင့် neurochemicals ၏တစ်ဦးချင်းစီ၏အရေးပါမှုကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သော်လည်းစမ်းသပ်ပြီးတစ်ဦးချင်းစီအပြုအမူခြောမျိုးစုံဦးနှောက်ဒေသများနှင့် neurochemicals ပါဝင်သောပိုကြီးတဲ့ circuitry နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ သေးအပြည့်အဝ voles အတွက်ဆန်းစစ်မဟုတ်ပေမယ့်အခြားကြွက်မျိုးစိတ်များထံမှဒေတာများကိုသရုပ်ပြရှိသည်ဟုဦးနှောက်ဒေသများအကြားရှင်းရှင်းလင်းလင်းခန္ဓာဗေဒဆက်သွယ်မှုအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်, ဤဆက်သွယ်မှု [bonding တွဲဖို့သက်ဆိုင်ရာ discrete လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်အတူအာရုံကြောဆားကစ်ဖွဲ့စည်း245] ။ ဥပမာအားများအတွက် vomeronasal ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို (VNO) အကြား, ဆက်သွယ်မှု, AOB နှင့် MEA [chemosensory တွေကို processing အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ30, 72, 121, 130, 192] နှင့် (discrete conspecific olfactory တွေကိုပစ္စုပ္ပန်အခါ) လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံစဉ်အတွင်း VNO နှင့် MEA နှစ်ဦးစလုံးမအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, activation ဖက်ဦးစားပေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောများမှာ [49, 133] ။ အဆိုပါ MEA နှင့် AH အကြားဆက်သွယ်မှုကိုကျူးကျော်ထိန်းညှိ [33, 202], ဤလမ်းကြောင်း၏ activation ဖွယ်ရှိမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ရွေးချယ်ကျူးကျော်ထိန်းညှိ [99, 224] ။ ထို့အပြင်အဆိုပါ NACC နှင့် mPFC ဖို့စီမံကိန်းအတွက် [သည့် mPFC ထံမှ NACC နှင့် VTA မှအပြန်အလှန် GLUergic စီမံကိန်းကြောင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သော VTA အတွက် DAergic ဆဲလ်ပါဝင်ပါသည်သောရေတွင်း-စရိုက်လက္ခဏာတွေ mesolimbic DA စနစ်,34, 193] ။ ဒါဟာအာရုံကြော circuit ကို [သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့စိတ်ခွန်အားနိုး salience သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့120, 232] ထိုကဲ့သို့သောလက်ခံအိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူသုတ်ရည်ထိအဖြစ်သပ္ပါယ်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူတွေ, ဆောင်ရွက်မှုတွေ [22, 74, 179, 180] နှင့်ခွေးများ၏ပြန်လည်ရယူခြင်း [2, 112, 171] ။ ဒါဟာအဆုံးစွန်သောဥပမာအားဖြင့်သက်သေကဲ့သို့တူညီသောစနစ်, တစ်ဦးထက်ပိုအပြုအမူဖျန်ဖြေနိုင်ပါတယ်နည်းတူ, တူညီတဲ့ neurochemical တစ်ဦးထက်ပိုအပြုအမူထိန်းညှိနိုင်မသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်များအတွက် LS အတွက် AVP neurotransmission, VP နှင့် / သို့မဟုတ် AH မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း, ရွေးချယ်ကျူးကျော်များနှင့်အဖေဘက်ကအမူအကျင့်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ထို့ပြင်တစျခုအမူအကျင့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုထက် ပို. အာရုံကြောဆားကစ်ကကမကထပြုခဲ့နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, sociosexual အတွေ့အကြုံကို - မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်လိုအပ်ချက် - [သည့် NACC အတွက် DA နှင့်အချိန်ပိုနှစ်ဦးစလုံးဖြန့်ချိ induces98, 187], အ LS နှစ်ဦးစလုံးအတွက် AVP လွှတ်ပေးရန်  နှင့် VP  နှင့်လည်း PFC အတွက်အချိန်ပိုလွှတ်ပေးရန်အကြံပြုထားပါတယ်  ။ ထို့ကြောင့်မျိုးစုံအာရုံကြောဆားကစ်နှင့် neurochemicals pair တစုံဘွန်းနှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေကိုထိန်းညှိဖို့အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်နှင့်အတူဖျော်ဖြေပွဲအတွက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက် pair တစုံဘွန်း၏ဆွေးနွေးမှုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုသတိမမူမရသင့်ပါတယ်။ အထက်တွင်ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, pair တစုံဘွန်းအပြုအမူတွေများ၏အာရုံကြောစည်းမျဉ်းအချို့ကိစ္စများတွင်လိင် dimorphic ဖြစ်ပါတယ် (ဥပမာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏ CORT စည်းမျဉ်း [63, 64]) ။ ထို့ပြင်ယင်းသို့ AVP နှင့်အချိန်ပိုအဖြစ်အချို့သော neuropeptides, Bond တွဲနှင့်ဆက်စပ်သောအချို့အပြုအမူတွေအတွက်ကျားမတိကျတဲ့အခန်းကဏ္ဍရှိစေခြင်းငှါ: AVP ရွေးချယ်ကျူးကျော်ထိန်းညှိ [99, 100] နှင့်အဖေဘက်ကအမူအကျင့် [149, 213] ယောက်ျားအတွက်, ညီလေးအမျိုးသမီးအတွက်မိခင်စောင့်ရှောက်မှုထိန်းညှိနေချိန်မှာ [16, 76, 165, 173, 178] ။ ထို့အပြင်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်း AVP နှင့် OT သူတို့ရဲ့စိတ်တွေ, အတွက်ကွဲပြားပုံရသည်။ နှစ်ဦးစလုံး neuropeptides နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်းအတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီဖြစ်သော်လည်း  AVP ၏အနိမ့်ဆေးများ, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အထီးအမျိုးသမီးနှင့်အရံ OT အုပ်ချုပ်ရေးမှသာအမျိုးသမီးအတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းသွေးဆောင်ထိရောက်သောခဲ့သည်ထက်ယောက်ျားအတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးသွေးဆောင်ဖို့လုံလောက်ပေမယ့်မ  ။ ဇီဝြဖစ်စဉ်များနှင့်အာရုံကြောအလွှာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphisms အပြုအမူတွင်ဤကွဲပြားခြားနားမှုအခြေခံလိမ့်မည်။ သည်အခြားကြွက်မျိုးစိတ်တှငျတှေ့ဥပမာအားဖြင့်, အဖြစ် [48, 61, 207] အထီး voles ပိုပြီး AVP mRNA [သည့် BNST နှင့် MEA အတွက်ဆဲလ်နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို voles ထက် LS အတွက် AVP-ir အမျှင် (ထို BNST နှင့် MEA အတွက်ဆဲလ်တွေထုတ်လုပ် AVP ကနေအများဆုံးဖွယ်ရှိစီမံချက်များ) ၏မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆတံဆိပ်ကပ်ကြပါပြီ17, 221] ။ စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုဆန့်ကျင်ဘက်လိင် conspecific နှင့်အတူတွဲပြီး၏3ရက်ညွှန်ပြ BNST နှင့်အထီးအတွက် LS အတွက် AVP-ir အစွန်းအထင်းများသိပ်သည်းဆအတွက်ကျဆင်းခြင်း, ဒါပေမယ့်အမျိုးသမီးမဟုတ်, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ဆဲလ်တွေတံဆိပ်ကပ် AVP mRNA များ၏အရေအတွက်တိုး induces အလှည့်၌, အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ Bond အပြုအမူ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထဲမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေစေခြင်းငှါအရာ, AVP လှုပ်ရှားမှုအပေါ် sociosexual အတွေ့အကြုံ၏လိင်-dimorphic အကျိုးသက်ရောက်မှု။ လိင်ကွဲပြားမှုလည်း [သည့် anteroventral periventricular preoptic ဧရိယာထဲမှာဆဲလ် synthesizing TH ၏လူဦးရေမှာတွေ့ရှိပြီ139] နှင့်တိုးချဲ့ amygdala  မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ဦးနှောက်ထဲမှာသို့သော်တစ်စုံဘွန်းတွင်ဤဆဲလ်များ၏အလုပ်လုပ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍနေဆဲဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာကောင်းစွာဇီဝြဖစ်စဉ်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphisms နှင့်အာရုံကြောအလွှာအပြုအမူအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုအခြေခံစေခြင်းငှါအသိအမှတ်ပြုသည်။ ထို့အပြင်ဦးနှောက်ထဲမှာလိင်ကွဲပြားမှု [သူတို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားသောဇီဝကမ္မဗေဒကြားမှယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအကြားအလားတူအပြုအမူများ၏ Display ကိုအဘို့ခွင့်ပြုစေခြင်းငှါ62] ။ တနည်းအားဖြင့်လိင် dimorphic neurochemical စနစ်များကိုယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းဆင်တူအပြုအမူရလဒ်များထုတ်လုပ်ရန်၎င်းတို့၏ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်အတူဖျော်ဖြေပွဲအတွက်အလုပ်လုပ်သောအစားထိုးယန္တရားများရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ဤကဲ့သို့သောအကြံပြုချက်မျိုးဖြစ်သည့် LS ဖို့ MEA နှင့် BNST ထံမှ AVP လမ်းကြောင်းအဖြစ်လိင် dimorphic စနစ်များ, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ဆန္ဒပြပွဲများအတွက်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်  ယောက်ျားအတွက်မိဘ၏အပြုအမူများ၏ Display ကိုဖွင့်  ညီလေးစနစ်များအမျိုးသမီးအတွက်တူညီတဲ့အပြုအမူကို enable စဉ် [16, 173].
10 ။ ကောက်ချက်နှင့်အနာဂတ်လမ်းညွန်
မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အားလုံးအကြားဖွဲ့စည်းခဲ့အနှောင်အဖွဲ့၏လေ့လာမှုဖြစ်နိုင်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုအပြည့်အဝလူ့ဆက်ဆံရေး၏ရှုပ်ထွေးပွေလီလှနားလည်ရန်ခွင့်မပြုနိုငျသျောလညျးသူတို့ဆက်ဆက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဆွဲဆောင်မှုများနှင့်ပူးတွဲမှုအခြေခံအခြေခံအာရုံကြောယန္တရားများသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ အထက်ပြန်လည်သုံးသပ်အဆိုပါစာပေမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် pair တစုံဘွန်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် neuropeptide, neurotransmitter နှင့်ဟော်မုန်းစနစ်များအမျိုးမျိုးပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်လူသားများအတွက်ပဏာမအလုပ်လူ့လူမှုရေးအပြုအမူတွင်ဤတူညီသောစနစ်များအများအပြားပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်လူသားများအတွက် Real-time ဦးနှောက်ကို Activation တိုင်းတာရန်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်အသုံးချဖို့မကြာသေးမီကသုတေသနပြု [DA neurotransmission လူ့အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်မှုနှင့်ပူးတွဲမှုအခြေခံစေခြင်းငှါအကြံပြုထားပါတယ်81] ။ ဒီလေ့လာမှုတွေကိုသူတို့ကတခြားအကျွမ်းတဝင်များ၏ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုအားပေးသည့်အခါသင်တန်းသားများကိုပြင်းထန်သောရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေး၏အစောပိုင်းအဆင့်ဆင့်ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ရေရှည်အတွက်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း-မတ်ေတာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးကသူတို့ချစ်ရာသခင်၏တစ်ဦးဓာတ်ပုံရိုက်ကြည့်ရှုအားပေးသော်လည်းမရသောအခါထိုကဲ့သို့သော VTA အဖြစ် DA-ကြွယ်ဝသောဒေသများ, activated ခဲ့ကြသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ တစ်ဦးချင်းစီ [12, 20, 21] ။ မကြာမီကလေ့လာမှုများကိုလည်းလူသားမောင်နှံ interaction ကအတွက်အချိန်ပို system ကိုပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပါပြီ။ ဥပမာအားရလဒ်များအရအိပ်ယာထိန်းချုပ်ထားစမ်းသပ်မှု, အလွယ်တကူမျက်စိ-အဆက်အသွယ်, သိချင်စိတ် / စောင့်ရှောက်မှုနှင့်သဘောတူညီချက်ရမှတ်များအားဖြင့်ရည်ညွှန်းအဖြစ်ဦးနှောက်-သိသိသာသာဖို့ neuropeptide access ကို, စုံတွဲများအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်သွယ်ရေးတိုးမြှင့်ခွင့်ပြုဖြန့်ဝေ၏ OT-တစ်နည်းလမ်းကို၏ intranasal အုပ်ချုပ်မှု [အတွက်70] ။ ထို့အပြင် OT လူမှုရေးဆက်နွယ်မှုဖို့လိုအပ်ချက်-တစ်ဦးသောလူသားမြားအကြားယုံကြည်မှုတိုးမြှင့်ဖို့ရှာတွေ့ခဲ့ပြီး  ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမများ၏ cerebrospinal fluid အတွက် AVP ၏အဆင့်ဆင့်အပြုသဘောပြင်းထန်တဲ့အပြုအမူတွေကိုတစ်ဘဝသမိုင်းဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်အဖြစ်ထို့ပြင် AVP [လူ့ရန်လိုသည့်အပြုအမူအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီး46] ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤလေ့လာမှုများအလားတူအာရုံကြောယန္တရားများလူသားများနှင့် nonhuman နို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက်လူမှုရေးအပြုအမူတွေကိုဖျန်ဖြေခြင်းအလိုငှါဖြစ်နိုင်ခြေကိုမီးမောင်းထိုးပြ။
မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole နှင့်လူ့လူမှုရေးအပြုအမူများ၏အမူအကျင့်များနှင့် neurobiological ရှုထောင့်အကြားထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး၏တစ်ဦးကအတော်လေးမြင့်မားတဲ့ဘွဲ့မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole မော်ဒယ်လူမှုရေးအပြုအမူများ၏ neurobiology စုံစမ်းစစ်ဆေးအခြေခံနဲ့ဘာသာပြန်သုတေသနအတွက်စံပြဖြစ်စေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ ထို့ကြောင့်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်သုတေသနကျွန်တော်တို့ကိုသာမန်လူမှုရေးအပြုအမူတွေကိုအခြေခံသောအချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ခွင့်ပြုစေခြင်းငှါမသာ, ဒါပေမယ့်လည်းအများအပြားစိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းအတွက်မှတ်ချက်ပြုလူမှုရေးလိုငွေပြမှု၏အခြေခံအကြောင်းတရားများကိုစူးစမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enable ပေမည်။ တစ်ဦးကမှတျသားဖှယျဥပမာ [အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုမမှန်များ၏လေ့လာမှုအဘို့အမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole မော်ဒယ်၏အသုံးပြုမှုကိုကပါဝင်ပတ်သက်147, 157] AVP, ညီလေးနှင့် DA ပြီးသားပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီရသော [111, 115, 156, 236] ။ ထို့အပြင်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole မကြာသေးမီကစိတ်ကျရောဂါတစ်ခုတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်လူကြီးအတွက်လူမှုရေးဆုံးရှုံးမှုများကသွေးဆောင်အထူးသစိတ်ကျရောဂါ [အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ပြီး29, 103] ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ [မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အများဆုံးမကြာသေးမီက pair တစုံဘွန်းအပေါ်အလွဲသုံးမှုများမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုကိုလေ့လာရန်အသုံးပြုသွားမည်ပြီ, ဤလေ့လာမှု mesolimbic DA စနစ်၏ dysregulation လူမှုရေးအပြုအမူ၏မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ချို့ယွင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါသရုပ်ပြပါပြီ151, 238] ။ ဤရွေ့ကားနှင့်အခြားလေ့လာမှုများ  ပုံမှန်နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောလူမှုရေးအပြုအမူတွေကိုအခြေခံအာရုံကြောယန္တရားများ, သူတို့၏ဆက်စပ်လုပ်ငန်းစဉ်၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအဘို့ဤတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ၏ utility ကိုသရုပ်ပြပါ။
ကျနော်တို့လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အရေးပါစာဖတ်ခြင်းအဘို့အ C. Lieberwirth, K. လဲ့, MM မာတင်နှင့် AS Smith ကကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းဒီလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏အရေးအသားစဉ်အတွင်းမိမိအထောကျအကူပွုဆွေးနွေးဘို့နဲ့သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံပြပွဲပံ့ပိုးမှုများကို Smith က AS ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကျေးဇူးတင်လျက်အဆိုပါကိန်းဂဏန်းများနှင့်အတူသူတို့၏အကူအညီအတွက် C. Badland နှင့်ဂျေ Chalcraft အသိအမှတျပွု။ ဒီအလုပ်အတွက်ရန်ပုံငွေရှာခြင်းကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes ZW ရန်, KLG မှ Kay, MHF31-25570 မှ DAF31-79600 ပေးအပ်နှင့် MHR01-58616, MHR21-83128, DAR01-19627 နှင့် DAK02-23048 ပေးခဲ့ပါသည်။
1မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာလယ်ပြင်၌တစ်ဦး monogamous ဘဝမဟာဗျူဟာ၏ညွှန်ပြအီလီနွိုက် display ကိုအပြုအမူတွေကနေအစပြုသည်ဟု voles နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေများအတွက်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် pair တစုံဘွန်းအပြုအမူတွေကိုဖော်ပြရန်နေစဉ်, က [Kansas ပြည်နယ်မှမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles သတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်55, 186] နှင့် Tennessee ပြည်နယ် [175, 235] မိမိတို့၏အပြုအမူများနှင့်ဇီဝြဖစ်စဉ်အချို့ရှုထောင့်ထဲမှာမသိမသာကွဲပြားခြားနားမှုကိုပြသ  ဤကွဲပြားခြားနားမှု [ဂေဟစနစ်အခြေအနေများအမျိုးမျိုးတူညီသောမျိုးစိတ်အတွင်းလူဦးရေအကြားတိရစ္ဆာန်အမူအကျင့်များနှင့်မိတ်လိုက်မဟာဗျူဟာကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါသီအိုရီကိုထောကျပံ့73] ။ ဒီအပြောင်းအလဲ၏ရလဒ်အဖြစ်, အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ကနေကိုင်းတောကွင်း voles အများဆုံး pair တစုံဘွန်း၏ neurobiology ၏ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ သူတို့အားလေ့လာမှုများအနေဖြင့်ဒေတာများကလက်ရှိပြန်လည်သုံးသပ်များ၏အာရုံစိုက်ဖြစ်ကြသည်။
1 ။ အာဗေလကို T, Lattal KM ။ မှတ်ဉာဏ်ဝယ်ယူ, စုစည်းပြီးနှင့်ပြန်လည်ရယူခြင်း၏မော်လီကျူးယန္တရားများ။ Curr Opin Neurobiol ။ 2001; 11: 180-187 ။ [PubMed]
2 ။ Afonso VM က, Sison M က, Lovic V ကို, Fleming က AS ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင် Medial prefrontal cortex ကိုတွေ့ရှိရပါသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မိခင်အမူအကျင့်များနှင့်၎င်းတို့၏ sequential အဖွဲ့အစည်းကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2007; 121: 515-526 ။ [PubMed]
3 ။ Afonso VM ကဘုရင်က S, Chatterjee: D, Fleming က AS ။ မိခင်တုန့်ပြန်တိုးမြှင့်ကြောင်းဟော်မုန်းအမျိုးသမီးကြွက်များတွင် pup- နှင့်အစားအစာ-လှုံ့ဆော်မှုမှ accumbal dopaminergic တုံ့ပြန်မှုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ Horm ပြုမူနေ။ 2009; 56: 11-23 ။ [PubMed]
4 ။ Ahern TH, Young က LJ ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူမှုရေးပူးတွဲမှု, alloparental အပြုအမူ, နှင့် monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက် Affiliate အပြုအမူတွေကိုထိန်းညှိသည့် neuropeptide စနစ်များကိုစောစောဘဝမိသားစုဖွဲ့စည်းပုံ၏သက်ရောက်မှု (Microtus ochrogaster) တပ်ဦးစှာနထေိုငျ neuroscience ။ 2009; 3: 17 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
5 ။ ဗာဒံ RE, ဘရောင်းထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Keverne eb ။ prolactin ၏ဖိနှိပ်မှုမိဘများအတွေ့အကြုံရှိအထီးဘုံ marmosets တွေကို (Callithrix jacchus) က Horm ပြုမူနေမွေးကင်းစကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးကိုလျှော့ချမထားဘူး။ 2006; 49: 673-680 ။ [PubMed]
6 ။ Amico ဂျာ Johnston JM, Vagnucci AH ။ ကိုရွှေ့ဆိုင်နို့တိုက်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပလာစမာ cortisol ပြင်းအား၏နို့စို့-သွေးဆောင်ကို attenuation ။ Endocr Res ။ 1994; 20: 79-87 ။ [PubMed]
7 ။ နျူကလိယဘို့ Aragona BJ, လျူ Y ကို, Curtis JT, Stephan FK, ဝမ် Z. တစ်ဦးကဝေဖန်အခန်းကဏ္ဍအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်-preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် dopamine accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 3483-3490 ။ [PubMed]
8 ။ Aragona BJ, လျူ Y ကို, ယု YJ, Curtis JT, Detwiler JM, Insel TR, ဝမ် Z. နျူကလိယ differential dopamine accumbens monogamous pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု mediates ။ နတ် neuroscience ။ 2006; 9: 133-139 ။ [PubMed]
9 ။ နျူကလီးယပ်အတွင်းစခန်းအချက်ပြခြင်းဖြင့် pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်းစည်းမျဉ်းအတိုက်အခံ Aragona BJ, ဝမ် Z. shell ကို accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2007; 27: 13352-13356 ။ [PubMed]
10 ။ Aragona BJ တစ် monogamous ကြွက်မျိုးစိတ်အတွက်လူမှုရေးရွေးချယ်မှုဝမ် Z. Dopamine စည်းမျဉ်း။ တပ်ဦးစှာနထေိုငျ neuroscience ။ 2009; 3: 15 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
11 ။ Argiolas တစ်ဦးက, Melis MR ။ penile စိုက်ထူဗဟိုထိန်းချုပ်မှု: အ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယ၏အခန်းကဏ္ဍ။ prog Neurobiol ။ 2005; 76: 1-21 ။ [PubMed]
12 ။ Aron တစ်ဦးက, Fisher က H ကို, Mashek DJ သမား, ခိုင်ခံ့, G လီ H ကို, Brown က ll ။ အစောပိုင်းအဆင့်ပြင်းထန်သောရင်ခုန်စရာမေတ္တာနှင့်ဆက်စပ်ဆုလာဘ်, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစနစ်များကို။ J ကို Neurophysiol ။ 2005; 94: 327-337 ။ [PubMed]
13 ။ Bale KL, Kim က AJ, Lewis က-Reese အေဒီ, ဆူး Carter က C. oxytocin နှင့် vasopressin နှစ်ဦးစလုံးအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် alloparental အပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ Horm ပြုမူနေ။ 2004; 45: 354-361 ။ [PubMed]
14 ။ Bale KL, Kramer KM, Lewis က-Reese အေဒီ, Carter က CS ။ မိဘ၏စောင့်ရှောက်မှုအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်လိင် dimorphic ဖြစ်ကြသည်။ Physiol ပြုမူနေ။ 2006; 87: 424-429 ။ [PubMed]
15 ။ Bale KL, Mason ဆို WA, Catana ကို C, ချယ်ရီ SR, Mendoza SP ။ အာရုံကြောတစ် monogamous မျောက်အတွက်တစ်စုံ-ဘွန်း၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 2007; 1184: 245-253 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
16 ။ Bale KL, ဗန် Westerhuyzen ဂျာ Lewis က-Reese အေဒီ, Grotte ND, Lanter ဂျာ Carter က CS ။ oxytocin အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ-Bond နှင့် alloparental စောင့်ရှောက်မှုအပေါ်ထိုး-မှီခိုဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ Horm ပြုမူနေ။ 2007; 52: 274-279 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
17 ။ Bamshad M က, Novak MA, deVries AC အ။ လိင်နုံများနှင့်မိဘ၏မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏ vasopressin innervation (အတွင်းလိင်နှင့်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုMicrotus ochrogaster) နှင့်မြက်ခင်း voles (Microtus pennsylvanicus) J ကို Neuroendocrinol ။ 1993; 5: 247-255 ။ [PubMed]
18 ။ Bamshad M က, Novak MA, De Vries GJ ။ တွဲပြီး (မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် vasopressin innervation နှင့်အဖေဘက်ကအမူအကျင့်ပွောငျးလဲMicrotus ochrogaster) Physiol ပြုမူနေ။ 1994; 56: 751-758 ။ [PubMed]
19 ။ Barberis ကို C, Tribollet အီး Vasopressin နှင့်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွက် oxytocin receptors ။ Crit ဗြာ Neurobiol ။ 1996; 10: 119-154 ။ [PubMed]
20 ။ Bartels တစ်ဦးက, Zeki အက်စ်ရင်ခုန်စရာစျြခွငျးမတ်ေတာ၏အာရုံကြောအခြေခံ။ Neuroreport ။ 2000; 11: 3829-3834 ။ [PubMed]
21 ။ Bartels တစ်ဦးက, Zeki အက်စ်မိခင်နှင့်ရင်ခုန်စရာစျြခွငျးမတ်ေတာ၏အာရုံကြောဆက်စပ်။ Neuroimage ။ 2004; 21: 1155-1166 ။ [PubMed]
22 ။ Becker က JB, Rudick CN, Jenkins WJ ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်းနျူကလိယ accumbens နှင့် striatum အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ J ကို neuroscience ။ 2001; 21: 3236-3241 ။ [PubMed]
23 ။ Berke JD, Hyman SE ။ စွဲ, dopamine နှင့်မှတ်ဉာဏ်၏မော်လီကျူးယန္တရားများ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2000; 25: 515-532 ။ [PubMed]
24 ။ Bester-Meredith JK, Young က LJ, Marler CA. vasopressin immunoreactivity နှင့် receptors နှင့်အတူမျိုးစိတ် peromyscus အတွက်ဖခင်၏အပြုအမူများနှင့်ကျူးကျော်အတွက်ကွဲပြားမှုနှင့်၎င်းတို့၏အသင်းအဖွဲ့များ။ Horm ပြုမူနေ။ 1999; 36: 25-38 ။ [PubMed]
25 ။ Bester-Meredith JK, Marler CA. Vasopressin နှင့် Cross-များတိုးပွားလာကြကယ်လီဖိုးနီးယားကြွက် (Peromyscus californicus) နှင့်အဖြူ-ခြေကြွက် (Peromyscus leucopus) Horm ပြုမူနေအတွက်ကျူးကျော်။ 2001; 40: 51-64 ။ [PubMed]
26 ။ Bester-Meredith JK, Marler CA. Vasopressin နှင့် mated Cross-များတိုးပွားလာကြ Peromyscus ကြွက်တွေမှာသားစဉ်မြေးဆက်ကိုဖြတ်ပြီးအဖေဘက်ကအမူအကျင့်များကူးစက်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2003; 117: 455-463 ။ [PubMed]
27 ။ Birney EC, Grant က WE, Baird DD ။ ၏သံသရာမှ•အဖုံး၏အရေးပါမှု Microtus လူဦးရေ။ ဂေဟဗေဒ။ 1976; 57: 1043-1051 ။
28 ။ Bogels S က, ကလေးစိုးရိမ်စိတ်များ etiology, ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသမှုအတွက် Phares V. အဘတို့ '' အခန်းကဏ္ဍ: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်အသစ်မော်ဒယ်။ Clin Psychol ဗျာ 2008; 28: 539-558 ။ [PubMed]
29 ။ Bosch ရဲ့ OJ, Nair HP က, Ahern TH, နျူမန် ID ကို, Young က LJ ။ အဆိုပါ CRF စနစ်ကတစ်ဦး monogamous ကြွက်များတွင်ကပ်လျက်တည်ရှိ partner ၏ဆုံးရှုံးမှုကိုအောက်ပါတိုးမြှင့် passive စိတ်ဖိစီးမှု-ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းအပြုအမူ mediates ။ Neuropsychopharmacology ။ 2009; 34: 1406-1415 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
30 ။ နန် PA ဆိုပြီး, Hancock ဟာ: D, Keverne eb ။ ချက်ချင်း-အစောပိုင်းမျိုးဗီဇက c-fos, egr-1 နှင့်ကြွက်များတွင်တစ်ခု olfactory မှတ်ဉာဏ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းစဉ်အတွင်းဆက်စပ်ပစ္စည်း olfactory မီးသီးအတွက်က c-jun ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျး။ neuroscience ။ 1992; 49: 277-284 ။ [PubMed]
31 ။ တံတားများသည် RS ။ အဆိုပါမိဘဦးနှောက်၏ Neurobiology ။ Elsevier Inc မှ, နယူးယောက်: 2008 ။
32 ။ Buss DM ။ သတိဝီရိယ မှစ. အကြမ်းဖက်မှုမှ: အမေရိကန်တက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများအတွက်အိမ်ထောင်ဖက် retention ကို၏နည်းဗျူဟာ။ Ethology နှင့် Sociobiology ။ 1988; 9: 291-317 ။
33 ။ Canteras NS ။ အဆိုပါ medial hypothalamic ခုခံကာကွယ်မှုစနစ်: hodological အဖွဲ့အစည်းနှင့် functional ဂယက်ရိုက်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2002; 71: 481-491 ။ [PubMed]
34 ။ Carr က DB, Sesack SR ။ mesoaccumbens VTA အာရုံခံပေါ်တွင်ကြွက် prefrontal cortex synapses ထံမှ Terminator ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 1999; 877: 676-678 ။ [PubMed]
35 ။ Carter က CS, Witt DM, Auksi T က, Casten အယ်လ်အီစရိုဂျင်နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုနှင့်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် lordosis ၏ induction (Microtus ochrogaster) Horm ပြုမူနေ။ 1987; 21: 65-73 ။ [PubMed]
36 ။ Carter က CS, Witt DM, Schneider J ကို, Harris က ZL, Volkening ဃအမျိုးသားလှုံ့ဆော်မှုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်သားအိမ်ကြီးထွားမှုအတွက်လိုအပ်သောများမှာ (Microtus ochrogaster) Horm ပြုမူနေ။ 1987; 21: 74-82 ။ [PubMed]
37 ။ Carter က CS, Getz ll ။ မယားနှင့်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ။ သိပ္ပံ Am ။ 1993; 268: 100-106 ။ [PubMed]
38 ။ Carter က CS, DeVries AC အ, Getz ll ။ နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေစျမယား၏ဇီဝကမ္မအလွှာ: မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole မော်ဒယ်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 1995; 19: 303-314 ။ [PubMed]
39 ။ Carter က CS, လူမှုရေးအပြုအမူနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်နို့တိုက်ဟော်မုန်း Altemus အမ် Integrated လုပ်ဆောင်ချက်များကို။ ခုနှစ်တွင်: Carter က CS, Lederhendler II ကို, ပက်ထရစ်ခ, အယ်ဒီတာများ။ ဆက်နွယ်မှု၏သမာဓိ Neurobiology ။ အဆိုပါ MIT ကစာနယ်ဇင်း; ကိန်းဘရစ်ချ်: 1999 ။ စစ။ 361-371 ။
40 ။ Cavanaugh BL, Lonstein JS ။ အဆိုပါ stria terminalis ၏မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole medial amygdala နှင့်အိပ်ရာနျူကလိယ၏ tyrosine hydroxylase-immunoreactive ဆဲလ်အပေါ်အန်ဒရိုဂျင်နှင့် oestrogenic လွှမ်းမိုးမှု။ J ကို Neuroendocrinol ။ 2010 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
41 ။ Cherlin AJ, Furstenberg FF, Jr က Chase-Lansdale L ကို, Kiernan Ke, Robin PK, Morrison DR, Teitler Jo ။ ဂရိတ်ဗြိတိန်နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကလေးများအပေါ်ကွာရှင်း၏သက်ရောက်မှု၏ longitudinal လေ့လာမှုများ။ သိပ္ပံ။ 1991; 252: 1386-1389 ။ [PubMed]
42 ။ Chiodera P ကို, Salvarani ကို C, Bacchi-Modena တစ်ဦးက, Spallanzani R ကို, Cigarini, C, Alboni တစ်ဦးက, Gardini အီး, Coiro V. ဆက်ဆံရေးအမျိုးသမီးတွေအတွက်နို့စို့သို့မဟုတ်ရင်သားကင်ဆာဆွစဉ်အတွင်း oxytocin နှင့် adrenocorticotropic ဟော်မုန်း၏သွေးရည်ကြည် profile များကိုအကြား။ Horm Res ။ 1991; 35: 119-123 ။ [PubMed]
43 ။ cho ဟာ MM, DeVries AC အ, Williams က JR, Carter က CS ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးအပေါ် oxytocin နှင့် vasopressin ၏ဆိုးကျိုးများ (Microtus ochrogaster) ပြုမူနေ neuroscience ။ 1999; 113: 1071-1079 ။ [PubMed]
44 ။ Ciliax BJ, Heilman ကို C, Demchyshyn ll, Pristupa ZB, Ince, E, Hersch သည် SM, Niznik HB, Levey AI အ။ အဆိုပါ dopamine Transporter: ဦးနှောက်ထဲမှာ immunochemical စရိုက်လက္ခဏာတွေနှင့်ဒေသခံ။ J ကို neuroscience ။ 1995; 15: 1714-1723 ။ [PubMed]
45 ။ Clutton-Brock TH ။ နို့တိုက်သတ္တဝါတွေကမိတ်လိုက်စနစ်များကို။ proc R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 1989; 236: 339-372 ။ [PubMed]
46 ။ Coccaro EF, Kavoussi RJ, Hauger RL, Cooper ကတီဘီ, ကူးတို့ CF. Cerebrospinal အရည် vasopressin အဆင့်ဆင့်: ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး-disorders ဘာသာရပ်များအတွက်ကျူးကျော်နှင့် serotonin function ကိုနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1998; 55: 708-714 ။ [PubMed]
47 ။ Cohen ကို-Parsons M က, Carter က CS ။ ယောက်ျားအမျိုးသမီး voles ၏ဦးနှောက်အတွက် binding သွေးရည်ကြည်အီစရိုဂျင်နှင့်အီစရိုဂျင် receptor တိုးမြှင့်။ Physiol ပြုမူနေ။ 1987; 39: 309-314 ။ [PubMed]
48 ။ Crenshaw BJ, De Vries GJ အမျိုးမျိုးဟော်မုန်းအခြေအနေများအောက်တွင်တက်လာတယ်, forebrain ၏လိင် dimorphic အဆောက်အဦများ၏ Yahr P. Vasopressin innervation ။ J ကို comp Neurol ။ 1992; 322: 589-598 ။ [PubMed]
49 ။ Curtis JT, လျူ Y ကို, အ vomeronasal ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို၏ဝမ် Z. ကိုတွေ့ရှိရပါသည် (အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် pair တစုံဘွန်းနှောင့်အယှက်Microtus ochrogaster) ဦးနှောက် Res ။ 2001; 901: 167-174 ။ [PubMed]
50 ။ Curtis JT, Berkley KJ, ဝမ် ZX ။ voles အားဖြင့်မိတ်လိုက်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ caudal brainstem အတွက်အာရုံခံ activation ။ neuroscience လက်တ။ 2003; 341: 115-118 ။ [PubMed]
51 ။ အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် Bond တွဲဖို့ Curtis JT, အခြေအနေများအောက်တွင်ဝမ် Z. Forebrain က c-fos စကားရပ်အထောက်အကူ (Microtus ochrogaster) Physiol ပြုမူနေ။ 2003; 80: 95-101 ။ [PubMed]
52 ။ Curtis JT အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ Bond အတွက်ဝမ် Z. Glucocorticoid အဲဒီ receptor ပါဝင်ပတ်သက်မှု: ဗဟို dopamine ဆုလာဘ်စနစ်များနှင့်အတူစူးရှပိတ်ဆို့ထားခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်၏ဆိုးကျိုးများ။ neuroscience ။ 2005; 134: 369-376 ။ [PubMed]
53 ။ Curtis JT, အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ Bond အတွက်ဝမ် Z. Ventral tegmental ဧရိယာပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Physiol ပြုမူနေ။ 2005; 86: 338-346 ။ [PubMed]
54 ။ ကုရှ BS, Carter က CS ။ Peripheral အမျိုးသမီးအတွက် oxytocin တိုးဖက်ဦးစားပေး၏ပဲမျိုးစုံ, ဒါပေမယ့်အထီးမဟုတ်, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ။ Horm ပြုမူနေ။ 2000; 37: 49-56 ။ [PubMed]
55 ။ ကုရှ BS, မာတင် Jo, Young က LJ, Carter က CS ။ မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ် peptides ၏သက်ရောက်မှုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ကျက်စားရာနေရာအားဖြင့်ခန့်မှန်းနေကြသည်။ Horm ပြုမူနေ။ 2001; 39: 48-58 ။ [PubMed]
56 ။ ကုရှ BS, Mogekwu N က, က Le WW, ဟော့ဖ်မန်း GE, Carter က CS ။ တွဲပြီးပု monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက် Fos immunoreactivity သွေးဆောင်။ ဦးနှောက် Res ။ 2003; 965: 203-211 ။ [PubMed]
57 ။ ကုရှ BS, Okorie ဦး, Young က LJ ။ နောက်ဆက်တွဲအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအပေါ်မွေးကင်းစကလေးများသင်း၏သက်ရောက်မှုဗဟိုမိုင်နိုအက်စစ် vasopressin နဲ့အရွယ်ရောက်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် V1a receptors ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအုပ်ချုပ်ဖို့။ J ကို Neuroendocrinol ။ 2003; 15: 1021-1026 ။ [PubMed]
58 ။ အဆိုပါ medial amygdala အတွက်ကုရှ BS, ပယ်ရီတစ်ဦးက, Musatov S က, Ogawa S က, Papademetriou အီး estrogen receptor အထီး prosocial အပြုအမူ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးတားစီး။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 10399-10403 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
59 ။ ဤနေရာတွင် မှစ. ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းဖို့ de Jong က TR, ချောက် M က, Harris က BN, Saltzman ဒဗလျူ: ကယ်လီဖိုးနီးယားကြွက်များတွင်ဖခင်၏အပြုအမူစတင်ခြင်း၏အာရုံကြောဆက်စပ် (Peromyscus californicus) Horm ပြုမူနေ။ 2009; 56: 220-231 ။ [PubMed]
60 ။ de Vries GJ, Buijs RM ။ အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum အထူးရည်ညွှန်းအတူ vasopressinergic နှင့်ကြွက်ဦးနှောက်၏ oxytocinergic innervation ၏မူလအစ။ ဦးနှောက် Res ။ 1983; 273: 307-317 ။ [PubMed]
61 ။ de Vries GJ, Buijs RM, ဗန် Leeuwen အက်ဖ်ဒဗလျူ။ ဦးနှောက်ထဲမှာ vasopressin နဲ့အခြား neurotransmitter စနစ်များအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ prog ဦးနှောက် Res ။ 1984; 61: 185-203 ။ [PubMed]
62 ။ de Vries GJ, Villalba C. ဦးနှောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphism နှင့်မိဘနှင့်အခြားလူမှုရေးအပြုအမူတွေအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 1997; 807: 273-286 ။ [PubMed]
63 ။ DeVries AC အ, DeVries ကို MB, Taymans S က, Carter က CS ။ အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် pair တစုံဘွန်း၏ Module (Microtus ochrogaster) corticosterone ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 1995; 92: 7744-7748 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
64 ။ DeVries AC အ, DeVries ကို MB, Taymans SE, Carter က CS ။ လူမှုရေးဦးစားပေးအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏သက်ရောက်မှုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်လိင် dimorphic ဖြစ်ကြသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 1996; 93: 11980-11984 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
65 ။ DeVries AC အ, ချို MM, Cardillo S က, Carter က CS ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ Abstract များအတွက် Society က။ 1997 ။ oxytocin မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် HPA ဝင်ရိုးဖိနှိပ်လို့ရပါတယ်။
66 ။ DeVries AC အ, Taymans SE, Carter က CS ။ အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် corticosteroid တုံ့ပြန်မှုများ၏လူမှုမော်ဂျူ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 1997; 807: 494-497 ။ [PubMed]
67 ။ DeVries AC အ, Guptaa T က, Cardillo S ကိုချိုက M, Carter က CS ။ Corticotropin-releasing အချက်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်လူမှုရေးဦးစားပေးဖြစ်ပေါ်သည်။ Psychoneuroendocrinology ။ 2002; 27: 705-714 ။ [PubMed]
68 ။ Dewsbury DA ။ ကြွက် copulatory အပြုအမူအတွက်မတူကွဲပြားခြင်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေ။ သိပ္ပံ။ 1975; 190: 947-954 ။ [PubMed]
69 ။ Dewsbury DA ။ မယား၏နှိုင်းယှဉ်စိတ်ပညာ။ Motivation အပေါ် Nebraska စာတမ်းဖတ်ပွဲ။ 1987; 35: 1-50 ။ [PubMed]
70 ။ Ditzen B, Schaer M က, ဂါဗြေလခ, Bodenmann, G, Ehlert ဦး, Heinrich အမ် Intranasal oxytocin အပြုသဘောဆက်သွယ်ရေးတိုးပွါးနှင့်စုံတွဲပဋိပက္ခကာလအတွင်း cortisol ပမာဏလျော့နည်းစေသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009; 65: 728-731 ။ [PubMed]
71 ။ ဒူဘွာ: D, Eitel S ကို, မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်၏ Felner R. အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှအကူးအပြောင်းကာလအတွင်းကျောင်းမှညှိနှိုင်းမှုအပေါ်မိဘကလေးဆက်ဆံရေး။ J ကို Marr Fam ။ 1994; 56: 405-414 ။
72 ။ Dudley, CA, Rajendren, G, မော့စ် RL ။ conspecific အထီးထိတွေ့အောက်ပါအမျိုးသမီးကြွက်၏ဗဟိုဆက်စပ်ပစ္စည်း olfactory အဆောက်အဦများအတွက် FOS immunoreactivity ၏ induction ။ Mol ဆဲလ် neuroscience ။ 1992; 3: 360-369 ။ [PubMed]
73 ။ Emlen ST, Oring LW ။ ဂေဟဗေဒ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရွေးချယ်ရေးနှင့်မိတ်လိုက်စနစ်များ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်။ သိပ္ပံ။ 1977; 197: 215-223 ။ [PubMed]
74 ။ Everitt BJ ။ လိင်လှုံ့ဆျောမှု: အထီးကြွက်များ၏အစာစားချင်စိတ်များနှင့် copulatory တုံ့ပြန်မှုအခြေခံသည့်ယန္တယားတစ်ခုအာရုံကြောများနှင့်အမူအကျင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 1990; 14: 217-232 ။ [PubMed]
75 ။ Fabiano GA ။ ADHD အဘို့အမူအကျင့်မိဘသင်တန်းခမညျးတျောပါဝင်မှု: ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်တိုးမြှင့်ပါဝင်မှုများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများအတွက်အကြံပြုချက်များ။ J ကို Fam Psychol ။ 2007; 21: 683-693 ။ [PubMed]
76 ။ Fahrbach SE, Morrell JI, Pfaff DW ။ nulliparous, အီစထိုဂျင်-ရစေတယ်အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်ရေတိုအောင်းနေချိန်မိခင်အပြုအမူ၏ oxytocin သော induction ။ Horm ပြုမူနေ။ 1984; 18: 267-286 ။ [PubMed]
77 ။ ဖာဂူဆန်ဖြစ်မှု, Aldag JM, Insel TR, Young က LJ ။ အဆိုပါ medial amygdala အတွက် oxytocin မောက်အတွက်လူမှုရေးအသိအမှတ်ပြုမှုများအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ J ကို neuroscience ။ 2001; 21: 8278-8285 ။ [PubMed]
78 ။ ဖာဂူဆန်ဖြစ်မှု, Young က LJ, Insel TR ။ လူမှုရေးအသိအမှတ်ပြုမှု၏ neuroendocrine အခြေခံ။ တပ်ဦး Neuroendocrinol ။ 2002; 23: 200-224 ။ [PubMed]
79 ။ ကူးတို့ CF, Albers သူ, Wesolowski သည် SM, Goldman bd, Luman SE ။ အဆိုပါ hypothalamus သို့ထိုးသွင်း Vasopressin ရွှေဟမ်းစတားတစ်ဦးကျပုံစံအပြုအမူအစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သိပ္ပံ။ 1984; 224: 521-523 ။ [PubMed]
80 ။ Fisher ကအိပ်ချ်တဏှာသည်, ဆွဲငင်မှု, နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးပွါးအတွက်ပူးတွဲမှု။ လူ့သဘာ။ 1998; 9: 23-52 ။
81 ။ Fisher က H ကို, Aron တစ်ဦးက, Brown က ll ။ ရိုမန်းတစ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ: အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်မှုများအတွက်အာရုံကြောယန္တရားတစ်ခု fMRI လေ့လာမှု။ J ကို comp Neurol ။ 2005; 493: 58-62 ။ [PubMed]
82 ။ Fitzgerald RW, Madison DM ။ ထင်းရှူး voles ၏အခမဲ့-အထိလူဦးရေရဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုMicrotus pinetorum။ ပြုမူနေ Ecole Sociobiol ။ 1983; 13: 183-187 ။
83 ။ Florsheim P ကို, Tolan P ကို, Gorman-Smith ကဃမိသားစုဆက်ဆံရေးကို, မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်, အထီးမိသားစုဝင်များ၏ရရှိမှုနှင့် Single-မိခင်နှင့် Two-မိဘမိသားစုများအတွက်အတွင်းစိတ်-မြို့ယောက်ျားလေးများ၏အပြုအမူ။ ကလေးသူငယ် Dev မှ။ 1998; 69: 1437-1447 ။ [PubMed]
84 ။ မုဆိုး CD ကို, လျူ Y ကို, Ouimet ကို C, ဝမ် Z. အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ neurogenesis အပေါ်လူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်၏သက်ရောက်မှု။ J ကို Neurobiol ။ 2002; 51: 115-128 ။ [PubMed]
85 ။ Fraley RC, မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက် PR စနစ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူရင်ခုန်စရာပူးတွဲဖိုင်ကို: သီအိုရီဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု, ထွန်းသစ်စအငြင်းပွားစရာများနှင့်အဖြေမရတဲ့မေးခွန်းတွေ။ ဗြာဗိုလ်ချုပ်ကြီး psyche ။ 2000; 4: 132-154 ။
86 ။ Fraley RC, Brumbaugh CC ကို, Marks MJ ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူပူးတွဲမှု၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့် function ကို: တစ်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့် phylogenetic ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ J ကို Pers Soc Psychol ။ 2005; 89: 731-746 ။ [PubMed]
87 ။ နှင့် parturition ပြီးနောက်စဉ်အတွင်း Fuchs AR, Saito အက်စ် Pituitary oxytocin နှင့်မတိုင်မီကိုယ်ဝန်ဆောင်ကြွက်၏ vasopressin အကြောင်းအရာ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 1971; 88: 574-578 ။ [PubMed]
88 ။ Furstenberg FF, Jr က Teitler Jo ။ အိမ်ထောင်ရေးပြတ်တောက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများပြန်လည်။ J ကို Fam နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်း။ 1994; 15: 173-190 ။
89 ။ Geary DC က။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်လူ့အဖေဘက်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နီးစကားရပ်။ Psychol Bull ။ 2000; 126: 55-77 ။ [PubMed]
90 ။ Gerfen CR ။ အဆိုပါ neostriatal mosaic: compartmental အဖွဲ့အစည်းမျိုးစုံအဆင့်ဆင့်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 1992; 15: 133-139 ။ [PubMed]
91 ။ Getz ll ။ လူဦးရေအတွက်လူမှုဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ရန်လိုသည့်အပြုအမူ Microtus pennsylvanicus။ J ကိုနို့တိုက်သတ္တဝါများ။ 1972; 53: 310-317 ။
92 ။ Getz ll ။ Microtine ကြွက်များ၏လူမှုရေးဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လူဦးရေသံသရာအပေါ်ထင်ကြေး။ အဆိုပါဇီဝဗေဒ။ 1978; 60: 134-147 ။
93 ။ Getz ll, CS ဖြည့်တင်း။ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ Microtus ochrogaster လူဦးရေ။ အဆိုပါဇီဝဗေဒ။ 1980; 62: 1-4 ။
94 ။ Getz ll, Carter က SC, Gavish အယ်လ်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ၏မိတ်လိုက်စနစ်, Microtus ochrogaster: pair တစုံ-Bond အဘို့လယ်ပြင်နှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းသက်သေအထောက်အထား။ ပြုမူနေ Ecole Sociobiol ။ 1981; 8: 189-194 ။
95 ။ Getz ll, Hofmann je ။ အခမဲ့-နထေိုငျမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ Microtus ochrogaster။ ပြုမူနေ Ecole Sociobiol ။ 1986; 18: 275-282 ။
96 ။ Getz ll, Mc Guire ခမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက် singly နှင့်အထီး-အမျိုးသမီးအားလုံးတှငျနထေိုငျ၏တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်Microtus ochrogaster။ Ethology ။ 1993; 94: 265-278 ။
97 ။ Getz ll, Carter က CS ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ-vole မိတ်ဖက်။ အမေရိကန်သိပ္ပံပညာရှင်။ 1996; 84: 56-62 ။
98 ။ Gingrich B, လျူ Y ကို, Cascio ကို C, ဝမ် Z ကို, Insel TR ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် Dopamine D2 receptors (အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်လူမှုရေးပူးတွဲမှုများအတွက်အရေးကြီးပါသည်Microtus ochrogaster) ပြုမူနေ neuroscience ။ 2000; 114: 173-183 ။ [PubMed]
99 ။ Gobrogge KL, လျူ Y ကို, Jia က X, pair တစုံ-ကပ်လျက်တည်ရှိအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ကျူးကျော်အတူဝမ် Z. anterior hypothalamic အာရုံကြော activation နှင့် neurochemical အသင်းအဖွဲ့များ။ J ကို comp Neurol ။ 2007; 502: 1109-1122 ။ [PubMed]
100 ။ Gobrogge KL, လျူ Y ကို, Young က LJ, ဝမ် Z. anterior hypothalamic vasopressin pair တစုံ-Bond နှင့် monogamous ကြွက်များတွင်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ကျူးကျော်ထိန်းညှိ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2009; 106: 19144-19149 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
101 ။ Gobrogge KL, ဝမ် ZX ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ Abstract ပိုစတာ #3774 များအတွက် Society က။ 2009 ။ monogamous အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ-Bond-သွေးဆောင်ကျူးကျော်အခြေခံအာရုံကြော circuitry ။
102 ။ မီးခိုးရောင်, G, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် copulatory အပြုအမူ၏ Dewsbury ဃတစ်ဦးကအရေအတွက်ဖော်ပြချက် (Microtus ochrogaster) ဦးနှောက်။ Evol ပြုမူနေ။ 1973; 8: 437-452 ။ [PubMed]
103 ။ Grippo AJ, ကုရှ BS, Carter က CS ။ နာတာရှည်လူမှုရေးအထီးကျန်ထိတွေ့အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်စီးပွားပျက်ကပ်ကဲ့သို့အပြုအမူနှင့်ဖိအား-သွေးဆောင် neuroendocrine activation ။ Psychosom Med ။ 2007; 69: 149-157 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
104 ။ Gruder-အဒမ်က S, Getz ll ။ မိတ်လိုက်သည့်စနစ်နှင့်အဖေဘက်ကအမူအကျင့်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Microtus ochrogaster နှင့် Mictrotus pennsylvanicus။ J ကို Mammology ။ 1985; 66: 165-167 ။
105 ။ Gubernick DJ သမား။ Biparental စောင့်ရှောက်မှုနှင့်နို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက်အထီး-အမျိုးသမီးဆက်ဆံရေး။ ခုနှစ်တွင်: Parmigiani S က, vom Saal FS, အယ်ဒီတာများ။ ကလေးနှင့်မိဘစောင့်ရှောက်မှု။ Harwood ပညာရေးဆိုင်ရာထုတ်ဝေ; Chur, ဆွစ်ဇာလန်: 1994 ။ စစ။ 427-463 ။
106 ။ ခန်းမ ER ။ မြောက်အမေရိက၏နို့တိုက်သတ္တဝါများ။ ယောဟနျသ Wiley; နယူးယောက်: 1981 ။
107 ။ EA ၏, Young က LJ ကြိုးပုခက်။ အဆိုပါ vasopressin V1a အဲဒီ receptor ကမကထနှင့်စကားရပ်ထဲမှာအပြောင်းအလဲ: လူမှုရေးအပြုအမူအတွက်မြတ်နှင့် intraspecific မူကွဲများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2002; 16: 399-402 ။ [PubMed]
108 ။ EA ၏, Young က LJ ကြိုးပုခက်။ vole မျိုးစိတ်အတွက်မတူကွဲပြားလူမှုရေးဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဆက်စပ် functional microsatellite polymorphic ။ Mol Biol Evol ။ 2004; 21: 1057-1063 ။ [PubMed]
109 ။ Hansen က S, Bergvall AH, ခွေးများနှင့်အတူ Nyiredi အက်စ် Interaction မိခင်ကြွက်များ၏ ventral striatum အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်ပိုကောင်းစေပါတယ်: တစ် microdialysis လေ့လာမှု။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1993; 45: 673-676 ။ [PubMed]
110 ။ အလျင်အမြန် NB, Orchinik M က, Aubourg သင်္ဘော MV, McEwen BS ။ အလယ်ပိုင်းနှင့်အရံ type ကိုငါနှင့်အမျိုးအစားမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက် II ကို adrenal Steroid တစ်မျိုး receptors ၏ Pharmacological စရိုက်လက္ခဏာတွေ, တစ်ဦး glucocorticoid-ခံနိုင်ရည်ကြွက်။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 1999; 140: 4459-4469 ။ [PubMed]
111 ။ Heinrich M က, ဗွန် Dawans B ကို, မိုးခုံး G. အ oxytocin, vasopressin, လူ့လူမှုရေးအပြုအမူ။ တပ်ဦး Neuroendocrinol ။ 2009; 30: 548-557 ။ [PubMed]
112 ။ ဟာနန်ဒက်ဇ်-Gonzalez M က, Navarro-Meza M က, Prieto-Beracoechea, CA, ဂွေဗားရား, MA ။ ကြွက်မိခင်အပြုအမူစဉ်အတွင်း prefrontal cortex နဲ့ ventral tegmental ဧရိယာ၏လျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှု။ ပြုမူနေ Processes ။ 2005; 70: 132-143 ။ [PubMed]
113 ။ Hnatczuk OC, Lisciotto, CA, DonCarlos ll, Carter က CS, Morrell JI ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ၏တိကျသောဦးနှောက်ဧရိယာများတွင် estrogen receptor immunoreactivity (Microtus ochrogaster) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Reception နှင့်မျိုးဗီဇလိင်အားဖြင့်ပြောင်းလဲနေသည်။ J ကို Neuroendocrinol ။ 1994; 6: 89-100 ။ [PubMed]
114 ။ Hokfelt T က, Martensson R ကို, Bjorklund တစ်ဦးက, Kleinau S ကိုစတိန်းက M, Bjorklund တစ်ဦး, ဓာတုဗေဒ Neuroanatomy ၏ Hokfelt တီလက်စွဲစာအုပ်။ Elsevier; အမ်စတာဒမ်: 1984 ။ ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ tyrosine-hydroxylase-immunoreactive အာရုံခံ၏ဖြန့်ဖြူးမြေပုံ။
115 ။ Holland, E, Bartz J ကို, Chaplin W က, Phillips ကတစ်ဦး, Sumner J ကို, Soorya L ကို, Anagnostou အီး, Wasserman အက်စ် oxytocin အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာအတွက်လူမှုရေးသိမှတ်ခံစားမှု၏ retention ကိုတိုးပွားစေပါသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 61: 498-503 ။ [PubMed]
116 ။ အိမ် JS, လန်ဒီ့ကို KR, Umberson ဃလူမှုဆက်ဆံရေးနှင့်ကျန်းမာရေး။ သိပ္ပံ။ 1988; 241: 540-545 ။ [PubMed]
117 ။ Hull က EM, Rodriguez-Manzo G. အယောက်ျားလေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, Horm ။ ဦးနှောက်နှင့်ပြုမူနေ။ 2009; 1: 5-65 ။
118 ။ Hume JM, Wynn-Edwards က Ke ။ သင်းအထီး testosterone ဟော်မုန်း, estradiol နှင့်နယ်မြေကျူးကျော်ပေမယ် biparental ထောင်ပြီးဟမ်းစတားအတွက်အဖေဘက်ကမဟုတ်အပြုအမူ (Phodopus campbelli) Horm ပြုမူနေပါလျော့ကျစေပါတယ်။ 2005; 48: 303-310 ။ [PubMed]
119 ။ Hyman SE ။ စွဲ: သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်တစ်ဦးရောဂါ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 162: 1414-1422 ။ [PubMed]
120 ။ Ikemoto S က, Panksepp ဂျေနျူကလိယ၏အခန်းကဏ္ဍလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူအတွက် dopamine accumbens: အထူးရည်ညွှန်းအတူစညျးလုံးအနက်ကိုဆုချစားမှုရန်။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗျာ 1999; 31: 6-41 ။ [PubMed]
121 ။ Inamura K ကို Kashiwayanagi M က, ကြွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်း olfactory မီးသီးအတွက် Fos immunostaining ၏ Kurihara K. ဒေသဟာ vomeronasal ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုဆီးထိတွေ့သောအခါ။ EUR J ကို neuroscience ။ 1999; 11: 2254-2260 ။ [PubMed]
122 ။ Insel TR, Shapiro LE ။ oxytocin အဲဒီ receptor ဖြန့်ဖြူး monogamous နှင့်ဇနီးတစ်ယောက်ထက် ပို. voles အတွက်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းကထင်ဟပ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံ, USA ။ 1992; 89: 5981-5985 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
123 ။ Insel TR, ဝမ် ZX, ကူးတို့ CF. microtine ကြွက်များတွင်လူမှုရေးအဖှဲ့အစညျးနဲ့ဆက်စပ်ဦးနှောက် vasopressin အဲဒီ receptor ဖြန့်ဖြူးပုံစံများ။ J ကို neuroscience ။ 1994; 14: 5381-5392 ။ [PubMed]
124 ။ Insel TR, Preston က S, Winslow JT ။ အမူအကျင့်အကျိုးဆက်များ: အ monogamous အထီးအတွက်အဖော်ရှာ။ Physiol ပြုမူနေ။ 1995; 57: 615-627 ။ [PubMed]
125 ။ Insel TR, Young က LJ ။ ပူးတွဲမှု၏ neurobiology ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2001; 2: 129-136 ။ [PubMed]
126 ။ Jannett FJ ။ အဆိုပါ montane vole ၏လူမှုဒိုင်းနမစ်, Microtus montanusတစ်ပါရာဒိုင်းအဖြစ်။ အဆိုပါဇီဝဗေဒ။ 1980; 62: 3-19 ။
127 ။ Jannett FJ ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ vole ၏အသိုက်ပုံစံများ, Microtus montanusမြေပြင်ကွင်းဆင်းလူဦးရေ၌တည်၏။ J ကိုနို့တိုက်သတ္တဝါများ။ 1982; 63: 495-498 ။
128 ။ အဆိုပါ ventral အတွက် Jansson တစ်ဦးက, စတိန်းက M, Tinner B, Zoli M က, Meador-Woodruff JH, Lew JY, Levey AI အ, Watson က S, Agnati LF, Fuxe K. D1 ၏ဖြန့်ဖြူးပုံစံများတွင်, D2, tyrosine hydroxylase နှင့် dopamine Transporter immunoreactivities ကြွက်၏ striatum ။ neuroscience ။ 1999; 89: 473-489 ။ [PubMed]
129 ။ Kendrick KM, Keverne eb, Baldwin BA ဘွဲ့။ Intracerebroventricular oxytocin ကိုသိုးများတွင်မိခင်အပြုအမူကိုလှုံ့ဆျော။ Neuroendocrinology ။ 1987; 46: 56-61 ။ [PubMed]
130 ။ Kevetter GA, Winans အက်စ်အက်စ်။ ရွှေဟမ်းစတားအတွက် corticomedial amygdala ၏ connections ။ သည် "vomeronasal amygdala" J ကို comp Neurol ၏ဗြဲ Efferents ။ 1981; 197: 81-98 ။ [PubMed]
131 ။ Kiecolt-Glaser JK နယူတန် TL ။ အိမ်ထောင်ရေးနှင့်ကျန်းမာရေးမိမိနှင့်ကြှနျမ။ Psychol Bull ။ 2001; 127: 472-503 ။ [PubMed]
132 ။ Kikusui T က, Winslow JT, Mori Y. လူမှုကြားခံ: စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်သောကထံမှကယ်ဆယ်ရေးစခန်း။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2006; 361: 2215-2228 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
133 ။ ပက်ထရစ်ခ, Carter က CS, Newman က SW, Insel TR ။ အဆိုပါ amygdala ၏ medial နျူကလိယ၏ axon-ကြဲတွေ့ရှိရပါသည် (ထိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက် Affiliate အပြုအမူတွေကိုလျော့ချMicrotus ochrogaster): အမူအကျင့်များနှင့်ခန္ဓာဗေဒသတ်မှတ်ချက်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1994; 108: 501-513 ။ [PubMed]
134 ။ ပက်ထရစ် B ကိုကင်မ် JW, Insel TR ။ အဖေဘက်ကအမူအကျင့်နဲ့ဆက်စပ်စကားရပ် fos Limbic system ကို။ ဦးနှောက် Res ။ 1994; 658: 112-118 ။ [PubMed]
135 ။ ပက်ထရစ်ခ, Williams က JR, Slotnick BM, Carter က CS ။ Olfactory bulbectomy အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်လူမှုရေးအပြုအမူလျော့ကျ (အမ် ochrogaster) Physiol ပြုမူနေ။ 1994; 55: 885-889 ။ [PubMed]
136 ။ Kleiman DG ။ နို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက်စျမယား။ မေးဗြာ Biol ။ 1977; 52: 39-69 ။ [PubMed]
137 ။ Kosfeld M က, Heinrich M က, Zak PJ, Fischbacher ဦး, Fehr အီး oxytocin လူသားတွေအတွက်ယုံကြည်မှုတိုးပွားစေပါသည်။ သဘာဝ။ 2005; 435: 673-676 ။ [PubMed]
138 ။ Kramer KM, ပယ်ရီ AN, Golbin: D, ကုရှ BS ။ လိင် steroids (မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်အထီး alloparental အပြုအမူ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအတှကျဒုတိယ postnatal သီတင်းပတ်အတွင်းလိုအပ်သောများမှာMicrotus ochragaster) ပြုမူနေ neuroscience ။ 2009; 123: 958-963 ။ [PubMed]
139 ။ လန်စင်း SW, Lonstein JS ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏ hypothalamus အတွက် tyrosine hydroxylase-synthesizing ဆဲလ် (Microtus ochrogaster): လိင်အဆိုပါ anteroventral periventricular preoptic ဧရိယာ၌ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ gonadectomy သို့မဟုတ်မွေးကင်းစကလေးများ gonadal ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှု။ J ကို Neurobiol ။ 2006; 66: 197-204 ။ [PubMed]
140 ။ လဲ့ K ကိုကုရှ BS, Musatov S က, Ogawa S က, Kramer KM ။ အဆိုပါ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယအတွက် estrogen receptor-alpha (အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်လူမှုရေးဆက်နွယ်မှုကိုထိန်းညှိMicrotus ochrogaster) PLoS တစ်ခုမှာ။ 2010; 5: e8931 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
141 ။ သံပုရာ N ကို, Manahan-Vaughan ဃ Dopamine D1 / D5 တံခါးဝ hippocampal ရေရှည်အလားအလာများနှင့်ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါမှတစ်ဆင့်ဝတ္ထုအချက်အလက်များ၏ဝယ်ယူ receptors ။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 7723-7729 ။ [PubMed]
142 ။ leng, G, ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း SL, ဒေါက်ဂလပ် AJ ။ oxytocin နှင့်မိခင်ဦးနှောက်။ Curr Opin Pharmacol ။ 2008; 8: 731-734 ။ [PubMed]
143 ။ Lightman SL ။ စိတ်ဖိစီးမှု၏ neuroendocrinology: တစ်ဘယ်တော့မှအဆုံးသတ်ဇာတ်လမ်း။ J ကို Neuroendocrinol ။ 2008; 20: 880-884 ။ [PubMed]
144 ။ Lillard LA ကချောင်းမြောင်း LJ ။ အိမ်ထောင်ရေးနှောင့်အယှက်များနှင့်သေဆုံးမှု: 'သေးပါဘူးသေခြင်းတရားကျွန်တော်တို့ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလုပ်ပါ။ လူမှုဗေဒ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 1995; 100: 1131-1156 ။
145 ။ Lim က MM, ဝမ် Z ကို, Olazabal DE, Ren က X, Terwilliger EF, Young က LJ ။ တစ်ခုတည်းဗီဇ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကြိုးကိုင်နေဖြင့်တစ်ဦးကရာမျိုးစိတ်အတွက် Enhanced မိတ်ဖက် preference ကို။ သဘာဝ။ 2004; 429: 754-757 ။ [PubMed]
146 ။ Lim က MM, Young က LJ ။ အဆိုပါ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက်တစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးအခြေခံ Vasopressin-မှီခိုအာရုံကြောဆားကစ်။ neuroscience ။ 2004; 125: 35-45 ။ [PubMed]
147 ။ Lim က MM, Bielsky လျှင်, Young က LJ ။ Neuropeptides နှင့်လူမှုရေးဦးနှောက်: အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ၏အလားအလာကြွက်မော်ဒယ်များ။ int J ကို Dev မှ neuroscience ။ 2005; 23: 235-243 ။ [PubMed]
148 ။ Lim က MM, လျူ Y ကို, Ryabinin AE, Bai Y ကို, ဝမ် Z ကို, Young က LJ ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် CRF receptors မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကို modulate ။ Horm ပြုမူနေ။ 2007; 51: 508-515 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
149 ။ လျူ Y ကို, Curtis JT သည်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum အတွက်ဝမ် Z. Vasopressin အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးထိန်းညှိ (Microtus ochrogaster) ပြုမူနေ neuroscience ။ 2001; 115: 910-919 ။ [PubMed]
150 ။ လျူ Y ကို, ဝမ် ZX ။ နျူကလိယမိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်းကိုထိန်းညှိဖို့ oxytocin နှင့် dopamine interactive accumbens ။ neuroscience ။ 2003; 121: 537-544 ။ [PubMed]
151 ။ လျူ Y ကို, Aragona BJ, Young က ka, Dietz DM, Kabbaj M က, Mazei-Robison M က, Nestler EJ, ဝမ် Z. နျူကလိယ dopamine တစ် monogamous ကြွက်မျိုးစိတ်အတွက်လူမှုရေးစဘွန်း၏စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ချို့ယွင်း mediates accumbens ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2010; 107: 1217-1222 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
152 ။ Lonstein JS, De Vries GJ ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူကညာမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏မိဘအပြုအမူအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု: gonadal ဟော်မုန်းနှင့် vasopressin ထံမှလွတ်လပ်ရေး။ J ကို Neuroendocrinol ။ 1999; 11: 441-449 ။ [PubMed]
153 ။ Lonstein JS ။ အဆိုပါ biparental မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက်အပြုအမူပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအပေါ် haloperidol နှင့်အတူ dopamine အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2002; 74: 11-19 ။ [PubMed]
154 ။ Madison DM ။ radiotelemetry အားဖြင့်ထင်ရှားအဖြစ်အမျိုးသမီးမြက်ခင်း voles အကြားတွင်မျိုးပွားမှုဖြစ်ရပ်များ၏လပ်ြရြားမြရိပ်လက္ခဏာ။ J ကို Mammol ။ 1978; 59: 835-843 ။
155 ။ Madison DM ။ ၏လူမှုရေးဇီဝဗေဒတစ်ခုဘက်ပေါင်းစုံအမြင် Microtus pennsylvanicus။ အဆိုပါဇီဝဗေဒ။ 1980; 62: 20-30 ။
156 ။ McDougle CJ, နိုင်ကြောင်း, CA, Stigler Ka, Posey DJ သမား။ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ၏ pathophysiology အတွက် Neurochemistry ။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 66 ပျော့ပျောင်း။ 2005; 10: 9-18 ။ [PubMed]
157 ။ McGraw LA က, Young က LJ ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole: လူမှုဦးနှောက်ကိုနားလည်ဘို့တစ်ခုထွန်းသစ်စမော်ဒယ်သက်ရှိ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2010; 33: 103-109 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
158 ။ McGuire B, Novak MA ။ အဆိုပါမြက်ခင်း vole အတွက်မိခင်အပြုအမူတစ်ခုနှိုင်းယှဉ် (Microtus pennsylvanicus), မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole (အမ် ochrogaster) နှင့်ထင်းရှူး vole (အမ် pinetorum) Animation ပြုမူနေ။ 1984; 32: 1132-1141 ။
159 ။ McGuire B, Getz ll, Hofmann J ကို, Pizzuto T က, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် Frase ခ Natal ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့် philopatry (Microtus ochrogaster) လူဦးရေသိပ်သည်းမှု, ရာသီနှင့် Natal လူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စပ်လျဉ်း။ ပြုမူနေ Ecole Sociobiol ။ 1993; 32: 293-302 ။
160 ။ Mendoza SP, Mason ဆို WA ။ တစ်ဦး monogamous မျောက်အတွက်လုပ်အားများနှင့်ပူးတွဲပါဖိုင်အမျိုးအစားကွဲပြားခြားနား၏မိဘဌာနခွဲ (Callicebus ဘုရားမောလုပ်) Animation ပြုမူနေ။ 1986; 34: 1336-1347 ။
161 ။ Mendoza SP, Mason ဆို WA ။ တစ်ဦး monogamous လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း။ ခုနှစ်တွင်: Else JG, Lee က PC ကို, အယ်ဒီတာများ။ မျောက် Ontogeny, သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်လူမှုအပြုအမူ။ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; ကိန်းဘရစ်ချ်: 1986 ။ စစ။ 255-266 ။
162 ။ Miczek Ka, Winslow JT ။ ရန်လိုသည့်အပြုအမူအပေါ် Psychopharmacologic သုတေသန။ ခုနှစ်တွင်: Greenshaw AJ, Dourish မှန် CT, အယ်ဒီတာများ။ စမ်းသပ် Psychopharmacology ။ Humana စာနယ်ဇင်း; Clifton, NJ: 1987 ။ စစ။ 27-113 ။
163 ။ Missale ကို C, Nash SR, ရော်ဘင်ဆင် SW, Jaber M က, caron MG ။ Dopamine receptors: ဖွဲ့စည်းပုံကနေ function ကိုရန်။ Physiol ဗျာ 1998; 78: 189-225 ။ [PubMed]
164 ။ Mitchell က JB, အဆက်စပ်ပစ္စည်း olfactory စနစ်၏ activation အားဖြင့်ရူးနှမ်း Gratton အေ Mesolimbic dopamine လွှတ်ပေးရန်: တစ်မြန်နှုန်းမြင့် chronoamperometric လေ့လာမှု။ neuroscience လက်တ။ 1992; 140: 81-84 ။ [PubMed]
165 ။ နျူမန် ID ကို။ ဦးနှောက် oxytocin: အမျိုးသမီးနှင့်ယောက်ျားပေါင်းနှစ်ဦးစလုံးအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုအပြုအမူတစ်ခု key ကိုထိန်းညှိ။ J ကို Neuroendocrinol ။ 2008; 20: 858-865 ။ [PubMed]
166 ။ Neve Ka, Seaman JK, Trantham-Davidson အိပ်ချ် Dopamine အဲဒီ receptor အချက်ပြ။ J ကို Reception Signal Transduct Res ။ 2004; 24: 165-205 ။ [PubMed]
167 ။ Nirenberg MJ, ချမ်း J ကို, Pohorille တစ်ဦးက, Vaughan RA, Uhl ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Kuhar MJ, Pickel VM က။ အဆိုပါ dopamine Transporter: အနျူကလိယ accumbens ၏ limbic နှင့်မော်တာအခန်းအတွက် dopaminergic axon ၏နှိုင်းယှဉ် ultrastructure ။ J ကို neuroscience ။ 1997; 17: 6899-6907 ။ [PubMed]
168 ။ Northcutt ကေဗွီ, ဝမ် Z ကို, Lonstein JS ။ အဆိုပါကြွက် olfactory ၏ tyrosine hydroxylase-synthesizing ဆဲလ်တွေအတွက်လိင်နှင့်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှု amygdala တိုးချဲ့။ J ကို comp Neurol ။ 2007; 500: 103-115 ။ [PubMed]
169 ။ Northcutt ကေဗွီ, Lonstein JS ။ လူမှုအဆက်အသွယ် olfactory amygdala တိုးချဲ့ယောက်ျားမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ၏ dopaminergic ဆဲလ်ထဲမှာချက်ချင်း-အစောပိုင်းဗီဇစကားရပ် elicits ။ neuroscience ။ 2009; 163: 9-22 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
170 ။ Numan M က, Insel TR ။ မိဘအပြုအမူများ၏ Neurobiology ။ Springer-Verlag; နယူးယောက်, USA သို့: 2003 ။
171 ။ Numan M က, Stolzenberg DS ။ ကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူစတင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများထိန်းချုပ် dopamine အာရုံကြောစနစ်များနှင့်အတူ Medial preoptic ဧရိယာ interaction က။ တပ်ဦး Neuroendocrinol ။ 2009; 30: 46-64 ။ [PubMed]
172 ။ Olazabal DE, Young က LJ ။ မျိုးစိတ်နှင့်လူငယ်အမျိုးသမီး alloparental စောင့်ရှောက်မှုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု oxytocin အဲဒီ receptor အဆိုပါ striatum အတွက်သိပ်သည်းဆနှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ Horm ပြုမူနေ။ 2006; 49: 681-687 ။ [PubMed]
173 ။ Olazabal DE, Young က LJ ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် oxytocin receptors အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ထဲမှာ "အလိုအလျောက်" မိခင်အပြုအမူလွယ်ကူချောမွေ့။ neuroscience ။ 2006; 141: 559-568 ။ [PubMed]
174 ။ Oliveras: D, Novak MA ။ အဆိုပါမြက်ခင်း vole အတွက်ဖခင်၏အပြုအမူတစ်ခုနှိုင်းယှဉ်, Microtus pennsylvanicusအဆိုပါထင်းရှူး vole, Microtus pinetorumနှင့်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole, Microtus ochrogaster။ တိရိစ္ဆာန်အပြုအမူ။ 1986; 34: 519-526 ။
175 ။ ဩဖိရ AG က, Phelps သည် SM, Sorin AB, Wolff Jo ။ လယ်ပြင်နှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းနှစ်ခုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole လူဦးရေ, Morphological မျိုးဗီဇများနှင့်အမူအကျင့်နှိုင်းယှဉ်။ J ကိုနို့တိုက်သတ္တဝါများ။ 2007; 88: 989-999 ။
176 ။ Pedersen, CA, ရမ် AJJ ။ oxytocin ၏ intracerebroentricular administraion ပြီးနောက်ကညာကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူ၏ induction ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 1979; 76: 6661-6665 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
177 ။ Pedersen, CA, Ascher ဂျာမွန်ရိုး YL, ရမ် AJ ။ , Jr oxytocin ကညာအမျိုးသမီးကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူဖြစ်ပေါ်သည်။ သိပ္ပံ။ 1982; 216: 648-650 ။ [PubMed]
178 ။ Pedersen, CA, Vadlamudi SV, Boccia ML, Amico ဂျေအေ။ nulliparous oxytocin နောက်ကောက်ကြွက်တွေမှာမိခင်အပြုအမူလိုငွေပြမှု။ မျိုးဗီဇဦးနှောက်ပြုမူနေ။ 2006; 5: 274-281 ။ [PubMed]
179 ။ Pfaus JG, Mendelson SD, Phillips က AG က။ အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ anticipatory နှင့်သူတွေရဲ့စားသောက်အတိုင်းအတာတစ်ခုဆက်စပ်မှုများနှင့်အချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Psychoneuroendocrinology ။ 1990; 15: 329-340 ။ [PubMed]
180 ။ Pfaus JG, Damsma, G, Wenkstern: D, Fibiger HC ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအမျိုးသမီးကြွက်၏နျူကလိယ accumbens နှင့် striatum အတွက် dopamine ဂီယာတိုးပွားစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1995; 693: 21-30 ။ [PubMed]
181 ။ Phares V ကို, သံလိုက်အိမ်မြှောင်ကစားနည်း BE ။ ကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက် psychopathology အတွက်ဘိုးဘေးများ၏အခန်းကဏ္ဍ: ကဖေဖေအခန်းတစ်ခန်းပါစေ။ Psychol Bull ။ 1992; 111: 387-412 ။ [PubMed]
182 ။ Piovanotti MR, ဗီအဲရာ ML ။ အဘနှင့်မိဘ၏အတှေ့အကွုံရောက်ရှိခြင်း (ဂိုလီးတက်လာတယ်, အတွက် pup ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုမတူညီကြပါပြီMeriones unguiculatus) ပြုမူနေ Processes ။ 2004; 66: 107-117 ။ [PubMed]
183 ။ Pitkow LJ, SHARER, CA, Ren က X, Insel TR, Terwilliger EF, Young က LJ ။ တစ်ဦး monogamous vole ၏ ventral forebrain သို့ receptor မျိုးရိုးဗီဇလွှဲပြောင်း vasopressin တို့ကဆက်နွယ်မှုနဲ့ pair တစုံ-နှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်း၏နည်းပြ။ J ကို neuroscience ။ 2001; 21: 7392-7396 ။ [PubMed]
184 ။ ရောဘတ် RL, Zullo တစ်ဦးက, Gustafson EA ၏, Carter က CS ။ Perinatal Steroid တစ်မျိုးကုသမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် alloparental နှင့် Affiliate အပြုအမူပြောင်းလဲပစ်။ Horm ပြုမူနေ။ 1996; 30: 576-582 ။ [PubMed]
185 ။ ရောဘတ် RL, Carter က CS ။ Intraspecific အပြောင်းအလဲနှင့်ဖခင်တစ်ဦး၏ရှေ့မှောက်တွင်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် monogamous နှင့်အသိုင်းအဝိုင်းစရိုက်များ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 1997; 807: 559-562 ။ [PubMed]
186 ။ ရောဘတ် RL, Williams က JR, ဝမ် AK, Carter က CS ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်သမဝါယမမွေးမြူရေးနှင့်မယား: အ sire ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်ပထဝီမူကွဲ။ Animation ပြုမူနေ။ 1998; 55: 1131-1140 ။ [PubMed]
187 ။ ရော့စ်သူ, Cole ကို CD ကိုစမစ်က Y, နျူမန် ID ကို, Landgraf R ကို, Murphy က AZ, Young က LJ ။ အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် Affiliate အပြုအမူထိန်းညှိသည့် oxytocin စနစ်၏စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ neuroscience ။ 2009; 162: 892-903 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
188 ။ ရော့စ်သူ, Freeman က SM, Spiegel ll, Ren က X, Terwilliger EF, Young က LJ ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် oxytocin အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆအတွက်အပြောင်းအလဲ monogamous နှင့်ဇနီးတစ်ယောက်ထက် ပို. voles အတွက် Affiliate အပြုအမူတွေအပေါ် differential ကိုသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2009; 29: 1312-1318 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
189 ။ Rowley MH, ခရစ်ယာန် JJ ။ ၏ Intraspecific ကျူးကျော် Peromyscus leucopus။ ပြုမူနေ Biol ။ 1976; 17: 249-253 ။ [PubMed]
190 ။ ရှမွေလသည် PA ဆိုပြီး, Hostetler CM, Bale KL ။ Urocortin II ကို (ကိုင်းတောကွင်း voles အတွက်အလိုအလျောက်မိဘအပြုအမူတိုးပွါးMicrotus ochrogaster) ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2008; 186: 284-288 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
191 ။ Sarkadi တစ်ဦးက, Kristiansson R ကို, Oberklaid က F, Bremberg အက်စ်အဘတို့ '' ပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့သားသမီးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရလဒ်များ: longitudinal လေ့လာမှုများတစ်စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု။ Acta Paediatr ။ 2008; 97: 153-158 ။ [PubMed]
192 ။ Schellinck HM စမိုက်သ်က C, ဘရောင်း R ကို, Wilkinson အမ်အနံ့-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျ့နှင့်လူငယ်အမျိုးသမီးကြွက်များ၏ olfactory စနစ်က c-fos ၏စကားရပ်။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 1993; 74: 138-141 ။ [PubMed]
193 ။ Sesack SR, Carr က DB, Omelchenko N က, အချိုမှု-dopamine interaction ကအတှကျ Pinto အေ Anatomical အလွှာ: ဆက်သွယ်မှုများနှင့် extrasynaptic လုပ်ရပ်များ၏တိကျသောအဘို့သက်သေသာဓက။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2003; 1003: 36-52 ။ [PubMed]
194 ။ Shapiro LE, Dewsbury DA ။ vole နှစ်ခုမျိုးစိတ်အတွက် Affiliate အပြုအမူအတွက်ကွာခြားချက်များ, pair တစုံဘွန်းနှင့်အင်္ဂါဇာတ် cytology (Microtus ochrogaster နှင့် အမ် montanus) J ကို comp Psychol ။ 1990; 104: 268-274 ။ [PubMed]
195 ။ ဆေးလ်ဗား MR, ဘာနာဒီဟာ MM, Felicio LF ။ ကြွက်များဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောမိခင်အပြုအမူအပေါ် dopamine အဲဒီ receptor ရန်၏ဆိုးကျိုးများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2001; 68: 461-468 ။ [PubMed]
196 ။ monogamous နှင့်ကရာ voles ၏ medial prefrontal cortex အတွက် binding Smeltzer MD, Curtis JT, Aragona BJ, ဝမ် Z. Dopamine, oxytocin နှင့် vasopressin အဲဒီ receptor ။ neuroscience လက်တ။ 2006; 394: 146-151 ။ [PubMed]
197 ။ Smith က AS, Agmo တစ်ဦးက, Birnie AK, ပြင်သစ်ဂျေအေ။ အဆိုပါ oxytocin စနစ်၏ခြယ်လှယ် pair တစုံ-Bond မျောက်ဝံများအတွက်လူမှုရေးအပြုအမူနှင့်ဆွဲဆောင်မှုပွောငျးလဲCallithrix penicillata။ Horm ပြုမူနေ။ 2010; 57: 255-262 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
198 ။ ရှောလမုန်သည် Ng ။ လူငယ်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် philopatry နှင့်ဆက်စပ်လက်ရှိသွယ်ဝိုက်ကြံ့ခိုင်ရေးအကျိုးကျေးဇူးများကို။ ပြုမူနေ Ecole Sociobiol ။ 1991; 29: 277-282 ။
199 ။ ရှောလမုန်သည် Ng, ပြင်သစ်ဂျေအေ။ နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေသမဝါယမမွေးမြူရေး၏လေ့လာမှု။ ခုနှစ်တွင်: ရှောလမုန်သည် Ng, ပြင်သစ်ဂျာအယ်ဒီတာများ။ နို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက်သမဝါယမမွေးမြူရေး။ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 1997 ။ စစ။ 1-10 ။
200 ။ Stein ဂျာ Milburn Ng, Zane JI, Rotheram-Borus MJ ။ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့နှင့်ထွက်ပြေးသွားတဲ့လူငယ်များအကြားပြဿနာအပြုအမူတွေအပေါ်အဖေဘက်ကနှင့်မိခင်လွှမ်းမိုးမှု။ နံနက် J ကို Orthopsychiatry ။ 2009; 79: 39-50 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
201 ။ Stribley JM, Carter က CS ။ vasopressin မှဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာထိတွေ့အရွယ်ရောက်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ကျူးကျော်တိုးပွားစေပါသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 1999; 96: 12601-12604 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
202 ။ Swanson LW ။ လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူ၏နှောက် hemisphere စည်းမျဉ်း။ ဦးနှောက် Res ။ 2000; 886: 113-164 ။ [PubMed]
203 ။ တေလာလုပ် SA, Salo AL, Dewsbury DA ။ voles လေးမျိုးစိတ်အတွက် Estrus သော induction (Microtus) J ကို comp Psychol ။ 1992; 106: 366-373 ။ [PubMed]
204 ။ Taymans SE, DeVries AC အ, DeVries ကို MB, နယ်လ်ဆင် RJ, Friedman TC, ကက်စထရိုက M, Detera-Wadleigh S က, Carter က CS, Chrousos မိသားစုဆရာဝန်။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏ hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး (Microtus ochrogaster): ပစ်မှတ်တစ်ရှူး glucocorticoid ခုခံဘို့သက်သေသာဓက။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး comp Endocrinol ။ 1997; 106: 48-61 ။ [PubMed]
205 ။ သောမတ်စ်ဂျေ, Birney EC ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ၏မိဘစောင့်ရှောက်မှုနှင့်မိတ်လိုက်စနစ်များ, Microtus orchogaster။ ပြုမူနေ Ecole Sociobiol ။ 1979; 5: 171-186 ။
206 ။ ကုလသမဂ္ဂ, နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးရာဦးစီးဌာန။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများရှိကလေးသေဆုံးမှုအတွက်လူမှုစီးပွားရေးတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်။ ကုလသမဂ္ဂ; နယူးယောက်: 1985 ။
207 ။ ဗန် Leeuwen အက်ဖ်ဒဗလျူ, Caffe AR, De Vries GJ ။ ကြွက်များ၏ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယအတွက် Vasopressin ဆဲလ်: လိင်ကွဲပြားမှုနှင့်အန်ဒရိုဂျင်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1985; 325: 391-394 ။ [PubMed]
208 ။ ဗန် Schaik က CP, Dunbar မှာ RIM ၏။ ကြီးမားသောမျောက်ဝံများအတွက်စျမယား၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်: အသစ်တစ်ခုယူဆချက်နှင့်အချို့သောအရေးကြီးသောစမ်းသပ်မှု။ အပြုအမူ။ 1990; 115: 30-62 ။
209 ။ Villalba ကို C, Boyle PA ဆိုပြီး, Caliguri EJ, De Vries GJ ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်လူမှုရေးအပြုအမူတွေအပေါ်ရွေးချယ် serotonin reuptake inhibitor fluoxetine ၏ဆိုးကျိုးများ (Microtus ochrogaster) Horm ပြုမူနေ။ 1997; 32: 184-191 ။ [PubMed]
210 ။ Voorn P ကို, Jorritsma-Byham B, ဗန် Dijk က C, Buijs RM ။ ကြွက်များတွင် ventral striatum ၏ dopaminergic innervation: dopamine ဆန့်ကျင်ပဋိအတူ light- နှင့်အီလက်ထရွန်-ဏုလေ့လာမှု။ J ကို comp Neurol ။ 1986; 251: 84-99 ။ [PubMed]
211 ။ Wakerley JB, Clarke, G, Summerlee AJS ။ နို့ထွတ်နှင့်၎င်း၏ထိန်းချုပ်မှု။ ခုနှစ်တွင်: Knobil အီး, Neill JD, အယ်ဒီတာများ။ မျိုးပွားခြင်း၏ဇီဝကမ္မဗေဒ။ ကျီးစာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 1994 ။ စစ။ 1131-1177 ။
212 ။ Waltz က M, Badura B, Pfaff H ကို, Schott တီအိမ်ထောင်ရေးနှင့်နှလုံးတိုက်ခိုက်မှုများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များ:3နှစ်ကြာနာတာရှည်နာမကျန်းမှလိုက်လျောညီထွေတဲ့ longitudinal လေ့လာမှု။ Soc သိပ္ပံ Med ။ 1988; 27: 149-158 ။ [PubMed]
213 ။ ဝမ် Z ကိုကူးတို့ CF, De Vries GJ ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ဖခင်၏အပြုအမူအတွက် septal vasopressin innervation ၏အခန်းက္ပ (Microtus ochrogaster) proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 1994; 91: 400-404 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
214 ။ ဝမ် Z ကို, စမစ် W ကဗိုလ်မှူး DE, De Vries GJ ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (ထဲတွင် stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယအတွက် vasopressin တမန် RNA စကားရပ်အပေါ်တွဲပြီး၏ဆိုးကျိုးများအတွက်လိင်နှင့်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုMicrotus ochrogaster) နှင့်မြက်ခင်း voles (Microtus pennsylvanicus) ဦးနှောက် Res ။ 1994; 650: 212-218 ။ [PubMed]
215 ။ ဝမ် Z ကိုလျူ Y ကို, Young က LJ, Insel TR ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် binding forebrain vasopressin အဲဒီ receptor အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို (Microtus ochrogaster) နှင့် montane voles (Microtus montanus) အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 1997; 807: 510-513 ။ [PubMed]
216 ။ ဝမ် Z ကို, Young က LJ, De Vries GJ, Insel TR ။ Voles နှင့် vasopressin: pair တစုံဘွန်းနှင့်အဖေဘက်ကအမူအကျင့်များ, မော်လီကျူးဆယ်လူလာများနှင့်အမူအကျင့်လေ့လာမှုများ၏သုံးသပ်ချက်။ prog ဦးနှောက် Res ။ 1998; 119: 483-499 ။ [PubMed]
217 ။ ဝမ် Z ကို, ယု, G, Cascio ကို C, လျူ Y ကို, Gingrich B, Insel TR ။ အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေး၏ Dopamine D2 အဲဒီ receptor-mediated စည်းမျဉ်း (Microtus ochrogaster): pair တစုံဘွန်းများအတွက်ယန္တရား? ပြုမူနေ neuroscience ။ 1999; 113: 602-611 ။ [PubMed]
218 ။ ဝမ် ZX, Novak MA ။ Meadow ဟာ voles ၏မိဘအပြုအမူနှင့် pup ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု (Microtus pennsylvanicus) နှင့်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (Microtus ochrogaster) J ကို comp Psychol ။ 1992; 106: 163-171 ။
219 ။ ဝမ် ZX, De Vries GJ ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ဖခင်၏အပြုအမူနှင့် vasopressin immunoreactive စီမံချက်များအပေါ် testosterone သက်ရောက်မှု (Microtus ochrogaster) ဦးနှောက် Res ။ 1993; 631: 156-160 ။ [PubMed]
220 ။ ဝမ် ZX, Novak MA ။ Alloparental စောင့်ရှောက်မှုနှင့်လူငယ်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အပေါ်ဖခင်ရှိနေခြင်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု, Microtus ochrogaster။ Animation ပြုမူနေ။ 1994; 47: 281-288 ။
221 ။ ဝမ် ZX ။ အဆိုပါ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယထဲတွင် vasopressin-immunoreactive လမ်းကြောင်းအတွက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုနဲ့မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် amygdaloid နျူကလိယ medial (Microtus ochrogaster) နှင့်မြက်ခင်း voles (Microtus pennsylvanicus) ပြုမူနေ neuroscience ။ 1995; 109: 305-311 ။ [PubMed]
222 ။ ဝမ် ZX, Insel TR ။ voles အတွက်မိဘအပြုအမူ။ Adv လေ့လာမှုပြုမူနေ။ 1996; 25: 361-384 ။
223 ။ ဝမ် ZX, Zhou L ကို, Hulihan တီဂျေ, Insel TR ။ အလယ်ပိုင်း vasopressin နဲ့ microtine ကြွက်များတွင် oxytocin လမ်းကြောင်း၏ Immunoreactivity: တစ်အရေအတွက်နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု။ J ကို comp Neurol ။ 1996; 366: 726-737 ။ [PubMed]
224 ။ ဝမ် ZX, Hulihan တီဂျေ, Insel TR ။ လိင်နှင့်လူမှုရေးအတွေ့အကြုံအပြုအမူနှင့်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်အာရုံကြော activation ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1997; 767: 321-332 ။ [PubMed]
225 ။ ဝမ် ZX, Young က LJ, လျူ Y ကို, Insel TR ။ မျိုးစိတ် vasopressin အဲဒီ receptor အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု binding အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ထင်ရှားနေသောခေါင်းစဉ်: မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာနှင့် montane voles အတွက်နှိုင်းယှဉ်ခန္ဓာဗေဒလေ့လာမှုများ။ J ကို comp Neurol ။ 1997; 378: 535-546 ။ [PubMed]
226 ။ ဝမ် ZX, လျူ Y ကို, Young က LJ, Insel TR ။ Hypothalamic vasopressin ဗီဇစကားရပ်တစ်ခု biparental ကြွက်များတွင်နှစ်ဦးစလုံးယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုရွှေ့ဆိုင်ထဲမှာတိုးပွားစေပါသည်။ J ကို Neuroendocrinol ။ 2000; 12: 111-120 ။ [PubMed]
227 ။ Wideman CH, Murphy က HM ။ Vasopressin, မိခင်အပြုအမူများနှင့် pup သုခချမ်းသာ။ Cur psyche: Res ဗျာ 1990; 9: 285-295 ။
228 ။ Williams က JR, Carter က CS, အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် Insel တီ Partner preference ကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတမိတ်လိုက်သို့မဟုတ် oxytocin ၏ဗဟိုပြုတ်ရည်များကလွယ်ကူချောမွေ့နေပါတယ်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 1992; 652: 487-489 ။ [PubMed]
229 ။ Williams က JR, Catania KC, Carter က CS ။ အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး (Microtus ochrogaster): လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Horm ပြုမူနေ။ 1992; 26: 339-349 ။ [PubMed]
230 ။ Wilson က SC ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာနှင့်မြက်ခင်း voles အတွက်မိဘ-Young ကအဆက်အသွယ်။ J ကိုနို့တိုက်သတ္တဝါများ။ 1982; 63: 301-305 ။
231 ။ Winslow JT မိပြီ N ကို, Carter က CS, Harbaugh CR, Insel TR ။ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ Bond အတွက်ဗဟို vasopressin တစ်အခန်းကဏ္ဍ။ သဘာဝ။ 1993; 365: 545-548 ။ [PubMed]
232 ။ ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ Dopamine, သင်ယူမှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှု။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2004; 5: 483-494 ။ [PubMed]
233 ။ Witt DM, Carter က CS, Lnsel TR ။ oxytocin အဲဒီ receptor အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် binding: endogenous နှင့် exogenous oestradiol ဆွ။ J ကို Neuroendocrinol ။ 1991; 3: 155-161 ။ [PubMed]
234 ။ dopamine receptors Synaptic plasticity သြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါအရာအားဖြင့်ဝံပုလွေ ME, Mangiavacchi S ကို Sun, X တို့မှာယန္တရားများ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2003; 1003: 241-249 ။ [PubMed]
235 ။ Wolff Jo, Dunlap AS ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက် multi-အထီးမိတ်လိုက်, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်အမှိုက်သရိုက်များအရွယ်အစား (Microtus ochrogaster) ပြုမူနေ Processes ။ 2002; 58: 105-110 ။ [PubMed]
236 ။ Yirmiya N ကို, Rosenberg ကကို C, လေဝိ S က, ဆော်လမွန်က S, Shulman ကို C, Nemanov L ကို, Dina ကို C, Ebstein RP ။ တစ်မိသားစု-based လေ့လာမှုမှာ 1a အဲဒီ receptor (AVPR1a) ဗီဇနှင့်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ vasopressin ဟာမိုင်နိုအက်စစ်တို့အကြားအစည်းအရုံး: လူမှုဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်မှုအားဖြင့်စေ့စပ်ဖြန်ဖြေ။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006; 11: 488-494 ။ [PubMed]
237 ။ လူငယ်တို့ Ka, လျူ Y ကို, ဝမ် Z. လူမှုရေးပူးတွဲမှု၏ neurobiology: အပြုအမူ neuroanatomical နှင့် neurochemical လေ့လာမှုများမှတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်ချဉ်းကပ်နည်း။ comp ထဲကဓာတုပစ်စညျး Physiol ကို C Toxicol Pharmacol ။ 2008; 148: 401-410 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
238 ။ လူငယ်တို့ Ka, Gobrogge KL, ဝမ် ZX ။ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်လူမှုရေးအပြုအမူ၏မူးယစ်ဆေးများအကြားအပြန်အလှန်ထိန်းညှိအတွက် mesocorticolimbic dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2010 Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2010.06.004 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
239 ။ လူငယ်တို့ LJ, Huot B, Nilsen R ကို, ဝမ် Z ကို, Insel TR ။ ကမကထပာ၏နှိုင်းယှဉ်ဆန်းစစ်: ဗဟို oxytocin receptor မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်အတွက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှု။ J ကို Neuroendocrinol ။ 1996; 8: 777-783 ။ [PubMed]
240 ။ လူငယ်တို့ LJ, Waymire ကီလိုဂရမ်, Nilsen R ကို, Macgregor ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, ဝမ် Z ကို, Insel TR ။ အဆိုပါ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole oxytocin receptor မျိုးရိုးဗီဇ Transgene ကြွက်များတွင်တစ်ရှူး-တိကျတဲ့စကားရပ်ညွှန်ကြား၏5'' flanking ဒေသ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 1997; 807: 514-517 ။ [PubMed]
241 ။ လူငယ်တို့ LJ, Winslow JT, Nilsen R ကို, Insel TR ။ အမူအကျင့်အကျိုးဆက်များ: monogamous နှင့် nonmonogamous voles အတွက် V1a receptor မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်အတွက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှု။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1997; 111: 599-605 ။ [PubMed]
242 ။ လူငယ်တို့ LJ, ဖရန့်အေသဲသောင်ပြင်ဆုချီးမြှင့်။ oxytocin နှင့် vasopressin receptors နှင့်မျိုးစိတ်-ပုံမှန်လူမှုရေးအပြုအမူ။ Horm ပြုမူနေ။ 1999; 36: 212-221 ။ [PubMed]
243 ။ လူငယ်တို့ LJ, Nilsen R ကို, Waymire ကီလိုဂရမ်, MacGregor ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Insel TR ။ တစ်ဦး monogamous vole ထံမှ V1a အဲဒီ receptor ဖော်ပြကြွက်တွေမှာ vasopressin တိုးမြှင် Affiliate တုံ့ပြန်မှု။ သဘာဝ။ 1999; 400: 766-768 ။ [PubMed]
244 ။ လူငယ်တို့ LJ, Lim က MM, Gingrich B, Insel TR ။ လူမှုရေးပူးတွဲမှု၏ဆယ်လူလာယန္တရားများ။ Horm ပြုမူနေ။ 2001; 40: 133-138 ။ [PubMed]
245 ။ လူငယ်တို့ LJ, ဝမ် Z. pair တစုံဘွန်း၏ neurobiology ။ နတ် neuroscience ။ 2004; 7: 1048-1054 ။ [PubMed]
246 ။ Ziegler TE, Jacoris S က, Snowdon မှန် CT ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွေးမြူယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဝါဂွမ်း-ထိပ်တန်း tamarins အကြားဆက်သွယ်ရေး (Saguinus oedipus), နှင့်မွေးကင်းစကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရန်၎င်း၏ဆက်ဆံရေးမျိုး။ နံနက် J ကို Primatol ။ 2004; 64: 57-69 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]